လိင်ဟာသ by Moon John - issuu
လိငဟ်ာသများ စုစည်းမှု အပိငုး (၃) " လုပအ်ား " ကွန်ပျူတာ တင်ထားသော စားပွဲရှေ့ တွင် စာရေးမ နှစ်ဦး ထိုင်နေကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည်။ " ယူ သိလား..ဒီကွန်ပျူတာလေးဟာ ယောင်္ကျား ဆယ်ယောက်ရဲ့ လုပ်အားကို
" ယူပြောတာ မှန်ကောင်းမှန်မယ်....ဒါပေမဲ့ ..အိုင်ကတော့ ..ဘာပဲပြောပြော
" အထင်မလွဲပါနဲ့"ြ မို့ တစ်မြို့ တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးသည် ။ မီးရှို့ သူကို ဖမ်းမိသည် ။ မီးလောင်ခံရသော အိမ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အိမ်တွင်
နေသော ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ( ဂျူး )ကို သက်သေအဖြစ် တရားရုံးက ဆင့်ခေါ်သည် ။ တရားသူကြီးက မေးသည် ။
" သက်သေ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ .အဲ့ဒီညက မြင်သမျှကို ရုံးတော်ကို ပြောပြပါ "
" ဟုတ်ကဲ့..အသံဗလံတွေကြောင့် ကျနော် အိပ်ယာက နိုးသွားတယ် ..ဒါနဲ့ဇနီးသည် ဆာရာရဲ့ဂါဝန်ကို
အောက်ပိုင်းကနေ မ တင်လကိုတယ်.."
" အိပ်ယာထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ လင်မယား ဘာလုပ်ကြတယ်ဆိုတာ ပြောမနေ
နဲ့ ..မေးတာကိုပဲ ဖြေပါ.."
" ဟုတ်ကဲ့..ဆာရာရဲ့ဂါဝန်ကိုအောက်ကနေ မ တင်လိုက်တယ် ...ကြည့်လိုက်တယ်.." " သက်သေ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ..မဆိုင်တာကို မပြောပါနဲ့"
" ဟုတ်ကဲ့..ဆာရာရဲ့ဂါဝန်ကို အောက်ကနေ မ တင်လိုက်ပြီး သေသေချာချာ
" မဆိုင်တာကို မပြောနဲ့ လို့ဘယ်နှစ်ခါ သတိပေးရမလဲ..ရုံးတော်ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်မှုနဲ့ခင်ဗျားကို အရေးယူ
" ပြတင်းပေါက်ခန်းဆီးကို ဆာရာရဲ့ ဂါဝန်နဲ့ချုပ်ထားတာ .ကျနော့် အပြစ်လား
" တတိယလူ " ( ဆိုဗီယက် ယူနီယတွံင် ယခင်က ဗော့ဒ်ကာအရက်တစ်ပုလင်းကို သုံးရူဘယ်သာ ပေးရသည် ။ သို့ သော် သုံးရုဘယ်ပင်
မတတ်နိုင်သော ဇိ်ုးသမားအချို့ မှာ မိမိတွင်ပါသော တစ်ရူဘယ်ကို လက်ထဲကိုင်ကာ ဘ၀တူများကို အဖော်လိုက်စပ်ရသည် ။ နှစ်ယောက်ရှိဦး
တော့ မသောက်နိုင်သေး..၊ တတိယလူ လာသည်အထိ စောင့်ကြရသည် ။ ) အလုပ်သွားမည့် ယောင်္ကျားအတွက် မိန်းမက ထမင်းချိုင့် ပြင်ပေးနေသည် ။
တတိယလူ အဖြစ်နဲ့ ပေါင်းသောက်နိုင်အောင် ငါ့ကို
" ရှင်..စောစောတော့ အိမ်ပြန်လာနော်..နို့ မဟုတ်ရင် ရှင် ပထမလူ ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး..."
" ရင်ခနုသ်ံ " အဖေဖြစ်သူသည် ၁၇ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကို ဘေးတွင် ထိုင်စေကာ ကားမောင်းလာသည် ။ တစ်နေရာတွင် ဂျင်းဘောင်းဘီ
၀တ် ဆံရှည်ကိုယ်တော်တစ်ယောက်ကို တွေ့ သည် ။ အဖေက သမီးကို မေးသည် ။ " သမီး...အခုတွေ့ ခဲ့တဲ့ ဆံရှည်ကိုယ်တော်ဟာ ယောင်္ကျားလား ..မိန်းမလား.." " ယောင်္ကျားလေးပါ ဖေဖေ "
" သမီး ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲ.."
" သမီး ..ရင်ခုန်သွားလို့ ပါ.."
" ဒန်းစီးခြင်း " ရှေ့ တိုးလိုက်...နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ..အောင်မယ်လေး...ကောင်းလှချည်လား.."
" အမေ့ဆသွီား " သည်းမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပြန်အော်သည် ။
" ရှင် ကျမကို နှိပ်စက်တာ လွန်လွန်းပြီ..ဘယ်မိန်းမမှ ရှင့်အနွံအတာကို
" မခံနိုင်ရင်..မင်းအမေဆီ လိုက်သွား...မတားဘူး.." " ကျမ အမေ ဆုံးသွားပြီဆိုတာ ရှင် သိတယ်မဟုတ်လား.." " အေး..သိလို့ ပြောတာပေါ့ကွ .."
" ၇ ကောင်မြောက်နွား" လယ်သမားကြီး ကိုချူချာသည် နွားထီးခြောက်ကောင်ကို တစ်ဘက်ရွာတွင် သွားဝယ်သည် ။ တစ်ကောင်ပေါ်တက်ထိုင်ပြီး
ကျန်နွားများကို မောင်းကာ ရွာသို့ ပြန်လာသည် ။ လမ်းတွင် နွားများကို ရေတွက်ကြည့်သည် ။ " တစ်..နှစ် .သုံး..လေး..ငါး.." ပြန်ရေသည် ။
" တစ်..နှစ် .သုံး..လေး..ငါး.."
ဘယ်လိုပဲ ရေရေ ငါးကောင်ထက် မပိုချေ ။ လယ်သမားကြီးကိုချူချာ
အာခေါင်ခြောက်လာသည် ။ ရင်ခုန်သံ မြန်လာသည် ။
အိမ်ရှေ့ ရောက်သောအခါ မိန်းမက ၄င်းကို ဆီးကြိုသည် ။
" ၀ယ်တုန်းက ခြောက်ကောင်..၊ အခုမှ ငါးကောင်ထဲ ဖြစ်နေမှန်း သိရတယ် .." ငိုသံကြီးနှင့်
မိန်းမကို ပြောသည် ။ မိန်းမက
အသံထွက်အောင် ရယ်လျက် ပြန်ပြောသည် ။
" အင်မတန် ထုံ ၊ အင်မတန် အ တဲ့ ယောင်္ကျားပါလား...ကဲ..နွားပေါ်က ဆင်းလိုက် ပြီးရင်
၇ ကောင်စလုံးကို တွေ့ ရမယ် "
" မယံနုငို ဘ်ူး " အီဗန်နော့က မိမိနှင့်အတူ ညစာလိုက်စားရန် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပီထရော့ ကို အိမ်ခေါ်လာသည် ။ အိမ်ခန်းထဲ ၀င်ဝင်ချင်း
အီဗန်နော့က " မင်း ဒီနေ့ သိပ်လတှာပဲ " ဟုပြောကာ ဇနီးသည်ကို နမ်းသည် ။ ညစာကို အရသာရှိစွာ စားအပြီးတွင် မိန်းမကို အီဗန်နော့က
ချီးကျူးပြီး ထပ်နမ်းသည် ။ အမျိုးသမီး မီးဖိုချောင်ဘက် ခဏထွက်သွားချိန်တွင် ပီထရော့က သူငယ်ချင်းကို မေးသည် ။
" မင်း မိန်းမကို မင်း ဒီလိုပဲ အမြဲတမ်း ဆက်ဆံသလားကွ " " ဟုတ်တယ်..ဒီလိုဆက်ဆံတာဟာ တို့ ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး သာယာမှုကို အများကြီး
အခါ ဇနီးသည်ကို ပီထရော့ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ဖွဖွလေး နမ်းသည် ၊ နှုတ်မှလည်း ပြောသည် ။
" မင်း ဒီနေ့ သိပ်လှပါလား.မိန်းမရေ...ဒီလို မိန်းမမျိုး ရထားတဲ့အတွက် ငါ့လောက်
လောကမှာ ရှိမယ် မထင်ဘူးဟေ့.." ပီထရောကို လုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဟန်ဖြင့် မိန်းမက မျက်လုံးပြူးပြီး ကြည့်သည် ။ ထို
" ဟဲ့..ဟဲ့..ဘာဖြစ်လို့ ငိုရတာတုံး "
ပီထရော့ အံ့သြသံဖြင့် မေးသည် ။ ခြေမကိုင်မိ ၊ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်သွားသည် ။ မိန်းမက
" ကြည်သေ့ာသူ မြင်၏ " တယ်လီဖုန်းသံ မြည်လာသဖြင့် ဟိုတယ်မန်နေဂျာ တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။ တစ်ဘက်မှ အမျိုးသမီး
တစ်ဦး၏ စိတ်ဆိုးဆိုးနှင့် ပြောသံကို ကြားရသည် ။ " ကျမ အခန်းနံပါတ် ၁၅ က ပြောနေတာ ..၊ ရှင်တို့ ဟိုတယ်က အင်မတန်
နဲ့တည့်တည့်အခန်းမှာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီး လျှောက်သွားနေတယ် ၊ ဒီလိုအရုပ်ဆိုးတဲ့ လုပ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့် ပစ်ပါလို့ကျမ တောင်းဆိုတယ် "
" ဟုတ်ကဲ့..ကျနော်အခုပဲ အစ်မကြီး အထပ်မှာတာဝန်ကျတဲ့ ၀န်ထမ်းကို
အမျိုးသမီး၏ အခန်းသို့တာဝန်ကျသည့်ဝန်ထမ်း ရောက်လာသည် ။
ပြတင်းပေါက်ဖက် သွားကာ ရှေ့ တည့်တည့်မှ
အခန်းကို ကြည့်သည် ။ ဟုတ်သည် ။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အ၀တ်အစားမပါပဲ အခန်းထဲတွင် ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လျှောက်နေသည် ။ ၀န်ထမ်းက ပြောသည် ။
" အစ်မကြီးပြောတဲ့ အတိုင်းသူ့ ဆီမှာ ဘာအ၀တ်အစားမှ မပါဘူး..ဒါပေမဲ့
သူဘယ်နေရာ လျှောက်သွား လျှောက်သွား
သူ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို မမြင်ရပါဘူးခင်ဗျ .."
" မမြင်ရဘူး..ဟုတ်လား.. လာစမ်းပါ..ကျမကုတင်ပေါ်က တက်ကြည့်စမ်း..မမြင်ရဘူးတဲ့..ဟင်းးးးး"
" မရှိပင် မရှေိသ်ာလည်း " မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" ကျမကို ဆယ်ဒေါ်လာပေးပါ ..ဘရာစီယာ ၀ယ်ချင်လို့" " ဘာလို့ ဝယ်မှာလဲ...ဘရာစီယာထဲ ထည့်ရအောင် မင်းဆီမှာမှ မရှိဘဲနဲ့"
" သြော်..ဒီလိုလား...ရှင်ကော ဘာဖြစ်လို့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်သလဲ.."
" အကြံကောင်း " " ကျမ ယောင်္ကျား အိမ်ပြင် ခဏခဏ မထွက်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟင်.." " သူနဲ့ အတူတူ လိုက်ထွက်.."
" ရာဇသတ် ကျင့်ထုံး ဥပဒေသစ် " " ပိုးပန်းသူများသော အမျိုးသမီးမှန်သမျှ မိမိနှစ်သက်ရာ တစ်ယောက်ကို ရွေးယူပြီး ကျန်ယောင်္ကျားများကို လိုအပ်နေသူများအား လွှဲပြောင်းပေးရမည် ။ "
" မျက်နှာအလှပြင်ဆေး အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသူ အမျိုးသမီးများအား သက်သေအထောက်အထား စာရွကစ်ာတမ်း
တို ကို့ အတုလပုသ်အူဖြစ် အရေးယူရမည် ။ "
" ယောင်္ကျားတို့ ကို ဂရုမစိုက်သော အမျိုးသမီးများအား ဒုကခ်ရောက်နေသူကို
လျစ်လျူရှမှု ဖြင့် အရေးယူရမည်။ " အရေးယူရမည် ။ "
" မိမိ၏ ချစ်သူကို တစ်ခါမျှ မနမ်းဘူးသော လူငယ်တို့ ကို အလုပတ်ာဝန် လစ်ဟင်းမှုဖြင့် " မိမိချစ်နေသူကို ချစ်နေကြောင်း ဖွင့်ပြောရန် မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေသူ လူငယ်တို့ ကို
စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ေပြးသူအဖြစ်
အရေးယူရမည် ။ "
" လမ်းပေါ်တွင် ဖက်ရမ်း နမ်းရှုပ် နေသော စုံတွဲကို လမ်းစည်ကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် အရေးယူရမည် ။ "
" ကလေးမရှိသော လင်မယားတို့ ကို အလုပတ်ာဝန် ပေါ့လျော့မှု ဖြင့် ခုံရုံးတင်ရမည် ။ " " အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတို့ ကို လိက်ုပိုးနေသူ ယောင်္ကျားများအား တားမြစ်နယ်မြေတွင်
အမဲလကိုမှုဖြင့် အရေးယူရမည် ။ "
" ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်ချင်ယောင်ဆောင်သော မိန်းမများအား
တစ်ဖက်လကိူု နာကျင်စေမှုဖြင့်
" သူတစ်ပါး၏ မယားနှင့် တိတ်တဆိတ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူကို ပိငုရ်ငှ်၏ခွငြ့် ပုချက်မရဘဲ ယူငင်သုးံ စွဲမှု ဖြင့်
" သူတစ်ပါး၏ ယောင်္ကျားနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးအား မီတာဘောက်စ် မထားဘဲ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား
သုံးစွဲမှုဖြင့် အရေးယူရမည် ။ "
" မိမိ၏ မိခင်အိမ်တွင် မယားဖြစ်သူကို အတင်းနေခိုင်းသူအား လူကောင်းကို
အရူးထောင်သို ပို့ သ့အူဖြစ် အရေးယူရမည် ။ "
" အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်အထိ အိမ်ထောင်မပြုသူ ယောင်္ကျားများအား
အလုပခ်ျိန်အတွင်း စက်ကုရိပ်ထားသူအဖြစ် အရေးယူရမည် ။ "
" ရည်းစားများများထားသော အမျိုးသမီးများအား နိငုင်ေံတ်ာပငိုပစ်စည်းခိုး ယူမှုဖြင့် အရေးယူရမည် ။ "
" အသက် ၂၅ ပြည့်ပြီးသော်လည်း တစ်ခါမျှ အိမ်ထောင်မပြုသေးသော
" ကျောင်းတုန်း က အကျင့် " " မေရီ..ယူ့ ယောင်္ကျားကို ယူ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက သူ့ နောက်ပါအောင် မြူဆွယ်သွားတယ်ဆို ..." ကတည်းက
" ဟုတ်တယ်..ဒါပေမဲ့ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး အဲ့ဒါ သူ့ အကျင့်ပဲ..ကျောင်းသူဘ၀ အိုင့် ဆီက သူ ကူးချနေကျ.."
" သံုး ...သံုး လီ...ကိုး .." အိမ်ထောင်သက် နှစ်နှစ်ကျော်သည့်တိုင် ..ကိုဘမောင်တို့ က မလျှော့.. ဇနီးသည် မမြကို
တစ်နေ့ သုံးခါဆွဲသည် ။
အိပ်ရာဝင် တစ်ခါ..လင်းဆွဲလေးကတစ်ခါ..နေ့ လည်လူရှင်းတာနဲ့ တစ်ခါ...၊ ကြာတော့ ချစ်လို့ ယူထားသည့် ဇနီးသည်မှာ..ငြီးငွေ့ ချင်လာသည်။
မီးစိမ်းလဲ မောင်း..မီနီးလဲ ဖြတ်မောင်းနှင့်..တစ်ရက်တစ်လေမှ နားရသည် မရှိ..။
တစ်ရက်..ကိုဘမောင် ခရီးသွားရမည်..၊ မမြ က ခြံဝကိုလိုက်ပို့ သည် ။
" မကြာပါဘူးကွာ..သုံးရက်ထဲပါ..မသွားမဖြစ်လို့ သွားရတာ..မင်းလဲ သိသားနဲ့ .."
မမြ ဘာမှ ပြန်မပြောပါ..ပြုံးရုံလေး..ပြုံးပြသည် ။ သူ့ မျက်နှာမှအပြုံးကို ကြည့်ပြီး
စကားကြောင့် မမြ ချုံးပွဲချ ငိုတော့သည် ။
" ပြုံး ပြုံး ..ပြုံး ပြုံး လုပ်မနေနဲ့..သုံး..သုံးလီ...ကိုးပဲ..."
" ကြားချင်တယ် " ဦးကြီးဘမောင် က အရီးလေးမြကို ပြောသည် ။ " ဗွီဒီယိုထဲက ကောင်မလေးတွေ..အခုလိုလုပ်နေချိန် ညည်းလိုက် အော်လိုက်တာများ
စိတ်တောင် ပိုထလာတယ် ညည်းပါဦးကွာ..."
မင်းကတော့..ပက်လက်ကမလှုပ်..အသေကောင်ကြီးကျ နေတာပဲ..နည်းနည်းပါးပါး အရီးလေးမြ ညည်းသည် ။
" မိုးတွေကရွာ..စပါးတွေကပျက်..ကိုတရုပ်ဆိုင်က အကြွေးတွေ ဘယ်လိုဆပ်မလဲ..လုပ်ပါဦး ကိုဘမောင်ရယ်.."
ဦးကြီးဘမောင် ကွပ်ပျစ်ပေါ်က ဆင်းပြီး အိမ်ရှေ့ ကပြင်မှာ သွားထိုင်နေတော့သည်
" အခြေအနေ မကောင်းဘူး " နာမကျန်းဖြစ်နေသော လင် မယား နှစ်ယောက်ကို ဆရာဝန်က အိမ်တိုင်ရာရောက် လာကာ
စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ဆွေမျိုးများက ၀ိုင်းမေးသည် ။
" အခြေအနေ စိုးရိမ်ရသလားခင်ဗျာ.." " အင်း...နှစ်ယောက်စလုံး မကြာခင် မုဆိုးဖို နဲ့မုဆိုးမ ဖြစ်ကြဖို့ ရှိတယ် "
" အလိကုက်မ်းဆိုး မသိတဲ့ တပည့် " သူဌေးက သူ၏ ယာဉ်မောင်းကို ပြောသည် ။
" ယဉ်ကျေးမှု " လူပျိုလေး ကိုချူချာသည် ၄င်းချစ်သူ၏အိမ်တွင် ညမိုးချုပ်သည်အထိ ထိုင်စကားပြောနေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ
ရွာသည် ။ ကိုချူချာ ချစ်သူ၏ အမေက ပြောသည် ။ " မိုးတွေ ဒီလောက်ရွာနေတာ မင်း အိမ်မပြန်နဲ့ တော့.. ဒီည ဒီမှာပဲအိပ်..ဟုတ်လား.."
" ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးပါပဲ " ဟုပြောကာ ခဏအကြာတွင် ကိုချူချာ ပျောက်သွားသည် ။ ညသန်းခေါင်အချိန်ကျမှ တစ်ကိုယ်လုံး
မိုးရေများ စိုရွဲပြီး ပြန်ရောက်လာသည် ။ ယောက်ခမလောင်းကြီးက မေးသည် ။ " ဟဲ့..မောင်ချူချာ..မင်း ဘယ်ပျောက်သွားတာလဲ.."
" ဒီည အိမ်ပြန်မအိပ်တော့ဘူးဆိုတာ အမေ့ကို ပြန်အသိပေးတာပါ.."
" ထိကုတ်န်သူ " စာရေးဆရာသည် မြို့ မျက်နှာဖုံးဖြစ်သူ ၄င်း၏ ယောက်ခမ( အဟောင်းကြီး) ၏ လော်လည် ဖေါက်ပြားမှု အကြောင်းကို ဆောင်းပါး
ရေးသည် ၊ ဆောင်းပါးကို ဒီလို အဆုံးသတ်ထားသည် ။ " မစ်စ် မာရီယာသည် ၄င်း၏မျက်နှာကို တံတွေးဖြင့် ထွေးရန်ပင် ထိုက်တန်သူ မဟုတ်ပါ
" ဟု ဖြစ်သည် ။ မစ်စ် မာရိယာ က
အသရေဖျက်မှုဖြင့် ဆောင်းပါးရှင်ကို တရားစွဲသည် ။ သတင်းဂျာနယ်သည် မိမိ မှားယွင်းကြောင်း ဖော်ပြရမည် ဟု ရုံးတော်က အမိန့် ချသည်။
ရုံးတော်၏ အမိန့် နှင့်အညီ အယ်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ်သော စာရေးဆရာ က ပြန်လည်ဖော်ပြသည် ။
" မစ်စ် မာရီယာသည် ၄င်း၏မျက်နှာကို တံတွေးဖြင့် ထွေးရန်ပင် ထိုက်တန်သူ မဟုတ်ပါ
ဟု မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါသည် ။
အမှန်မှာ ထိုက်တန်သူ ဖြစ်ပါသည် ။ "
" တစ်ဝက်ပြန်ပေးမယ် " ကွယ်လွန်သွားသော ယောင်္ကျား၏ အသက်အာမခံကြေး ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ကို ဇနီးဖြစ်သူ မုဆိုးမက
မိန်းမက ငိုရင်း ပြောသည် ။ "
ကိုကို ပီတာရယ်...ရှင့်အပေါ်ထားတဲ့ ကျမရဲ့အချစ်က ကြီးမားတာနဲ့ အမျှ ကျမ
ရှင်သာ ကျမ အနား ပြန်ရောက်လာမယ် ဆိုရင်လေ...ရတဲ့ငွေရဲ့တစ်ဝက်ကို ပြန်ပေးဖို့ 
၀န်မလေးပါဘူး တော်..ဟီး ဟီး "
" အရက်တန်ခိုး " ဖိတ်ကြားထားသောအိမ်တွင် အိမ်ရှင်များ တည်ခင်းကျွေးမွေးသည်ကို လင်မယားနှစ်ယောက် စားသောက်နေကြသည် ။
မိန်းမဖြစ်သူသည် ယောင်္ကျားကို အတန်ကြာ စိုက်ကြည့်နေပြီးနောက် ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုသည် ။
" ဟေ့...ငါ .တစ်ခွက်တည်း သောက်တာပါကွ.." ယောင်္ကျားက မကျေမချမ်း ပြောသည် ။
" တိကုဆ်ငို မ်ှု " လူငယ်တစ်ယောက် မော်စကိုမြို့ သို့ရောက်လာပြီး အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့လိုလိုဖြင့် အော်ဒါလိုက်သော အမျိုးသမီးများကို
ဘယ်မှာတွေ့ နိုင်သနည်း ဟု တုတ်ခိုင်ထွားကြိုင်းသော အငှားယာဉ်မောင်းကို မေးလိုက်သည် ။ " မက်ထရို (မြေအောက်ရထား ) နဲ့တော်လနှေ်ရးလွငြ် ပင်
အတိုင်းလျှောက်..၊ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ကို မောင်ရင်တွေ့ ပါလိမ့်မယ် " ကားသမားပြောသည့်အတိုင်း လူငယ် ရထားစီးသည် ။ သို့ သော် မော်စကိုမြို့ တွင် လူစိမ်းဖြစ်သဖြင့် သွားရမည့်ဘူတာ
မရောက်ဘဲ ကီးယက်စကားယား ဘူတာသို့ ရောက်သွားသည် ။ မြေပေါ်တက်ပြီး လမ်းလျှောက်သည် ။ ခဏအကြာတွင် အမျိုးသမီး
တစ်ယောက်နှင့် အပေးအယူ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးက သူမ အိမ်ကို ခေါ်သွားသည် ။ လူငယ်က ကုတ်အင်္ကျီနှင့် လည်စီးတို့ ကို ချွတ်ရုံသာ ရှိသေး
သည် ၊ အခန်းအပြင်မှ တံခါးကို သော့ဖြင်ဖွင့်သံ ကြားရသည် ။ အမျိုးသမီးက စိုးရိမ်တကြီး ပြောသည် ။ " ကျမ ယောင်္ကျား ပြန်လာတာရှင့် မီးဖိုချောင်ဘက် မြန်မြန်သွားပြီး ရေပိုက်ပြင်နေတဲ့ပုံ
ဟန်ဆောင်ပါ ၊ ကျမက ခေါ်လိုက်
လို့ရေပိုက်သမား ရောက်နေတယ်လို့ယောင်္ကျားကို ပြောမယ် .."
မီးဖိုချောင်ဘက် လူငယ်ပြေးသည် ။ တံခါးပွင့်လာပြီး ယောင်္ကျား ၀င်လာသည် ။ မိနစ် အနည်းငယ် ကြာသော် မီးဖိုချောင်
ဘက် ၀င်လာပြီး လူငယ်ကို ကြည့်သည် ။ "
" ဟေ့..မင်း ပါလားကွ.. တော်လနှေ်ရးလွငြ် ပင် မှဆင်းလို့မင်းကို ငါ ပြောမိတယ် ထင်ပါ့
" မကြိုက်တာချင်းတော့ အတူတပဲူ " သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။ " ငါ ညဘက် နောက်ကျမှ ပြန်ရောက်ရင် ငါ့မိန်းမက ငါ့ကိ်ု စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘူး နာရီကိုပဲ စိုက်ပြီး ကြည့်နေတယ် "
" ဒါ တော်သေးတာပေါ့..ငါ့ မိန်းမဆို ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်တယ်ကွ "
" တော်သေးတာပေါ့ " ရေတပ်သား နှင့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးတို့ကပွဲခန်းမတွင် တွဲကနေကြသည် ။ ရေတပ်သားက ပြောသည် ။ " ဟိုနားက ရေတပ်အရာရှိကြီးကို တွေ့ လား ၊ ကျနော် တွေ့ ဖူးသမျှ
အရာရှိတွေအထဲမှာ မုန်းစရာ အကောင်းဆုံးပဲ "
" ရှင် ကျမကို ဘယ်သူ ဆိုတာကော သိရဲ့ လား..ကျမက အဲ့ဒီအရာရှိကြီးရဲ့ သမီးရှင့်
" ကျနော် ဘယ်သူဆိုတာကော ခင်ဗျားသိသလား " " ဟင့်အင်း...မသိဘူး "
" အင်း တော်ပါသေးရဲ့ 
" ဖတ်ထားမှပေါ့ " မိန်းမက ယောင်္ကျားကို အပြစ်တင်သံဖြင့် ပြောသည် ။
" ရှင့်ဟာက ဘယ်လိုလဲ...ရုံးက ပြန်လာတယ် ..ညစာစားတယ်..ပြီးရင်
အိပ်ကြရအောင်လို့ ပဲ ပြောတယ်..
နောက်တစ်နေ့ ..ယောင်္ကျားဖြစ်သူ.ရုံးက ပြန်လာသည် ၊ ညစာ စားသည် ၊ထို့ နောက်
မိန်းမကို မေးသည် ။
" မိန်းမရေ..မင်း..ကိုချန်းကိုရဲ့ကျနော့သနူာပြုဆရာမလေး ဖတ်ဖူးလား " " ဟင့်အင်း.."
" အဲ့ဒါဆို..လာကွာ..အိပ်ရာထဲ သွားကြရအောင်..."
" ဘယ်သလူာလို့ထွေးပါ့မယ် " မနက်စောစောတွင် နှိုးစက်နာရီ မြည်လာသည် ။ ယောင်္ကျားက မထချင် ထချင်နှင့် ထကာ အမဲလိုက်ထွက်ရန် ပြင်သည်။
မိန်းမက ၄င်းအား မသွားရန် ပြောသည် ။
" ဒီလောက်အစောကြီး ရှင်ဘာဖြစ်လို့သွားမှာလဲ..လမ်းမှာ ပိန်းပိတ်အောင်
မှောင်နေတုံး..ချမ်းကလဲ ချမ်းပါဘိနဲ့ 
လေကလည်း တိက်ုနေသေးတယ် မသွားပါနဲ့ ရှင်.." မိန်းမက မည်သို့ ပင်တားသော်လည်း ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နားမထောင်ဘဲ လမ်းပြင်
ထွက်သည် ။ မိမိအားဝင်ခေါ်မည့်မိတ်ဆွေများကို
စောင့်သည် ။ တစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ မည်သူမှ ပေါ်မလာချေ ။ ခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းလာသည်နှင့်
အိမ်ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ အိမ်ထဲဝင်ပြီး အ၀တ်အစားများကို ချွတ်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် မိန်းမအနားကပ်ပြီး စောင်အောက်ကို လျှိုဝင်လိုက်သည် ။ ပါးစပ်မှလည်း ပြောသည် ။ " အောင်မယ်လေး..လေး..ချမ်းလိုက်တာ.." မိန်းမက သဘောတူသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကြားထဲ..အိမ်က ဘဲနာကြီးက အမဲလိုက်ဆိုပြီး ထွက်သွားလေရဲ့"
" အဖေ့ကို အားမကိုးနဲ့" အဖေဖြစ်သူ နယ်သို့ခရီးထွက်သွားသည် ။ အမေဖြစ်သူမှာ ညဉ့်နက်မှ ရုံးမှ ပြန်လာသည် ။ တစ်ကိုယ်လုံး အ၀တ်အစား
သစ်သစ်လွင်လွင်နှင့် ဖြစ်သည် ။ ကလေးများက ၀မ်းသာအားရ ဆီးကြိုပြီး ပြောကြသည် ။
ကြောက်တယ်ရငှ့် "
ကိုဟိုဒင်း...ရှင့်ကို ကျမ ကြောက်တယ်ရှင့် . " "
ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
ရှင်...ကျမကို အဓမ္မကျင့်မှာ မို လို့ ပေါ့ "
မဟုတ်တာ...ခင်ဗျားက ငါးထပ်တိုက်ပေါ်မှာ..ကျုပ်က လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ဟာ.."
" ဘ၀တူ " ပီတာလေး လမ်းဘေးတွင် ထိုင်ကာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေသည် ။ ဖြတ်သွားသော အဖိုးကြီးတစ်ဦးက အကြောင်းအရင်းကို မေးသည် ။
" ကျနော့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ လူငယ်တွေ လူကြီးတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာကို ကျနော်
မလုပ်နိုင်လို့"
ပီတာလေးဘေးတွင် အဖိုးကြီး ကပ်ထိုင်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် ပီတာလေးနှင့်အတူ
မီလျှံနာသူဌေးကြီး ၏ အိမ်တွင် တယ်လီဖုန်း မြည်သည် ။ စားဖိုမှူးက ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။ " သူဌေးမင်းလား..ခင်ဗျာ.."
" ဟေ့..အခု ငါ ကလပ်ကနေ ဖုန်းဆက်နေတာ.အိမ်အပြန် နောက်ကျမယ်လို့ငါ့
မိန်းမကို ပြောလိုက်စမ်း "
" သူ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားတာ ကြာပါပြီ အိပ်ပျော်နေပြီလို့ထင်ပါတယ် " " သွားသာ ပြောစမ်းပါ "
တယ်လီဖုန်းခွက်ထဲတွင် စားဖိုမှူး ထွက်သွားသံ ပြန်ရောက်လာသံများ ကြားနေရသည်
" သူဌေးမင်း ခင်ဗျား..သူဌေးမင်း အမိန့် ရှိတဲ့အတိုင်း ကျနော်သွားပြီး
သူဌေးမင်းရဲ့ အသံမျိုးနဲ့ထွကသ်ွား လို့ကျနော့ကို အော်ပါတယ်ခင်ဗျာ.."
" ဟေ..ဟုတ်လား..အဲဒါဆိုရင် သေနတ်ယူပြီး ငါ့မိန်းမနဲ့အတူအိပ်နေတဲ့ ငနဲကို ပစ်သတ်လိုက် "
တယ်လီဖုန်းခွက်ထဲတွင် သေနတ်ပစ်သံ..ပြေးလွှားသံများ ကြားရသည် ။
" သူဌေးမင်းခင်ဗျာ..သူဌေးမင်း ပြောတဲ့အတိုင်း ကျနော် လုပ်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ
အမျိုးသားဟာ အိပ်ခန်း ပြတင်းပေါက်က
ခုန်ကျော်ပြီး အိမ်နား ပန်းခြံကတစ်ဆင့် ထွက်ပြေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ "
" ဟေ့..ငါ့ အိမ်နားမှာ ပန်းခြံ မရှိဘူးကွ "
" အဲ့ဒါဆို လူကြီးမင်း ဖုန်းမှာ;ဆက်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် "
" ကတ်သီးကတ်သတ် " ညအချိန်တွင် မိန်းမက ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကိုချူချာကို နှိုးသည် ။ " ကျမ ချမ်းတယ် ရှင့် "
ကိုချူချာ အိပ်ရာမှ ထပြီး စောင်တစ်ထည် ယူလာသည် ။ အချိန်အနည်းငယ်
" ကျမ အိုက်တယ် ရှင့် " ကိုချူချာ အိပ်ရာမှ ထပြီး ပြတင်းပေါက်ကို သွားဖွင့်သည် ။ အချိန်အနည်းငယ်
" ကျမ ယောင်္ကျား လိုချင်တယ်ရှင့် "
" ကတ်သီးကတ်သတ်ကွာ..မနက် နှစ် နာရီလောက်ကြီး ငါက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ယောင်္ကျားတစ်ယောက်
ရှာပေးနိုင်မှာလဲကွ .ဟေ "
" ယောင်္ကျားနဲ တ့တဲူ့သား " ဆရာဝန်က ၀မ်းသာအားရ ပြောသည် ။ " ကြည့်စမ်း..ခင်ဗျားကလေးဟာ မွေးကတည်းက ဘာမှ ဒုက်ခ မပေးဘူး ၊ ညတိုင်များ အိပ်လိုက်တာ တစ်ချက်မှ
မလှုပ်ဘူး.." ကလေးအမေက ကလေးကို ကြည်နူးစွာ ကြည့်ရင်း ပြောသည် ။
" အအိပ်ကြီးတာချင်း အင်မတန် တူတာပဲ " " ဘယ်သူနဲ့ လဲ...သူ့ အဖေနဲ လ့ား.." " ဟင့်အင်း...ကျမ ယောင်္ကျားနဲ့"
" အားကိအုားထား " " မန်နေဂျာကြီးခင်ဗျာ..အိမ် သန့် ရှင်းရေးလုပ်ဘို့သူ့ ကို ကူပါလို့မိန်းမက ပြောတယ်ခင်ဗျ..အဲ့ဒါ. မနက်ဖြန် တစ်ရက်လောက်
" ဒီလို အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့ခင်ဗျားကို ခွင့် မပေးနိုင်ဘူး "
" ကျေးဇူးတင်လိုက်တာခင်ဗျာ..ဆရာ့ကို အားကိုးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျနော် အစကတည်းက သိပြီးသားပါ "
" တောင်းပန်တယ် " အရောင်းစာရေးက လုပ်ငန်းရှင်ကို ပြောသည် ။ " လူကြီးမင်းခင်ဗျာ..ကျနော့်ကို လစာတိုးမပေးရင် ကျနော့်ကို မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလို့မိန်းမက ခြိမ်းခြောက်တယ်ခင်ဗျ
အဲ့ဒါ ကျနော့်ကို လစာ တိုးမပေးပါနဲ့ခင်ဗျာ "
" ချို မထွကလ်ို့" ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံ လာပြသည် ။ ..ဒါပေမဲ့
" ဒေါက်တာ..ဆိုကြပါစို့ ..ကျနော့်မိန်းမဟာ တစ်ခြား လူတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြားနေတယ် ကျနော့်ဆီမှာ ချို ပေါက်မလာဘူး..ဘာလို့ လဲ ခင်ဗျ "
" မေးပဲ မေးတတ်ပလေတယ်..ဒါက ဟာသ သဘောနဲ့ပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါဗျ " " ဟုတ်လား...မသိပါဘူးဗျာ..ကျနော့်ဆီမှာ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေ နည်းနေလို့ချို
မပေါက်တာများလားလို့"
" လေလံပွဲ " " ခင်ဗျားမိန်းမကို အိမ်မှာ မမြင်ပါလား
" သူ လေလံပွဲ ရောက်နေတယ် "
" ဟုတ်လား..ဘယ်လောက် ရမယ်လို့ခင်ဗျား မျှော်လင့်ထားသလဲ.."
" အဖေတူ ကလေး "
နာတာရှာသည် ကလေးတွန်းလှည်းကို တွန်းလာသော မေရီ့ ကိုတွေ သ့ည်နှင့် တွန်းလှည်းသို့ခေါင်းငုံ့ ကြည့်သည် ။
" အဖေနဲ့အတော်တူတဲ့ ကလေးပါလား "
" မှန်လိုက်လေ .. ယောင်္ကျားကတော့ သူနဲ့ တတူယ်ချည်းပဲ အတင်းပြောနေတယ်.."
" မပြောတော့ မသိဘူး ပေါ့ " အမေက သမီးကို အော်သည် ။ " သမီး ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလား " " ဆရာဝန်က ပြောတာပဲ အမေ " " ဘယ်သူနဲ့ရတဲ့ ဗိုက်လဲ "
" အဲ့ဒါတော့ သူ မပြောဘူး အမေ "
" အသံကြားတာနဲ့ သတိယ် " " အခုခေတ် စက်မှုနည်းပညာ တွေ အင်မတန် တိုးတက်တာကလား..မနေ့ က သတင်းတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရတယ်
ကြိုးလိုင်းကတစ်ဆင့် အနံ့ ကိုပါ ယူဆောင်ပေးသွားတဲ့တယ်လီဖုန်းကို ဂျပန်တွေ
တီထွင်လိုက်ပြီ ဆိုပဲ "
" ဂျပန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် တယ်လီဖုန်းက ဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး ...မနေ့ က ရုံးကနေ
ဖုန်းဆက်တယ် ..ကျနော့် အသံကြားတာနဲ့သေချင်းဆိုး..ဟိုအရည်တွေ
သောက်ထားပြန်ပြီလား တဲ့ "
" ကိေုအာင်နက် " ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နယ်သို့ခရီးထွက်နေရာမှ တစ်ရက်စောပြီး ည ၁၀ နာရီခန် တွ့င် အိမ်သို့ 
ပြန်ရောက်လာသည် ။ ရေမိုးချိုး
အ၀တ်အစားလဲပြီး မိန်းမဘေးတွင် ၀င်အိပ်သည် ။ အိပ်ပျော်လုဆဲဆဲတွင် ကုတင်အောက်မှ သံသယဖြစ်ဖွယ် ချွတ်ချွတ်မည်သံ ကြားသဖြင့် လက်ဖြင့်
အောက်ကို စမ်းရင်းမေးသည် ။
" ဟေ့..အောင်နက်..မင်းလားကွ " ကုတင်အောက် ရောက်နေသော ကိုအောင်နက် က ယောင်္ကျား၏လက်ကို လျှာဖြင့်
လျက်ပြီး ပြန်ဖြေသည် ။
" ဟုတ်ကဲ့ ..ကျနော်ပါ "
" သူများဝန်ကို ဆက်ထမ်းနေရတယ် " သင်္ချိုင်းရှိ အုတ်ဂူတစ်ခုရှေ့ တွင် ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ငိုယိုနေသည် ။ နှုတ်မှလည်းပြောသည် ။ " သူ မသေသင့်ဘူး..တကယ်တမ်း သူ မသေသင့်သေးဘူး...ငါ အင်မတန်
ဖြတ်သွားသူက ကြင်နာသံတစ်ဝက် စိတ်ဝင်စားသံတစ်ဝက်ဖြင့် မေးသည် ။
" ဒီဂူမှာ ခင်ဗျားရဲ့ အဖေ..ဒါမှမဟုတ် သားကိုမြှုတ်ထားသလားဗျာ..." " ဟင့်အင်း...ကျနော့် မိန်းမရဲ့ပထမယောင်္ကျား.."
" မိန်းမအားကိုး သွားမကျိုး " ရေချိန်ကိုက်လာသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြင့် လျှောက်လာကြသည် ။ တစ်ယောက်၏
အိမ်ရှေ့ သို့ 
ရောက်သော် အခြားတစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" ဟေ့ကောင်..ဟိုမှာ လူတစ်ယောက် မင်းအိမ် ပြတင်းပေါက်ကို ကျော်ဝင်ဘို့ 
ကြိုးစားနေတယ် ..တွေ့ လား
" ရှူး..တိုးတိုးပြောပါကွ....ကြည့်နေ..ငါ ပြန်လာတယ်ထင်ပြီး ဒီကောင့်ကို မိန်းမက
" သူ ကျွ့န် မခံပြီ "
တစ်တန်းကျောင်းသူလေး..သတင်းစာကို စာလုံးပေါင်း ဖတ်နေရာမှ..အမေ့ကို ပြောသည် ။ " မေမေ..ဒီနေ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ..အကယ်ဒမီရတဲ့ကား ပြမှာ မေမေရ " " ဟုတ်လား...ဘာကားလဲ သမီးရဲ့ .." " သူ ကျွ့နမ်
" သင်ခန်းစာ " စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်သည် အရောင်းအ၀ယ်ကိစ်စဖြင့် နယ်သို့ ခရီးထွက်သည် ။ မြို့ 
တစ်မြို တွ့င် ၂ ရက်ကြာ
နားဘိုြ့ ဖစ်လာသည် ။ သို့ ဖြင့် ဟိုတယ်လေးတစ်ခုတွင် ၀င်တည်းရန် ဟိုတယ်ရှေ့ သို့ရောက်လာသည် ။ အ၀င်ဝတွင် ချောမောလှပသော
အမျိုးသမိးတစ်ယောက်ကို တွေ့ သည် ။ သူမက သဘောပေါက်လွယ်သော အမူအယာများ ပြသည် ။ နှစ်ယောက်သား စကားလက်ဆုံ ကျသွား
ကြသည် ။ သို့ ဖြင့် အမျိုးသမီးကို မိမိ၏ဇနီး ဟုပြောကာ အခန်းတစ်ခန်း ယူလိုက်သည် ။
နှစ်ရက်ကြာသော် ထိုမြို့ မှ ထွက်ခွါရမည်ဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်ခငွေ ပေးချေသည် ။
ကျသင့်ငွေ ဘောက်ချာကို ပေးလိုက်သော
အခါ ဒေါ်လာ ၇၅၀ တိတိ ကျသည်ကို တွေ့ ရသဖြင့် အံ့သြတကြီး မေးသည် ။ " ကျုပ် နှစ်ရက်တည်း နေတာပဲ..ဈေးများလှချည်လာ..." " လူကြီးမင်း နှစ်ရက်တည်း နေတာ မှန်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ဇနီး ဒီမှာနေတာ နှစ်လရှိပြီခင်ဗျ.."
အလုပ်တာဝန်ဖြင့် ခရီးထွက်နေသော ဇနီးသည် က ယောင်္ကျားဖြစ်သူထံ ဖုန်းဆက်သည် ။ " ကျမရဲ့ကြောင်လေး..နေကောင်းရဲ့ လား..." " မင်းကြောင် သေပြီ "
" ဒီကြောင်ကို ကျမသိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ သိရဲ့ သားနဲ့ရှင်မို့ဒီလို ပြောထွက်တယ်..
ကြောင်ကလေး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တက်ထိုင်နေရာက ခြေချော်ကျပြီး သေသွားတယ်လို့ 
ဒါနဲ့ကျမ အမေကော..."
" အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ထိုင်နေတယ် "
" လူသတ်သမား " တရားသူကြီးက တရားခံကို မေးသည် ။ " မှိုဟင်းကို စားပြီး အဆိပ်သင့်လို့ခင်ဗျားရဲ့ပထမ ဇနီး သေသွားတယ်..၊ ဒုတိယ ဇနီးလည်း မှိုဆိပ်တက်ပြီး
သေသွားပြန်တယ်..ဒါပေမဲ့ အခု တတိယ ဇနီးကျတော့ ခေါင်းက ဒဏ်ရာ
" မှိုဟင်းကို မစားချင်လို့"
လူဆိးု ဓားပြဆို နိုး ပဲ "
စတိတ်ရှိုးမှ ပြန်လာသော နာမည်ကျော် အဆိုတော်မ က မိမိ၏ခင်ပွန်းကို ရှင်းပြနေသည် ။ " မောင်ရေ...အိမ်ပြန်နောက်ကျတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် .. ပွဲပြီးလို့အိမ်ကို
ကားနဲ့ ပြန်လာတာ လမ်းတစ်နေရာမှာ
လူဆိုး သုံးယောက် ကားကို အတင်းတားပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ် ...သီချင်းတစ်ပုဒ်
ဆိုပြရင်ပြ မဆိုရင် အ ဓ မ္မ
" အဲ့ဒီတော့..မင်းက သီချင်းဆိုပြလိုက်ရရောလား.." " မေ့ အကြောင်းကို မောင်က ကောင်းကောင်း မသိသေးဘူးကိုး.. ဒီလို
မေက ဘယ်တော့မှ သီချင်းမဆိုဘူးရှင့်.."
" နို စို့ အ့ရွယ်လား " " မင်းရဲ့ ပန်းချီကားကို ပြပွဲမှာ ပြဘို့ရွေးလိုက်တယ် မဟုတ်လား.." " ဒီတစ်ခါလည်း အရွေးမခံရပါဘူးကွာ.."
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ.."
" ငါ ရှုမျှော်ခင်းပုံ ဆွဲတယ် ... ပြပွဲကြီးကြပ်သူတွေရဲ့စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တောင်ကုန်း..စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်
တဲ အိမ် တစ်လုံး..မြစ်ကမ်းဘေးမှာ..အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလေးကို
နို့ ချိုတိုက်ကျွေးနေပုံတွေ အားလုံးပါအောင်
ငါ ဆွဲလိုက်တာပဲ..ဒါပေမဲ့ သူတို့ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်.. ဘာကြောင့်လဲလို့ငါ
နို့ စို့ နေတဲ့ ကလေးက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ပုံ ပေါက်နေလို့ တဲ့ ကွာ.."
မန်းလေးသူတွေ ဘာလို့ကျနော် လို သုံ့းကြသလဲ ရတနာပုံ မန္တလေးနေပြည်တော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးသည် သမိုင်းများမှတ်တမ်းအရ အလွန် ကာမဂုဏ် ခံစားမှုအားကြီးသည်ဟု
အသီးသီးတို့သည် မင်းတုန်မင်း စံနေသော နန်းဆောင်ကို ဖြတ်လျောက်ကြသောအခါ မနလေးသူများ ဘာကြောင့် ကျနော်လို့ပြောဆိုကြတာလဲ ? မင်းတုန်းမင်က " ဟေ့ ဘယ်သလဲူ " ဟုမေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့မေးသောအခါ ကိုယ်လုပ် မောင်းမအချို့တို့သည် "ကျွန်မ ပါ" ဟု ပြန်ဖြေကြလေသည်။ ထိုအခါ
မင်းတုန်းမင်းကြီးက "လာခဲ့စမ်းသည်ကို" ဟုခေါ်၍ ဆက်ဆံမှုပြုလေတော့သည်။ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယလ်ုပ်မောင်းမတို့ကလည်း အထာနှပ်လာသဖြင့်
မင်းကြီးအဆောင်ကို ဖြတ်လျောက်မိသောအခါ မင်းတုန်းမေးသောအမေးကို "ကျွန်တော်ပါ"ဟု သာပြန်ဖြေကြလေတော့သည်။ ၎င်းနန်းတွင်းမှ သည်
မြို့နေပြည်သူများဖြစ်ကြသောအရပ်သူသို့ကူးစက်၍ မနလေးမြို့နေသူ မန်းပျိုဖြူများကလည်း "ကျွန်တော်" ဟုသာ
ပြောဆိုထားခြင်းသည် မင်းတုန်းရန်ကို ကြောက်လန့်ကြ၍ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အခုခေတ်တွင် မင်းတုန်းမရှိသော်လည်း မန်းပျိုဖြူတို့ ကြောက်စိတ်မပြယ်သေး၍ထင့် "ကျွန်တော်" ဟူသောအသုံးကို မြိန်မြိန်ဆိုင်ဆိုင် သုံးနှုံးနေကြပါသေးသည်။
" အရောင်တတူာ ရမှာပေါ့ "
အာရပ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသား နှစ်ယောက်သည် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုထဲသို့ဝင်သည် ။
ယနေ ရ့နိင်ုသော စားသောက်ဖယွရ်ာ စာရင်းတွင် မမြင်ဘူး . မစားဘူးတာများကို တွေ့ ပြီး မြည်းကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။
သို့ ဖြင့် စပယ်ရယှအ်ာရပ်နို့ကိုမှာလိုက်ကြသည် ။ ခဏအကြာတွင် အာရပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ၄င်းတို့ အနား ရောက်လာပြီး ခွက်နှစ်ခွက်
ထဲသို့မိမိ၏ရင်သားမှ နို့ များကို ညှစ်ပေးသည် ။ စပယ်ရယှ် အာရပ်နို့ကိုသောက်ရင်း တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" စပယ်ရယှ် အာရပ်ဘယီာ ကိုမှာရင် ဘာရမလဲ မသိဘူးနော်..."
" အကျင်ပ့ါနေလို့" ဆိုဗီယက် ပါလီမန် အစည်းအဝေးမှ ပြန်လာသော အမတ်ဖြစ်သူ ယောင်္ကျားကို အိမ်ရှင်မက ညစာပြင်ပေးရင်း မေးသည် ။
" ရှင်..ဟင်းချို သောက်မလား.."
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ဘာမှ မပြောပဲ လက်ညှိုးထောင်သည် ။
" ကြက်သားနဲ့ အာလူးကြော်ကော စားမလား..."
ယောင်္ကျား ဘာမှ မပြော ..လက်ညှိုးထောင်သည် ။
" ဗော့ဒ်ကာတစ်ခွက် ထည့်ပေးရမလား "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ လက်ခုတ်တီး သြဘာပေးသည် ။
" သားဖွားခြင်း အမျိုးမျိုး " " သားဖွားတာ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ " မွေးဖွါးခြင်း..၊
" သုံးမျိုး ရှိတယ် ၊ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် တစ်နှစ်အလိုမှာ မွေးရင် အချိန်မရောက်ဘဲ ယောင်္ကျားသေပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ မွေးရင် နောက်ကျသော မွေးဖွါးခြင်း..၊
ကိုယ့်မိန်းမ မဟုတ်ဘဲ အိမ်နီးချင်း မိန်းမက မွေးရင် မှားယွင်းသော မွေးဖွါးခြင်း "
" တကယ့် ငရဲ "
" ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ငရဲ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လာအောင် ဘယ်လလိုပ်ရမလဲ " " မိန်းမ ယူခိုင်းလိုက်.."
" အသက်ပရို ညှတ်ဲ့ မိန်း မ "
" ယောင်္ကျားတွေထက် မိန်းမတွေက အသက်ပိုရှည်တယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲလား " " အတိအကျတော့ မသိဘူး...ဒါပေမဲ့ ..မုဆိုးမတွေ အသက်ပိုရှည်တာတော့ အမှန်ပဲ .."
" ယောက္ခမ အတွက် လက်ဆောင် " လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်များ အရောင်းဆိုင်သို့လူငယ်တစ်ဦး ရောက်လာသည် ။ ဈေးရောင်းသူက မေးသည် ။
" ယောက်ခမ အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုခု ၀ယ်ချင်လို့" " ရပါတယ်...ဒါက လျှပ်စစ်မီးပူ....ဒါကတော့..လျှပ်စစ်မီးဖို...အဲ..ဒါကတော့ ..
" ခင်ဗျားတို့ ဆီမှာ..လျှပ်စစ်ကလုားထိင်ုကော မရောင်းဘူးလား "
" ဒုတယိဆရာဝန် " ဆရာဝန်ထံ လူနာရောက်လာပြီး အမြဲတမ်းလိုလို တစ်နေရာရာတွင် နာလေ့ရှိကြောင်း ပြောရာ ဆရာဝန်က အကြံပေးသည် ။
" ခင်ဗျား ဆေးလိပ်သောက်တာကို ရပ်ပစ်ရမယ် ..အရက်ကိုလည်း
အခါကြီး ရက်ကြီးကျမှ သောက်ပါ ၊ ရုံးမှာ အချိန်ပို မလုပ်နဲ့..အိမ်ကို အချိန်မီ
ပြန်ပါ..ည ၇ နာရီထက်
နောက်မကျပါစေနဲ့"
" လုံလောက်ပါပြီ ဒေါက်တာ...ကျန်တာကို ကျနော့် မိန်းမ ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ် "
" ဒီလကိူု မကြိုက်ဘူး " မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။ "
မောင်...ဆရာဝန်က ပြောတယ် ... ငွေဆောင် .ချောင်းသာ..ပြင်ဦးလွင် ..တောင်ကြီး
စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးသွားပါတဲ့...အဲ့ဒါဆို ..ခင့် ရောဂါ သက်သာသွားမယ်တဲ့..
ခင်တို့ဘယ်ကို သွားကြမလဲဟင် " "
နောက် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဆီ "
" ကြောင်လို ဖြစ်သွားမယ် " ကိုဘမောင်ထံ မိတ်ဆွေများ အလည်ရောက်လာသည် ။ ကိုဘမောင်က လက်ဖြင့် အချက်ပြလိုက်သည်နှင့် ဇနီးသည်နှင့်
ယောက်ခမ သည် ဧည့်သည်များအား ထမင်းကျွေးရန် ပြင်ဆင်သည် ။ ထမင်းစားပွဲပေါ် အရက်ပုလင်းနှင့် ဖန်ခွက်များ ချသည် ။ စီးကရက်
တည်သည် ။ မိတ်ဆွေများက ကိုဘမောင်ကို မေးသည် ။
" ပိုင်လှချည်လားဗျ..မိန်းမနဲ့ ယောက်ခမ ကို ဘယ်လိုများ စည်းရုံးထားသလဲဗျ.." " တစ်နေ့ကျနော် ပုဇွန်ကြော် စားနေတယ် ..၊ ကြောင်က စားပွဲပေါ်တက်လာပြီး
ပုဇွန်ကြော်တစ်ခု ယူပြီး ပြေးတယ် ..
ကျနော် သူ့ ကို သတိပေးလိုက်တယ်..ဒီကောင် ဒုတိယတစ်ခါ ယူပြန်တယ်..ကျနော်
သူ့ ကို ဒုတိယအကြိမ် သတိပေး
ထပ်သတိပေးတယ်..နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီး ဒီကောင် လာ
ယူတဲ့အခါကျတော့ ဒီကောင့်ကို အမြီးက ဆွဲပြီး ပြတင်းပေါက်က လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်
..ကျနော်တို့ နေတာက ၁၄ ထပ် မှာလေ..."
" မိန်းမနဲ့ ယောက်ခမ ကျိုးနွံတာနဲ့ကြောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲဗျ.." " ဆိုင်ပါသော်ကောဗျာ....မိန်းမ သတိပေးခံရတာ နှစ်ခါ ရှိပြီ.....ယောက်ခမ ကတော့
အဲဒလီမို လုပန်ဲ့ ......
မြို တ့စ်မြို့ မှာကုန်စုံဆိုင်ဖွင့် စားတဲ့ အရှောင်ဆိုတဲ့ တရုတ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူ့ မိန်းမမမြစိန်ဆို တဲ့ မြန်မာမလည်းရှိတယ်
အရှောင်ကဒေါသကြီးတယ်မမြစိန်တခါတလေအချိုးမပြေရင်အရိုက်ခံတက်တယ် အဲဒါကြောင့် မမြစိန်ကအရှောင်ကိုသေလောက်အောင်ကြောက်တယ်လေ အရှောင်ကကျန်းမာရေးမလိုက်စားတော့ နည်းနည်းချူချာတယ်
တစ်နေ့ အရှောင်နေမကောင်းလို့ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတယ်ဆရာဝန်ကလည်းဆီးစစ် ဖို့ ဆီးနမူနာယူလာခိုင်းတယ်
ဒါနဲ့ အရှောင်လည်းအိမ်ရောက်တော့ သူ့ လိင်တြံ ကီးကိုပုလင်းထဲစွပ်ပြီးပေါက်လိုက် တယ်ပြီးတော့ အဲဒီပုလင်းကိုကုတင်တိုင်ဘေးမှာထားလိုက်တယ်
ညကျတော့ အရှောင်မိန်းမကဆိုင်သိမ်းပြီးတော့ ဝင်အိပ်တော့ တာပေါ့နံနက်ကျတော့ အရှောင်ကတခူး...ခူးနဲ့ အိပ်ပျော်နေတုန်းသူ့ မိန်းမကအပေါ့ သွားချင် လို့ အိပ်ရာကထလိုက်တာအိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ အရှောင်ရဲ့ ဆီးပုလင်းက်ုတိုက်မိပါရော
အရေးကြီးလို့ ဆီးပုလင်းကိုကုတင်အောက်မှာထားမှန်းမမြစိန်သိတော့ အရှောင်နိုးလာရင်အရိုက်ခံရေ တာ့ မှာပဲဆိုပြီးကြံရာမရဖြစ်တာနဲ့ ဘဲ
သူ့ ဆီးတွေကိုပုလင်းထဲပေါက်ထည့် လိုက်တယ် နံနက်ကျတော့အရှောင်လည်းဆီးပုလင်းကိုယူပြီးတော ဆ့ရာဝန်ဆီသွားတာပေါ့ 
ဆရာဝန်ကလည်းကြိမ်ဖန်များစွာသေချာအောင်စစ်ပြီးတော့ အရှောင်ကိုပြောလိုက်တယ် ၀မ်းနည်းပါတယ်အရှောင်ခင်ဗျားမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ............
ဒါနဲ့ အေ၇ှာင်လည်းဒေါသတကြီးနဲ့ အိမ်ကိုပြန်သွားပြီးသူ့ မိန်းမကိုပြောလိုက်တယ်
ဟဲ့ .....မသာမ.........အဲဒါကြောင့် နီကိုဝခဏခဏပြောတာပေါ့ဝကို အပေါ်ကနေမီလုပ်ပါနဲ့ လို့ .....့......အခု ၀ မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ.....ဘီလိုလုပ်မလဲတဲ့ 
ယုတ္တိတော့ မရှိဘူးပေါ့ ဗျာဒါပင်မဲ့ ရီစရာဟာသအနေနဲ့ ဖတ်ကြပါ ။
အထင်နဲ့ အမြင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဥပဒေသစ်တရပ်ကို ထုတြ် ပန်ကြေငြာလိုက်ရာဝယ်… လက်ထပ်ထားပြီး ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အကြင်လင်မယားတိုင်း ရင်သွေးတယောက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ် တဲ့။ ဒီတာဝန်ကို မကျေပွန်ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာမှ ကြီးကြပ်၍ ယောက်ျားတယောက်ကို
စေလွှတ်ကာ ထိုအိမ်ထောင်ရှင်မအား မိခင်တယောက် ဖြစ်လာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ငါးနှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ကျင်းပပြီး နောက်တနေ့မှာ တော့ အခုထိ ကလေးမရသေးတဲ့ အကြင်စုံတွဲဟာ ဒီကိစ္စကို စဉ်းစားရတော့တာပေါ့… ယောက်ျားလုပ်သူက…
"မိန်းမရေ… ကိယ်ုကတော့အလုပ် သွားရတော့မယ်ကွာ။ ဒီကနေ့ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးချုပ်က လွှတ်တဲ့လူ လာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ အချစ်ရာ။ ကိုယ်ကမှ အဖြစ်မရှိခဲ့တာကိုး။ မင်းသာ ဖြစ်လာသမျှကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရင်ဆိုင်ပေတော့။ ကိုယ်သွားတော့မယ်ကွာ… "
ခဏနေတော့ အိမ်ရှေ့ကနေ ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ တံခါးဝမှာ စောင့်နေတဲ့သူက သက်ဆိုင်ရာက လွှတ်လိုက်တဲ့ လူမဟုတ်ပါဘူး။ မွေးကင်းစအရွယ် ကလေးလေးတယောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ လာရင်း အိမ်နံပါတ်မှားပြီး ရောက်လာတဲ့ ကင်မရာမင်း တယောက်ပါ။
အမျိုးသမီးက တခါးဖွင့်လိုက်ချိန်မှာပဲ ဓာတ်ပုံဆရာက စပြောပါတယ်…
"မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် လာရင်းကိစ္စကတော့… " "သိ.. သိ.. သိပါတယ်ရှင့်… ဦး.. အဲ ကိုဘယ်သူ… "
"ကျနော့်နာမည် ဝေယံ လို့ ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ… ကျွန်တော် အထူးပြုထားတဲ့ အလုပ်အကိုင်က… "
"သိ.. သိပြီးသားပါရှင်… ခဏထိုင်ပါဦး " "ခင်ဗျား အမျိုးသားလဲ သဘောတူမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ… "
"ဟုတ်တယ်ရှင့်.. ဒီမနက်ပဲ ကျမတို့ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတာပါ… ဒီကိစ္စကို ဒီအိမ်ထဲမှာပဲ ရှင်းဖို့ မှာသွားပါတယ်။ "
"ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် အခုပဲ စလိုကြ် ကရအောင်လေ။ "
"ဒီကိစ္စအတွက်တော့ ကျနော့်ကို အားကိုးစမ်းဘာဗျာ…။ အင်း… ကျနော့်အထင်တော့ ဒီဆိုဖာပေါ်မှာရယ်… ဟောဟိုက စာကြည့်စားပွဲဘေးမှာရယ်… ရေချိုးခန်းထဲမှာ..
အင်္ကျီဗလာနဲ့။ ဒီကော်ဇောပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီတို ဒါမှမဟုတ် အပေါ်က အဝတ်တထည်တော့ ဝတ်ထားမှ ကောင်းမယ်ဗျ။ " "ဘုရား..ဘုရား… အဲလောက်ကြီးတောင်လား… "
"ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်… အခုကြားရသမျှကတော့ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်လို့ပါ။ " "ဒီလိုပေါ့ဗျာ… ဘာကိုမှ ချုပ်တီးမထားဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အောင်မြင်မှုက ပိုပြီး ကြီးမားတတ်တယ် မဟုတ်လား… " "အရင်ဦးဆုံး ကျနော် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို ပြချင်ပါတယ်ဗျာ။ "
"ရှင်ဖန်တီးခဲ့တာ… အင်း… ပြလေ… ရှင့်မှာ အချိန်ရှိတယ် မဟုတ်လား။ "
"ဟာ အလောသုံးဆယ် မလိုပါဘူးဗျာ။ ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးပြီးရော ဘယ်ရပါ့မလဲ… "
(ပြောရင်း ဆိုရင်း ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ်ကို ဖွင့်ပြပြီး) "ဒီပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ ချစ်ဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဒီအတွက် ကျနော်
လေးနာရီတိတိ အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်က လှမှလှပဲလေ။ " "ဟင်းးးးးး (သက်ပြင်းတွေချလိုက် တံတွေးမြိုလိုက် လုပ်နေရင်း) ဟုတ်တယ်နော်
ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး… ဒါပေမယ့် လေးနာရီကြီးကတော့ မများဘူးလား ရှင်… " "ဒါပေါ့.. ဒါပေါ့… နားနားပြီး ဆက်လုပ်ရတာပေါ့… ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ.. ဒီအောက်က ပုံကိုကြည့်စမ်းပါ… အဲဒီတုန်းက ကျနော်က ဘစ်စ်ကား ခေါင်မိုးပေါ်မှာ…ဗျ။ "
"ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ… အမေလေး… မကြားဖူးတာတွေ ကြားနေရတယ်… ထူးဆန်းပါပေ့ရှင်။ " "ဒီလိုဗျ… အမျိုးသမီးတယောက်… သူကလဲ ကျနော့် အလုပ်အကိုင်ကို သိတယ်.. ယုံကြည်တယ်.. အားကိုးတယ်ပေါ့ဗျာ… သူက သူ့အမျိုးသားကို အထူးအဆန်း
ပြချင်လို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အလုပ်လာအပ်တာပေါ့… အတွေ့အကြုံရှိနေတော့လဲ မခက်ပါဘူးလေ။
အဲဒီအခေါက်က အလုပ်သဘောအရ ဆိုပေမယ့် ကျနော်က တကယ့်ကို စေတနာနဲ့ စိတ်နှစ်ပြီး ကြိုးစားပေးခဲ့တာဗျ။ "
"ဟော.. ဟောဟိုပုံကိုကြည့် အဲဒါက ပန်းခြံထဲမှာ… " "ပန်းခြံထဲမှာဆိုတာက… လူတွေနဲ့လေ။ လူရှေ့သူရှေ့လဲ အလုပ်ဖြစ်တယ်.. ဟုတ်လား။ သူများတွေက ဝိုင်းကြည့်နေမှာပေါ့။ "
"လူတွေကြည့်တာ မကြည့်တာ ဂရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ… ကုန်ကုန်ပြောမယ်… ကျနော်က လူတမျိုးဗျ။ လူတွေ ဝိုင်းအုံကြည့်လေ ကျနော့်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေက
ဗီဒီယိုမင်းသမီးဗျ… သူက အဲဒီနည်းနဲ့ နာမည်ကြီးချင်တာလေ။ အဲဒီနောက်တော့ တကယ်လဲ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာ။ " "ဗုဒ္ဓော… ဘုရား.. ဘုရား… "
"ဟုတ်တယ်ဗျ… နေ့လည် နှစ်နာရီမှာ စလိုက်တာ ညနေ ငါးနာရီမှ ပြီးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလောက် တခေါက်မှ မပင်ပန်းဖူးဘူးဗျာ.. တကယ်ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က
တုန်နေအောင် ချမ်းနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ လာကြည့်ကြတဲ့ လူတွေကလဲ ပြုံလို့ ခဲလို့… အထပ်ထပ် စုအုံနေတာတင် အဝိုင်းကြီး ငါးထပ်လောက်ရှိတယ်။ လူက တအားများလေတော့ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ သိပ် ခရီးမတွင်ဘူးလေ။ "
"ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် လူအုပ်ကြီးပဲ တွေ့ရတယ်။ ပရိတ်သတ်ကလဲ ပွဲကျပြီး လက်ခုပ်တွေဘာတွေ ဝိုင်းတီးပေးကြတာဗျ။ အဲဒီမှာ အမေလုပ်သူက စိတ်တွေတိုလာတာပါပဲ… ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ပွဲမပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းပေးခဲ့ရတာပေါ့။ နောက်တော့
ရဲတွေရောက်လာပြီး ကျနော့်ကို လူကူရှင်းပေးတယ်… အမှန်က ကျနော်က နောက်ထပ် နှစ်ကွက် သုံးကွက်လောက် ဆွဲချင်သေးတာဗျ။ ဒါပေမယ့် ချမ်းကလဲ
ချမ်းနေကြပြီဆိုတော့… (အယ်လ်ဘမ်ကို ပြန်ပိတ်၍ ပြော) ကဲ… အခုပဲ စကြမလား… ကျနော် ထောက်တံထုတ်လိုက်မယ်လေ… "
အဲဒီအမျိုးသမီးလဲ နေရာမှာတင် မေ့လဲကျသွားပါလေရောဗျာ… ။
" ညစ်ပတ်တယ်.." ရုရှားမကို ကိုချူချာ လက်ထပ်သည် ။ အိမ်နီးချင်းများက ၀ိုင်းမေးကြသည် ။ " မင်းရဲ့ရုရှားမ ဘယ်နှယ့်လဲ
" အင်မတန်တော်တဲ့ မိန်းမ အဲ .တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတယ်..တော်တော် ညစ်ပတ်တယ် နေ့ တိုင်း သူ ရေချိုးတယ် "
" ဧည်သ့ည် လာပြီ " ကိုချူချာ သူ့ မိန်းမကို ဆူနေသည် ။ "
နဲ့ ကို တုံးတာ.."
မင်း တော်တော် အသုံးမကျတဲ့ မိန်းမပါလားကွ..ဟေ. တုံးလိုက်တာမှ တတလင်းချိတ်
ထိုသို့ ပြောပြီး စားပွဲကို " ဒေါက်..ဒေါက် ..ဒေါက် " မြည်အောင်ခေါက်သည် ။ မိန်းမ
နေရာမှ ချက်ချင်းထပြီးပြောသည်။ "
တံခါးခေါက်သံ ကြားတယ်..ကျမ သွားဖွင့်လိုက်မယ်.."
ထိုင်နေစမ်း..ကောင်မ....ငါ သွားဖွင့်မယ် .."
ချိန်းတွေ့ တဲ့ ကိချုချာ "
ရွာစွန်ရှိ ရည်းစားနှင့် ချိန်းတွေ့ မည့်နေရာသို့နာရီအစား အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို ကိုင်လျှ က် ကိုချူချာ
ရောက်လာသည် ။ အချိန်အတန်ကြာ စောင့်သည် ။ ချစ်သူ ရောက်မလာချေ ။ ကိုချူချာ မိမိကိုယ် မိမိ ပြောသည် ။
အနုတ် ဒီဂရီ ၄၀ ရောက်တဲ့အထိ စောင့်မယ် ..မလာရင်တော့ ပြန်မယ် .."
" မီးလောင်တာ မဟုတ်ေသာ်လည်း " မြို့ နယ်မီးသတ်ဌာနသို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး အရေးတကြီး ဖုန်းဆက်သည် ။ " ကျမရဲ့ အိမ်ပြတင်းပေါက်ကို ယောင်္ကျားတစ်ယောက် တွယ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် .. ကူပါဦးရှင် "
" ဒါ ကျနော်တို့ နဲ့မဆိုင်ဘူး ..ရဲစခန်းကို ဆက်ပါ "
" ရဲစခန်းကို ဘာလို့ ဆက်ရမှာလဲ...သူ့ အတွက် မီးသတ်လှေခါး လိုနေတဲ့ဟာ.."
ခြိမ်း ခြောက်စာ "
" ဟဲလို..ရဲစခန်းကပါလား...ကျနော့်ကို သတ်ပစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်စာတစ်စောင်ကို အခုပဲ ကျနော်
သူ့ မိန်းမကို ကျနော် ကြာကူရီ ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ရပ်ပါ မရပ်ရင်
ခေါင်းဖြတ်သတ်မယ်လို့လူတစ်ယောက်က
သတိပေးတဲ့စာ ရေးတယ်ခင်ဗျ "
" လွယ်လွယ်လေးပဲ...သူ့ မိန်းမကို ရှောင်လိုက်ပေါ့.."
" ပြောတော့ အလွယ်လေး...ခြိမ်းခြောက်တဲ့သူက လက်မှတ် မထိုးထားဘူးဗျ "
" ခြိမ်း ခြောက်မှု "
ကိုဘမောင် ၏ ဇနီးကို လူဆိုးများ ပြန်ပေးဆွဲသွားသည် ။ နှစ်ရက်ကြာသောအခါ ကိုဘမောင် ၏
တယ်လီဖုန်း မြည်လာသည် ။ တစ်ဘက်မှ လူဆိုးက ပြောသည် ။
" နောက် နှစ်နာရီအတွင်း ကျုပ်တို့ တောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံ လာပေးရင် ပေး
...မပေးရင် ..ခင်ဗျားမိန်းမကို ကျုပ်တို့ 
ချက်ချင်း ခင်ဗျားဆီ ပြန်ပို့ လိုက်မယ် ..."
" သူ့ ကပိဲုပြောပြပါ " အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးအား ရုန့် ရင်း ကြမ်းတမ်းသော စကားများဖြင့် ရိုင်းပြစွာ စော်ကားသော မိန်းမတစ်ယောက်၏
အမှုကို တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးသည် ။ ရှေ့ နေပေါက်စ က ဆဲရေးတိုင်းထွာသည့်စကား တစ်လုံးမကျန် ရုံးတော်သိုြ့ ပန်ပြောရန် အစော်ကားခံ
ရသည့် အမျိုးသမီးကို ဖြောင့်ဖျ သည် ။ အမျိုးသမီး က ငြင်းသည် ။ " ကျမ မပြောပါရစေနဲ့ ရှင်...သူပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ဘယ်လူကြီးလူကောင်းမှ
နားမထောင်သင့်ပါဘူး ရှင် " ပြောပြပါ "
" အဲ့ဒါဆို တရားသူကြီးမင်းဘက် သွားပါ....သူ့နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး
တွကက်နိ်း "
သူဌေးကြီး ဦးဘမောင်သည် ညစာစားပွဲတစ်ခုတွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောသည် ။ "
ကျုပ် သမီးတွေ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါ..သူတို့ တစ်ယောက်ချင်းကို လက်ဖွဲ့ အဖြစ်
ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်.. ဥပမာ ..အငယ်ဆုံးသမီး လှလှ လက်ထပ်ရင်
မြောက်ဒဂုံမှာ အိမ်တစ်လုံးနဲ့ 
ပိုက်ဆံ သိန်း တစ်ရာ...၊ အသက် ၂၅ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သမီးအလတ် မြမြ
လက်ထပ်ရင် ရန်ကင်းမှာ တိုက်ခန်း
တစ်ခန်းနဲ့ပိုက်ဆံက သိန်း နှစ်ရာ ၊ အသက် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမီးကြီး ခင်ခင်
တိုက်တစ်လုံးနဲ့ပိုက်ဆံက သိန်း သုံးရာ..ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်..." ဧည့်သည်များထဲမှ လူငယ်တစ်ယောက်က ထမေးသည် ။
" အန်ကယ့်မှာ အသက် ၄၀
၅၀ အရွယ် သမီး တွေကော မရှိဘူးလားခင်ဗျ.."
" ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဒေါ်လေး " အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီး ထပြန်မည်လုပ်သောအခါ မေရီ က သားငယ် ပီတာလေးကို ပြောသည် ။ " သား..အန်တီ့ကို နှုတ်ဆက် အနမ်းလေး ပေးလိုက်ပါဦးကွယ်..."
" ဟင်အင်း..မပေးချင်ဘူး...တစ်နေ့ က ဖေဖေ သူ့ ကို နမ်းတော့ ဒီအန်တီက ဖေဖေ့ကို ပါးချတယ် ခင်ဗျ.."
" ဘယ်ကိုလဲ .." ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မနက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်လာသည် ။ တံခါးကို အသာလေးဖွင့်သည် ၊ အိပ်ခန်းထဲ ခြေဖော့ပြီး ၀င်သည် ။
ကိုယ်ပေါ်မှ အ၀တ်အစားများကို တစ်ခုချင်း ချွတ်သည် ။ မိန်းမဖြစ်သူ နိုးလာသည် ။ " ရှင် ဘယ်က ပြန်လာတာလဲ.."
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ အ၀တ်အစားကို ကပျာကယာ ပြန်ဝတ်သည် ။
မြင်ရက်သားနဲ့"
" ဘယ်ကလဲ မဟုတ်ဘူး...ဘယ်ကိုလဲ လို့ မေး..ငါ အလုပ်သွားမလို့ပြင်နေတာ
ကိုဘမောင် ခပ်ထွေထွေဖြင့် အိမ်သို့ နောက်ကျမှ ပြန်ရောက်လာသည် ။ မိန်းမက ခါးထောက်ပြီး မေးသည် ။
ကိုရွှေဂဲ ဆီ ခဏဆိုပြိး ၀င်လိုက်တာ အရက်အတင်းတိုက်ပြီး တစ်အိမ်လိုနေလို့ 
၀င်ထိုင်ပေးပါဦး ဆိုတာနဲ့ထိုင်လိုက်ရတယ်ကွာ..."
မိန်းမဖြစ်သူ ကိုရွှေဂဲဆီ ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်သည် ။ " ကိုရွှေဂဲ...ကိုဘမောင် ရှင့်ဆီ လာသလား " " လာတယ်...အခုထိ ထိုင်နေတုန်းပဲ..."
" အရှကက်ွဲရခြင်း " သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က မေးသည် ။ " သူငယ်ချင်း သုန်သုန်မှုန်မှုန်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲကွ..." " ငါ့ အတွင်းရေးမှူးမ ကို အလုပ်က ဖြုတ်ပစ်မလို့ .." " ဘာလို လဲ့.."
" တစ်နေ့ က သူ့ ကို လက်ဆွဲအိပ်တွေ မနိုင်မနင်း ဆွဲလာတာ တွေ့ လို့ကူဘိ်ု့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. ၀င်သွားတယ်... ၀င်လိုက်သွားတယ် ရုံးသူ ရုံးသားတွေ
သူ့ အိမ်ကို ရောက်တယ်..၊ လက်ထဲက အိပ်တွေကိုယူပြီး တစ်ခြားအခန်းကို သူ နောက်မိနစ် အနည်းငယ် ကြာရင် ၀င်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့...နည်းနည်းလေးကြာတော့ ငါ အစားအသောက်တွေ အပြည့်ခင်းကျင်းထားတဲ့စားပွဲရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ ငါ့ ထိုင်နေကြတာကို မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ လိုက်ရတယ်.." " ရယ်စရာလို သဘောထားပြိး အားလုံးကို ပြုံးပြလိုက်ပေါ့ကွာ.."
" ပြုံးပြရမယ်..ဟုတ်လား...ငါ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ..ဘာအ၀တ်အစားမှ မရှိတော့ဘူးကွ "
" ကတိပေးပါတယ် " ကိုဘမောင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသည် ။ လက်ထပ်ပွဲ အခန်းအနား ပြီးစီးသောအခါ ငယ်ရွယ်သော
ဇနီး အသစ် ကျပ်ချွတ်ကို ပြောသည် ။ တစ်ခု အကြောင်း
" အခု တို့ နှစ်ယောက် လင်မယား ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ငါ့မှာ ရှိတဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်ကြီး မင်းကို ပြောပြထားရမယ် .၊ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ အကြောင်းမဲ့ ငါ မနာလို
၀န်တို ဖြစ်တတ်ခြင်းပဲကွ "
မယားလေးက ပြုံးပြီး ပြန်ပြောသည် ။
" စိတ်ချပါရှင်..အကြောင်းမရှိပဲ ရှင် ကျမကို မနာလို ၀န်တို မဖြစ်စေရပါဘူး.."
" ယူတော့ ယူမယ် "
သေတော့မည့် အဖိုးကြီးက ငယ်ရွယ်သေးသည့် ဇနီးသည်ကို မှာနေသည် ။
" ငါ သေရင် အိမ်နီးချင်း ကိုဘမောင်ကို မင်း မယူနဲ့သိလား.. မင်း သိတဲ့အတိုင်း သူနဲ့ ငါနဲ့ က တရားရုံးမှာ နှစ်နဲ့ ချီပြီး ပြိုင်ခဲ့ကြတာ ငါ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်..လုပ်ခဲ့တဲ့ အကောင် "
" စိတ်ချပါရှင်..ကျမ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ကတိပေးထား ပြီးပါပြီ.."
" ဖြစ်တတ်ပါတယ် " " ဒေါက်တာ..ကျနော်နဲ့လက်ထပ်ပြီး သုံးလ အကြာမှာ
ကျနော့်မိန်းမ ကလေးမွေးတယ်....ကျနော် ဘ၀င်မကျဘူး ခင်ဗျ "
" ကလေး နေကောင်းသလား " " နေကောင်းပါတယ် "
" အဲ့ဒါဆို ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ..ဒါမျိုး ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ် "
" လက်နက်ကယို စ်ီ ရြှိ ကသည် "
တရားရုံးတွင် ဖြစ်သည် ။ " ကောင်းပြီ..ခုတ်မယ် ထစ်မယ် အဆင့်အထိ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ
တစ်ဖက်လူရဲ့လက်ထဲမှာ ဓါးတစ်ချောင်း ရှိတယ်လို့ခင်ဗျား ပြောတယ် ခင်ဗျားရဲ့လက်ထဲမှာကော ဘာရှိသလဲ.."
" သူ့ မိန်းမ
လက်မ တွနသ့် ကိူု သူရေဲကာင်းရွေးသည် ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင့်နောင်ပေါ့ ... လက်မကို အပ်စိုက်ပြီး တူနဲ့ထုကာ
လက် မတွန့်သူကို သူရဲကောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။ ဒါကို ဒီလို ဖတ်မိတယ်လေ -
လက်မကို အပ်စိုက်ပြီး တူနဲ့ထုကာ
လက်မ တွန့်သူကို သူရဲကောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။ ဟုတ်သလိုလိုပဲနော့် ... ငယ်သေးတော့လည်း အမှန်ကို ချက်ခြင်းမသိခဲ့လို့ပါ ... ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ် ... မှားဖတ်မိခဲ့တဲ့ .....
( မောင်သုည )
" ကျမ ပါပဲ " ဓါတ်လှေခါးတွင် လိုက်ပါလာရင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ရုတတ်ရက် မီးဖွားရန် ဖြစ်လာသည် ။
ဓါတ်လှေခါးထဲ လိုက်ပါလာသော ဆရာဝန်က အမျိုးသမီးကို အကူအညီ ပေးသည် ။ နှုတ်မှလည်း နှစ်သိမ့်စကား ဆိုသည် ။
" ကျနော် ကူပေးမယ် ..ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ..ဒါ ဘာဟုတ်သေးလဲ . မနှစ်ကဆိုရင်
ဘတ်စ်ကား စောင့်နေရင်း ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာပဲ..မီးဖွားတဲ့အကြောင်း ကျနော် " ဒေါက်တာ...အဲ့ဒါ ကျမပါပဲ.."
" အာဂ အဖိုး "
ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံခန်းသို့ရောက်လာသည် ။
" ဆရာကြီး..ကျနော့် အဖွားရဲ့အသုဘကို လိုက်ပို့ ဖို့မနက်ဖြန် ကျနော့်ကို
": မင်းအဖွားသေတာ ခဏခဏ ပါလား..အခု ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲ.." " မတတ်နိုင်ဘူး ခင်ဗျ..ကျနော့် အဖိုးက မိန်းမ ၈ ယောက်ရှိတယ်.."
" ပထမဦးဆံုး ယောင်္ကျား " ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ လူတွေ့စစ်မေးပွဲ ပြုလုပ်နေသည် ။ ရုပ်ချောချော ကျောင်းသူက
ပညာရှင် အဒမ် စမစ် အကြောင်းကို ပြောပြနေသည် ။ ထိုသို့ ပြောရာတွင် စမစ် ၏ ရှေ့ က အမည်ကို တစ်ခါမျှ မဖော်ပြချေ။
သို့ နှင့် ဆရာက ကျောင်းသူကို မေးသည် ။
" စမစ်ရဲ့ ရှေ့ မှာ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နာမည် ရှိသေးတယ် ..ပြောပြစမ်းပါ "
ကျောင်းသူထံမှ မည်သည့်အဖြေမှ မကြားရချေ ။ သို့ နှင့် ဆရာက " စိတ်ကို အေးအေးဆေးဆေးလေး ထား..ပထမဆံုး ယောင်္ကျားရဲ့နာမည်
ပြန် စဉ်းစား လိုက်စမ်းပါ.."
ကျောင်းသူ ၏ မျက်နှာတွင် ရှက်သွေးဖြာသွားသည် ။ ထို့နောက် တိုးတိုးလေး ဖြေသည် "
" ချာလီ ပါ "
" စကား ပြောမိကြခြင်း " " ဒီမှာ..ခင်ဗျား..ကျနော်နဲ့ရုပ်ရှင် လိုက်ကြည့် ပါလားဟင် "
" မကြည့်ချင်ပါဘူး ရှင်.."
" တွေ့ တဲ့ မိန်းမတိုင်းကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ခေါ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားလို့မထင်ပါနဲ့ ဗျာ.."
" ကျမကလဲ ယောင်္ကျားတိုင်းကို ငြင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး.."
" မျှောလ်င်ချ့က် မရှိဘူး " ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နှင့် ဒါရိုက်တာ တို့ဟော်တယ်တွင် ညစာ စားနေကြသည် ။ မင်းသမီးက မေးသည် ။ " ဆရာ..ရုပ်ရှင်တစ်ကားကား ရိုက်ဘို့အစီအစဉ် ရှိသလား ဟင် "
" လောလောဆယ် မရှိဘူး..အခု ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း စာအုပ် ရေးနေတယ် " " အဲ့ဒါဆို ကျမပေါင်ပေါ်က ရှင့်လက်ကို ရုတ်လိုက်ပါ.."
" ဘ၀တူ " " ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး ..ကျမ ယောင်္ကျားက အချိန်ရှိသရွေ့သူ့ အရင်မိန်းမ အကြောင်းကိုပဲ ပြောနေတယ် "
" ရှင် ကံကောင်းတယ်လို့ မှတ်..ကျမ ယောင်္ကျားက သူ နောက်ယူမဲ့ မိန်းမ
" ပြရင် မြင်မယ် " အူအတက်ပေါက်သော ရောဂါဖြင့် ရောက်လာသော အမျိုးသမီး ချောချောလှလှလေးကို ဆရာဝန်က အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသပေးလိုက်သည် ။ အမျိုးသမီးလေးက စိုးရိမ်သံဖြင့် မေးသည် ။ " ဆရာ..အမာရွတ်ကို မြင်နေရမှာလား ဟင် "
" အဲ့ဒါကတော့ ခင်ဗျားအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်..."
" မစိုးရိမပ်ါနဲ့" ညားခါစ စုံတွဲတစ်တွဲသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ မြို့ တစ်မြို့ ၏ ဟော်တယ်သို့ရောက်လာပြီး
အခန်း တစ်ခန်းကို ငှားသည် ။ မန်နေဂျာက အခန်းသော့ကို ကမ်းပေးရင်း ပြောသည် ။ ဒုက်ခ မပေးဘူးလို့ 
" ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ဟန်းနီးမွန်း ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်..မိတ်ဆွေတို ကို့ သူခိုးတွေ မျှော်လင့်ပါတယ်..."
အမျိုးသမီးက စိတ်အား တက်ကြွစွာ ပြန်ပြောသည် ။
" မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ရှင့်..ကျမတို့အိပ်ချိန်ရမယ် မထင်ဘူး..."
" အတွေ အ့ကြုံ ရှိပါရဲ့" အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သားဖွားနှင့်မီးယပ် အထူးကု ဆရာဝန် လူငယ်ထံ ရောက်လာသည် ။ ဆရာဝန်က အ၀တ်အစားများ ချွတ်ရန် ပြောရာ အမျိုးသမီး ၏ မျက်နှာတွင် ရှက်သွေးဖြာ သွားသည် ။ " ဘာလဲ...ဘယ်သူ့ ရှေ့ မှာမှ အ၀တ်အစား မချွတ်ဖူးဘူးလား "
" ချွတ်ဖူးပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ရှေ့ မှာ တစ်ခါမှ မချွတ်ဖူးဘူးး.."
" အကောင်းဆံုး အကြံ "
မင်္ဂလာမဆောင်မီ တရက်အလိုတွင် စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးထားသော လက်ဆောင်ပုံးတစ်ခုကို စာတိုလေး
အတူ သတို့ သမီး ရသည် ။ စတိုလေးမှာ...
" မင်္ဂလာဦးညမှာ လက်ဆောင်ပုံးထဲပါတဲ့ အရာကို ၀တ်ပါ..အဲ့ဒါဆို မင်းကို
တစ်သက်လုံး အချစ် ပြယ်မည် မဟုတ် " လက်ဆောင်ပုံးကို သတို့ သမီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖွင့်လိုက်သည် ။ အထဲတွင် ဘာမှ
" တစ်ခါဆို တစ်ယောက် " မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ကိုးလ တိတိ အကြာတွင် ဇနီးဖြစ်သူ မခံသာအောင် ဗိုက်နာလာသဖြင့် မိန်းမကို
ချက်ချင်း ခေါ်လာသည် ။ နာရီဝက်အကြာတွင် သားဖွားခန်းမှ ဆရာဝန် ထွက်လာပြီး အပြင်တွင်
စောင့်နေသော ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းဗျာ....ခင်ဗျား..သားယောင်္ကျားလေးရဲ့အဖေ ဖြစ်ပြီဗျ " ပူပူနွေးနွေး ကလေးအဖေ ဖြစ်လာသူ လက်က နာရီကို ကြည့်ပြီး ပြောသည် ။
" ကြည့်စမ်း..သဘာဝတရားဟာ အင်မတန် တိကျတာပဲ နော်..အခု ၇ နာရီ တိတိပဲ
နောက် မိနစ် ၂၀ အကြာတွင် ဆရာဝန် ထွက်လာပြန်သည် ။
" ထပ်ပြီး ကွန်ဂရယ်ကျူလိပ် လုပ်ပါတယ် ..ချစ်စရာ သမီးလေးရဲ့ အဖေ ခင်ဗျား ထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီ..."
" ထူးဆန်းပြီးရင်း ထူးဆန်းပါလား..တစ်မိနစ်မှ မလွဲဘူး.." ထိုသို့ပြောပြီး ကလေးနှစ်ယောက်အဖေ နာရီကို ကြည့်သည် ။
" ဒေါက်တာ..ကျနော် အပြင်ထွက်ပြီး ကော့ညက် တစ်ခွက်လောက် သွားမော့လိုက်ပါဥိးမယ်
နောက်တစ်ယောက်ဟာ ၁၁ နာရီခွဲ မတိုင်မီ မွေးလာစရာ မရှိပါဘူး...."
" တတိယ ယောင်္ကျား " " ရှင်ဟာ ကျမရဲ့တတိယ ယောင်္ကျားနဲ့သိပ်တတူာပဲ.." " ဟုတ်လား..ဒါနဲ့ခင်ဗျား ယောင်္ကျား ဘယ်နှစ်ယောက် ရခဲ့ဖူး သလဲ " " အခုထိ နှစ်ယောက် "
" အချစ်စစ် အချစ်မနှ် "
" အချစ်စစ် အချစ်မှန် ဆိုတာ ဘာနဲ တူ့သလဲ ..." " သူရဲခြောက်တာနဲ့တူတယ်..အားလုံးက ဒီအကြောင်းကို ပြောကြတယ်..ဒါပေမဲ့ မမြင်ဖူးဘူး..
" လက်ပါမှာ စိုး လို့ " ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် ကြေငြာသူက ပြောသည် ။
" ချစ်စွာသော ရုပ်မြင်သံကြား ပရိသတ်များရှင်... ပထမဦးဆုံး သက်တောင့်သက်သာ နေရာယူကြဖို့ပန်ကြားအပ်ပါတယ်..ပြီးတော့ ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို တစ်ခုခုနဲ့မပစ်ပေါက်မိအောင် ..ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ဟာ
ခပ်ဝေးဝေးမှာ ရွေ့ ထားလိုက်စေလိုပါတယ်.....အခု အချိန်ကစပြီး အဆိုတော်..ခင်ကလျာနုနုထွတ်ရဲ့သီချင်းများကို တင်ဆက်ပါတော့မယ် ရှင် "
" မိန်းမကို အလို မလိကုန်ငို ဘ်ူး " စကော့တလန်သား ဂျွန် ကို မိတ်ဆွေက မေးသည် ။
" ဟေ့လူ..မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား...ဘာများစိတ်ညစ်စရာ ရှိလို့ လဲ .."
စဉ်းစားကြည့်.. မကြာသေးဘူး .. ကနေ့ မနက်ကျ
" မိန်းမက ပိုက်ဆံပေးပါ..ပိုက်ဆံပေးပါဆိုပြီး ခဏခဏ့ပူဆာနေလို့ ဗျာ.. ခင်ဗျားပဲ ငွေ ငါးသောင်း ပေးပါဆိုပြီး ကျနော့်ဆီက သူ တောင်းတာ တစ်ပတ်တောင် တမြန်နေ့ က ငွေ ငါးသောင်း ထပ်တောင်းတယ် .. မနေ က့လေးသောင်း.. နှစ်သောင်း တောင်းတယ်..."
" ဒီ ပိုက်ဆံတွေကို သူ ဘယ်မှာ သုံးပစ်သလဲဗျ.." " မသိဘူး...ကျနော် သူ့ ကို တစ်ခါမှ မပေးသေးဘူး.."
" အလကား အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး "
စကောတလန်သား နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။ ၂ နှစ်ရှိနေပြီပဲ..
" ဟေ့..မင်း အခုထိ မိန်းမ မယူသေးဘူးလား...မင်းရဲ့ပထမဇနီး ကွယ်လွန်သွားတာ နောက် မိန်းမ ယူရင် ဘယ်သူမှ ကဲ့ရဲ့ မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး.."
" ငါ သိပါတယ်..အောင်သွယ်တွေက င့ါကို အမျိုးသမီးတစ်ချို့ နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးပါပြီ ..သူတို့ အားလုံး
" ဘာလဲ..မင်းကြိုက်တာ မတွေ့ လို့ လား " " ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး..တစ်ယောက်မှ အဆုတ်နာ ရောဂါ စွဲကပ်တဲ့သူ မပါဘူး " " အဆုတ်နာ ရောဂါ ဟုတ်လား...ဘာဆိုင်လို့ လဲ ကွ.." မဟုတ်လား..
" မဟုတ်ဘူးလေ...ငါ့ ပထမ ဇနီးက အဆုတ်နာ ရောဂါကြောင့် သေသွားတယ် အေး...သူ သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးတွေ ..အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်ကွ.."
" သတ်မတှန်ှုန်းပဲ ယူတယ်.." အစ်မဖြစ်သူကို ပိုးပန်းနေသော လူငယ်အား ပီတာလေးက ပြောသည် ။ " ခင်ဗျား...ကျနော့်အစ်မ ချောကလျာ နုနုထွတ် ကို ဟိုတစ်နေ့ က မွှေးမွှေးပေးတာ ကျနော် မြင်တယ်.."
ရှူး..တိုးတိုး..ရော့ မင်းအတွက် မုန့် ဖိုးငွေ တစ်ရာ..."
လေးဆယ့်ငါးကျပ်ကို ပိုငွေ အဖြစ် ပြန်ယူပါ.."
ကျနော်..အားလုံးဆီက ဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းပဲ ယူပါတယ်.. ငါးဆယ့်ငါးကျပ်ထက် ပိုလည်း မယူဘူး...လျှော့လည်း မယူဘူး "
" ယောင်္ကျားနဲ့ကြောင် " " ယောင်္ကျားဆိုတာ ဘာလဲ "
" ယောင်္ကျား ဆိုတာ ကြောင်နဲ့ တတူယ်....လာပြီး ပလူးပလဲ လုပ်တယ်..နောက် ထွက်ပြေးတယ်.."
" ခံစားမိပြီ "
" ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ် မိမိ အဖိုးကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာ ဘယ်အချိန်မှာ ခံစားရသလဲ .." " မြေးတွေကို
တွေ့ ရတဲ့အခါမှာ မခံစားရဘူး.. ညကျ
အဘွားနဲ့အိပ်တဲ့ အခါမှ ခံစားရတယ်.."
" TITANIC " အတ်တလန်တစ် သမုဒ်ဒရာတွင် အလွန် ကြီးမားသော ဇိမ်ခံ သင်္ဘောကြီး ခုတ်မောင်းနေသည် ။
လိုက်ပါလာသူများမှာ အထက်တန်းစား သူဌေး သူကြွယ်များချည်း ဖြစ်သည် ။ ယောင်္ကျားတွေက ဘိုး တိငု နှင့်မိန်းမတွေက ပွဲနေ ပွဲ
ထိုင် သွားသည့် အကောင်းစား ဂါဝန်တွေနှင့်..။
သူတို့ အားလုံး သင်္ဘော ၏ ဧည့်ခန်းကြီးထဲတွင် ရောက်ရှိနေကြသည် ။ ၀ီစကီ ၊
မာတီနီ ၊ ရှန်ပိန် ခွက်တွေ ကိုယ်စီ
ကိုင်ထားကြသည် ။ သင်္ဘော ကပ်ပီတိန် အခန်းထဲဝင်လာပြီး အားလုံးကြားအောင် အော်ပြောသည် ။ " သတင်းနှစ်ခု ကြေငြာစရာ ရှိပါတယ် ၊ တစ်ခုက ကောင်းတဲ့
သတင်း..နောက်တစ်ခုက မကောင်းတဲ့ သတင်းပါ
ဘယ် သတင်းက စပြောရမလဲ ခင်ဗျာ.."
ပရိတ်သတ် အားလုံး သံပြိုင် တောင်းဆိုလိုက်သည် ။ " သတင်းကောင်းကို အရင်ပြောပါ.."
" ဟုတ်ကဲ့..ကျနော်တို့အော်စကာ ဆယ့်တစ်ဆု ရပါတယ်..."
" လက်မတှစ်စ် " ( ရုရှားနိုင်ငံရှိ ညအိပ်ရထားများတွင် တွဲတိုင်းမှာ တွဲစောင့်ရှိသည် ၊ အများအားဖြင့် တွဲစောင့်သည် အမျိုးသမီး
ဖြစ်လေ့ ရှိသည် ။ ) ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နယ်ခရီးထွက်ရာမှ ပြန်လာသည် ။ တစ်ကိုယ်လုံး ညစ်ပတ်
ပေရေ နေသည် ။ ၀တ်ထားသော
ကုတ် အင်္ကျီစုတ်ပြဲနေသည် ။ မျက်နှာမှာလည်း ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ အပြည့်နှင့် ဖြစ်နေသည် ။ ခါးထောက်ပြီး စိုက်ကြည့်နေသော မိန်းမကို ၄င်းက ရှင်းပြသည် ။
" တွဲပေါ်ကို လက်မှတ်စစ် တက်လာတယ်..ငါ့ဆီမှာ လက်မှတ် မပါဘူး..ဒါနဲ့ ပဲ
တွဲပေါ်က ခုန်ဆင်းလိုက် ရတယ်.."
" ဒဏ်ငွေ ဆောင်လိုက်ပါတော့လား ..ဘာဖြစ်လို့ ရထားပေါ်က
" ဘယ်ဖြစ်မလဲ..လက်မှတ်စစ်က တွဲစောင့် အမျိုးသမီးရဲ့ယောင်္ကျားကွ..."
" မင်းသမီး " နာမည်ကြီး မင်းသမီး ပါဝင် ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ကားကို ဝေဖန်ချက်ရေးရာတွင် ..ဆောင်းပါးရှင်က
မင်းသမီးကို ၀က်မ နှင့် ခိုင်းနှိုင်း သုံးနှုံးထားသဖြင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဒေါဖေါင်းကာ ဝေဖန်ရေးဆရာကို တရားစွဲသည် ။
အမှုကို စစ်ဆေးသည့် နေ တို့င်း ရုံးခန်းတစ်ခုလုံး ပရိတ်သတ်များဖြင့်
ပြည့်ကျပ်နေသည် ။ နောက်ဆုံးတွင်
သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်လုံသဖြင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအား ဆောင်းပါးရှင်က လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ရန် သို့ မဟုတ်ပါက
ဒဏ်ငွေဆောင် ( လျှော်ကြေးပေး ) ရန် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ထုံးစံအတိုင်း အမှုရှုံးသူကို နောက်ဆုံးစကား ပြောခွင့်ပြုရာ ..ဝေဖန်ရေးဆရာ
နေရာမှ ထပြီး ပြောသည် ။
" တရားသူကြီးမင်း..ခင်ဗျာ..၊ ကျနော့်ရဲ့ဝေဖန်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အင်မတန်
အရေးကြီးတာ ဖြစ်လို့ 
သေချာအောင် ထပ်မေးပါရစေ.. ..မင်းသမီးကို ၀က်မ လို့ခေါ်
" ဟုတ်တယ်..ထပ်ခေါ်ရင် နောက်တစ်ခါ တရားရုံးကို ရောက်ဦးမှာပဲ.."
" တကယ်လို့ဝက်မ ကို မင်းသမီး လို့ခေါ်ရင်ကော....တရားဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းမလား ခင်ဗျာ.."
" မငြိစွန်းဘူး " " ၀က်မ ကို မင်းသမီး လို့ခေါ်ရင် ကျနော့်မှာ အပြစ်မရှိဘူးပေါ့.." " မရှိပါဘူး.."
ဝေဖန်ရေးဆရာသည် တရားလိုဘက် လှည့်လိုက်ပြီး ပြောသည် ။
" ဒီအမှုမှာ..အနိုင်ရသွားတဲ့အတွက် ခင်ဗျားကို ချီးကျူးပါတယ်..မင်းသမီး
" တောင်းပန်ပါတယ် "
နယ်သို့ခရီးထွက်ရာမှ လူတစ်ယောက် အရက်အတော်မူးပြီး အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသည် ။
၄င်းနေသည့် တိုက်ခန်းပြတင်းပေါက်ကို ကြည့်လိုက်ရာ.ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အ၀တ်အစား ချွတ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ သို့ နှင့် လှေ
ခါးအတိုင်း အထက်သို့ပြေးတက်သည် ။ တံခါးကို သော့နှင့် ဖွင့်သည် ..အထဲမှ ဂျက် ချထားသောကြောင့် ဖွင့်မရချေ. ။ စိတ်ဆိုးဆိုးနှင့်
တံခါးကို ကိုယ်လုံးနှင့် ပြေးတိုက်ပြီး ဖွင့်ရာ ပွင့်သွားသည် ။ ပွင့်ပွင့်ချင်း ဂမူးရှုးထိုးနှင့် အိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်သည် ။ ကုတင်ပေါ် အိပ်နေသော
အမျိုးသားကို ဆွဲကိုင်ပြီး ပြတင်းပေါက်မှ ပစ်ချလိုက်သည် ။
" ကယ်ကြပါဦး.." ဆိုသော အသံနှင့်တစ်ဆက်တည်း ဘုန်း ဆိုသော အသံကို
ကြားရသည် ။ အမူးပြေစ
ပြုလာသော လူက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြောသည် ။ အသံကို ကြားရသည် ။
" အင်း..တော်တော် မြင့်တာပဲ " နောက်မှ နေပြီး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ " မြင့်တာပေါ့...ဆယ်ထပ်က ကျတဲ့ဟာ.."
" ဘာပြောတယ်..ဆယ်ထပ်က ဟုတ်လား.." " ဟုတ်တယ်...ဆယ်ထပ်."
" ဟာ..ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ်...ကျနော် အထပ်မှားသွားတယ်.."
" ၀မ်းမသာနိုင်ေပါင် " ယောင်္ကျားဖြစ်သူ အိမ်သို့ပြန်လာသည် ။ မျက်နှာမှာ အလွန်ညှိုးငယ်နေသည် ။ အ၀တ်အစားလဲပြီး မီးဖိုချောင်ဘက် သွားသည် ။ ညစာကို အရသာ မရှိစွာ စားသည် ။ စားနေရင်းလည်း နံရံကို ငေးငေးငူငူ စိုက်ကြည့်နေသည် ။
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ အိပ်ရာဝင်လာသည်အထိ မစောင့်တော့ပဲ ၀မ်းသာစရာသတင်းကို ပြောရန် မိန်းမဖြစ်သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
သို့ နှင့် မီးဖိုချောင်ထဲ ပေါ့ပါးစွာ ပြေးဝင်လာပြီး ပြောသည် ။
" မောင်....ကျမ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီ ရှင့် .." " သြော်..မင်းရောပဲကိုး..."
" ကိချုချာရဲ့ ဒုက္ခ " မြို့ နယ်ကောင်စီရုံးသို့ကိုချူချာ ရောက်လာပြီး အသင့်ရေးထားသော လျှောက်လွှာကို ကောင်စီ
အပ်သည် ။ ထို့ နောက် မိမိရင်ဆိုင်နေရသော ပြသနာ ကို တင်ပြသည် ။
" လူကြီးမင်းခင်ဗျာ..ကျနော် ဒီအတိုင်း ဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး..။ ကျနော့်
ရဲ့ ပြတင်းပေါက် တည့်တည့်မှာ အမျိုး
သမီး ရေချိုးခန်း ( ရုရှားလို ဘန်းညာ ) ရှိနေတယ် ၊ ကျနော် အကုန်လုံး မြင်နေတယ် ။ ကြာရင် ကျနော် ရူးလိမ့်မယ် ။ ကျနော့်ရဲ့ 
အကျင့်သီလတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ကျနော့်ကို အိမ်ခန်း ပြောင်းပေးပါ .." ကိုချူချာ၏အိမ်ခန်းသို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ရောက်လာပြီး စစ်ဆေးသည် ။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ပြောသည် ။
" ဘယ်မှာလဲ..ဘာမှလည်းမမြင်ပါလား.." " ဗီရိုပေါ်ကို တက်ကြည့်ပါ "
ကော်မရှင်လူကြီး ဗီရိုပေါ် တက်သည် ။
" ဒီအပေါ်က ကြည့်လည်း မမြင်ရပါဘူး "
" ဘယ်ဘက် နည်းနည်းတိုးပြီး ကြည့်ပါ "
" ကိုင်း ..တိုးတယ်ဗျာ..ဘယ်မှာ မြင်ရလို့ လဲ.." " ဘယ်ဘက်ကို နည်းနည်း ထပ်တိုးလိုက်ပါဦး "
ပြောသည့်အတိုင်း ထပ်တိုးလိုက်ရာ ၀ုန်း ဆိုသော အသံနှင့်အတူ ကော်မရှင်လူကြီး
ကျသည် ။ ကိုချူချာက ပြောသည် ။ " ကိုင်း..တွေ့ တယ်မဟုတ်လား..ကျနော်ဆို တစ်နေ့ တစ်နေ့ဗီရိုပေါ်က ကျတာ
အကြိမ်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်ဘူး "
" တွေးစရာ ရှားသလား " ပထမတန်း ကလေးများကို စာလုံးတစ်လုံးတည်း ရှိသော နာမ်ပုဒ် တစ်ခုစီ စဉ်းစားပြီး ပြောကြရန် ဆရာမက
ခိုင်းရာ..ပီတာလေး ချက်ချင်း လက်ညှိုးထောင်သည် ။ ပီတာလေးအကြောင်း သိနေသော ဆရာမက အသံမာမာဖြင့် ၄င်းကို အမိန့် ပေးသည်။
" ပီတာ..မင်း မညစ်ပတ်နဲ့ ..သွား....အခု အိမ်ပြန်တော့..."
အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ အမေက ပီတာလေးကို မေးသည် ။
" သားကို ဘာဖြစ်လို့ဆရာမက အတန်းထဲက မောင်းထုတ်လိုက်တာလဲ.." ပီတာလေး အကြောင်းစုံ ရှင်းပြသည် ။ ပီတာလေးကို ဆက်မပြောရန်
တားလိုက်ပြီး အမေက အမိန့် ပေးသည် ။
" ဆက်မပြောနဲ့ ..ငါ သဘောပေါက်ပြီ....သွား..အခန်းဒေါင့်မှာ ရပ်နေ နေ့ လယ်စာ
စားတဲ့ အချိန်ထိ ဘယ်မှ
မသွားဘဲ ရပ်နေ " အဖေ ရုံးမှ ပြန်လာသည် ။ သားကို မေးရာ ပီတာလေး အစက ပြန်ပြောသည်
" နေပါဦး..သားက ဘာပြောမယ် စိတ်ကူးလို့ လဲ.." " အိမ်
ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ "
ပီတာလေးအဖေ နေရာမှ ထပြီး မိန်းမရှိရာ . မီးဖိုချောင်ဘက် သွားသည် ။
မိန်းမ၏ နားရွက်ကို လိမ်ဆွဲပြီး ငေါက်သည် ။
" နောက်ဆိ်ုမှတ်ထား....အိမ် အကြောင်းကို ခပ်များများ စဉ်းစား "
" စိေုသာလက် မခြောက်စေနှင့် " ဂျာမန် မြို့ စားကြီးတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသော သမီး သုံးယောက် ရှိသည် ။ သုံးယောက်စလုံး အိမ်ထောင်ပြုသင့်
နေကြပြီ ။ သို့ သော် ဘယ်သမီးကို ယောင်္ကျား အရင်ပေးစားရမလဲ မြို့ စားကြီး ဝေခွဲမရနိုင် ဖြစ်နေသည် ။ သို့ နှင့် တစ်နေ့ တွင် သမီး
သုံးယောက်စလုံးကို ခေါ်ပြီး ပြောသည် ။ " ကိုင်း..သမီးတို့ ရေ..သမီးတို့ ကို ဖေဖေ တစ်ခု ပြောချင်တယ်.. ဟော့ဒီ
ရေဖလားက ရေထဲ ..သမီးတို့ ရဲ့ လက်ကို
စိမ်လိုက်ကြပါ...လက်ကို အ၀တ်နဲ့လုံးဝမသုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားပါ...၊
လက်အရင် ခြောက်တဲ့ သမီးကို
အရင် အိမ်ထောင်ပြုပေးမယ် "
သမီးများ ၄င်းတို ၏့လက်ကို ရေထဲ စိမ်လိုက် ကြသည် ။ သမီးကြီး နှစ်ယောက်က အဖေ ပြောသည့်အတိုင်း အေးအေး
လေး ထိုင်ကာ လက်ခြောက်မည့် အချိန်ကို စောင့်သည် ။ သမီးအငယ်ဆုံးကမူ လက်နှစ်ဖက်ကို ရမ်းပြီး " ယောင်္ကျား မယူချင်ဘူး ..ယောင်္ကျား မယူချင်ဘူး
ဟု တချိန်လုံး အော်သည် ။
၄င်း၏ လက် အရင်ဆုံး ခြောက်သွားသည် ။
သမီးထွေးကို မြို့ စားကြီး လင်ပေးစားလိုက်သည် ။
" သံအမတ်ကြီး " သံရုံး ဧည့်ခံပွဲ တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည် ။ ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်တို့ ၏ အမည်ကို အသံ ချဲ့ စက်မှ တစ်ဆင့်
ကြေငြာ ပေးသည် ။ " ဗြီတိသျှ သံအမတ်ကြီး နှင့် ၄င်း ၏ဇနီး ကြွရောက် လာပါတယ် "
" အီတလီ သံအမတ်ကြီး နှင့် ၄င်း ၏ ဇနီး ကြွရောက် လာပါတယ် " " ဂျာမန် သံအမတ်ကြီး နှင့် ၄င်း ၏ ဇနီး ကြွရောက် လာပါတယ် "
" ပြင်သစ် သံအမတ်ကြီး နှင့် စပိန် သံအမတ်ကြီးရဲ့ဇနီး ကြွရောက် လာပါတယ်.."
" တစ်အမိ် လိေုနတယ် " မကြာမီက လက်ထပ်လိုက်သော ဆရာဝန်ထံ ၄င်း ၏ မိတ်ဆွေများက ပိုကာကစားရန် ဖုန်းဆက် ခေါ်သည် ။
" အရေးပေါ် ဆင့်ခေါ်တဲ့ ဖုန်း ကွ " ဟု ပြောပြီး ဆရာဝန် တယ်လီဖုန်းခွက်ကို
ချလိုက်သည် ။ အ၀တ်အစားများ အမြန်ဆုံး ကောက်ဝတ်သည် ။
" အခြေအနေ သိပ်စိုးရိမ်စရာများလား မောင် " ဇနီးသည်က မေးသည် ။ " ဟုတ်တယ်...ဆရာဝန် လေးယောက်တောင် ရောက်နေကြပြီ...."
" လူကြီး နဲ့လူငယ် " လူကြီးများသည် ယနေ့ ခေတ် လူငယ်များကို အမျိုးမျိုး အပြစ်တင်နေကြရာ အသက် ၈၀ အရွယ် အဘွား မြ
၏ လူငယ်တွေအပေါ် အမြင်မှာ တစ်မျိုး ထူးဆန်းနေသည် ။ သူ ပြောပုံကိုလည်း ကြည့်ပါဦး... " လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆၀ ကဆိုရင် လမ်းပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ရည်းစားစကား
လိုက်ပြောတဲ့ အကောင်နဲ့၊ မျက်လုံး
ကျွတ်မတတ် ငမ်းတဲ့ အကောင်နဲ့။ လွတ်ကို မလွတ်လပ်ဘူး..။ အခုခေတ်
လူငယ်တွေ အရင် လူငယ်တွေထက်
ပိုပြီး ယဉ်ကျေးတယ်..ကြည့်လေ..ကျုပ် အချိန်မရွေး လမ်းထွက်
လျှောက်တယ်..ဘယ်သူမှ ကျုပ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး
" ချစ်တော့ ချစ်တယ် " ကိုဘမောင် က မိမိ၏ ချစ်သူကို ပြောသည် ။
" အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကိုရွှေဂဲ လောက် မချမ်းသာဘူး
၊ သူ့ လို တိုက် နဲ့ခြံ ကို
မပိုင်ဘူး..ဇိမ်ခံကားလည်း မရှိဘူး ..ပြီးတော့ သူ့ လို နိုင်ငံခြားမှာ ငွေစာရင်း
မင်းကို ကိုယ် သိပ်ချစ်တယ်..."
" ကျမလည်း ကိုဘမောင်ကို ချစ်ပါတယ် ရှင်..ဒါနဲ့စကားမစပ် ရှင့် သူငယ်ချင်းနဲ့ 
ကျမကို မိတ်ဆက် ပေးပါလားဟင် "
" ငွေရတု " ကိုဘမောင်တို့လင်မယား အိမ်ထောင်သက် ၂၅ နှစ်ပြည့်သည့် ပွဲကို ကိုဘမောင်၏ တိုက်အိမ်
ကျင်းကသည် ။ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်များ ရယ်သံမောသံဖြင့် ဆူညံနေသည် ။ ရုတ်တရက် အိမ်ရှင် ကိုဘမောင် ပျောက်နေ
သည်ကို ၄င်း၏ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ကိုရွှေဂဲ သတိထားမိသည် ။ သို့ နှင့် လိုက်ရှာသည်။ အပေါ်ထပ် စာကြည့်ခန်းထဲတွင် ၀ီစကီ
ပုလင်းကို ကိုင်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေသော ကိုဘမောင်ကို တွေ့ သည် ။
" ဟေ့လူ..ဒီလောက် ၀မ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေ့ မှာ ဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာလဲ
ဒီမိန်းမနဲ့ရပြိး ၅ နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ
အရင်းနှီးဆုံးမို့ပြောပြပါမယ် ။ ကျနော်
သူ့ မျက်နှာကို မကြည့်ချင်လောက်အောင် မုန်းလာတယ်..၊ ဘယ်လောက်အထိ
့ဖြစ်သလဲဆိုရင် သူ့ ကို သတ်ရင်
ကျနော် ဘယ်လောက်ထိ အပြစ်ဒဏ် ခံရနိုင်သလဲဆိုတာ ရှေ့ နေတစ်ယောက်ဆီ
သူက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ လို့ ပြောတယ်....ခင်ဗျား..စဉ်းစားကြည့်... ဒီနေ့ ဆိုရင် ...ကျနော် လွတ်ပြီဗျ....ဟီး.ဟီး.ဟီး.."
အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးတစ်ယောက်သည် ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ်..မိန်းခလေးဖြစ်ဖြစ် မြေးတစ်ယောက်ကို
အလွန်အမင်း ရချင်နေသည် ။ သား သုံးယောက်စလုံး အိမ်ထောင်သည်များ ဖြစ်ကြသော်လည်း တစ်ယောက်မှ မြေးလက်ဆောင် မပေးနိုင်ကြ
သေးချေ ။ တစ်နေ့ တွင် သား သုံးယောက်ကို ၄င်းတို ၏့ဇနီးများနှင့် မိမိအိမ်သို လ့ာကြရန် ခေါ်လိုက်သည် ။ အားလုံး စုမိသောအခါ သူဌေး ကြီးက ပြောသည် ။
" သားတို့သမီးတို့ ရေ..မြေးလေး တစ်ယောက်လောက် ရချင်တဲ့စိတ် အဖေ့မှာ
အင်မတန် ပြင်းပြနေတာ ကြာပြီ..။
ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘယ်သူ့ မှ အဖေ့ကို မြေးလက်ဆောင်
မပေးကြဘူး..အဲ့ဒီတော့..ဒီနေ့အဖေ ပြောမယ် ..သေသေ
ချာချာ နားထောင်ကြ..၊ အဖေ့ကို ပထမဆုံး မြေးလက်ဆောင် ပေးတဲ့သားကို
အဖေ့အမွေတွေအားလုံး ပေးမယ်လို့အဖေ
ဆုံးဖြတ်ထားတယ်.. ပျော်ရွှင်စရာ အဲ့ဒီရက် အမြန်ရောက်ပါစေလို့ 
ရှန်ပိန် သောက်လိုက် ကြရအောင်..."
သူဌေးကြီး ၄င်း၏ ခွက်ကို ပြန်ချလိုက်ရုံ ရှိသေးသည် ။ အခန်းထဲမှ စုံတွဲ
( ရုရှား စစ်ဗိုလ်တစ်ဦး ပြောပြသော ဟာသ ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ဖြင့် တပ်ရင်းရုံးသို့ရောက်လာသည် ။
တပ်ရင်း ရုံးဝန်ထမ်းများ တန်းစီပြီး
တစ်ဦးချင်း မိမိကိုယ် မိမိ မိတ်ဆက်သည် ။
" ဗိုလ်မှူး ပီထရော ပါခင်ဗျ " " အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ.." " ၃၄ နှစ်ပါ ခင်ဗျ "
" ရှိပါတယ်...သားသမီး နှစ်ယောက်ပါ.." " အေး အေး ဆက်ပြီး အမှုထမ်းပေါ့ ဟုတ်လား.." " ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ဆီးဒရော့ ပါ ခင်ဗျ " " အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ "
" အသက် ၄၀ ပါ..၊ အိမ်ထောင် ရှိပါတယ် ၊ ကလေး သုံးယောက်ပါ ": " ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်..ဒီအတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ.."
" ဆာဂျင် ပရိုနင် ပါ ခင်ဗျ.. အသက် ၂၅ နှစ် .. ကလေး ဆယ်ယောက်.." ဆေးလိပ်ကို
" ဟေ့..ဆာဂျင်. ငါလေ ဘယ်လာမော စီးကရက်ကို သိပ်ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ငါ ပါးစပ်ထဲက ထုတ်တယ်ကွ..၊ အမြဲတမ်း ကိုက်မထားဘူး..သိလား....."
" မမှားစေနဲ့" အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဆရာဝန်ပေါက်စထံ ရောက်လာပြီး ပြောသည် ။ နာနေတယ်ရှင်.."
" ဒေါက်တာရယ်...ကျမကို ကူပါဦး...တစ်ချိန်လုံး..ခေါင်းကိုက်တယ်..စအိုကလည်း လူငယ် ဆရာဝန် အတန်ကြာ စဉ်းစားသည် ။ မေးစေ့ကို ပွတ်သည် ။ နောက်ဆုံးတွင်
တစ်ပြားကို ယူပြီး ဓါးဖြင့် နှစ်ခြမ်းစိတ်လိုက်သည် ။
" ရော့ ဗျား...ဒီတစ်ခြမ်းက ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး...အဲ ..ဒီတစ်ခြမ်းကတော့
သေသေချာချာ မှတ်ထားနော်...မမှားစေနဲ့"
" ကျနော် လာမယ် " ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် အချိုးအစား ကျနပြေပြစ်ပြီး အလွန်တရာ ချောမောလှပသည့် အမျိုးသမီးလူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ဆရာဝန်က သူမကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား အတော်လေး နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်..အခု ဒီလို
အိမ်ရောက်ရင် အ၀တ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေပါ.. အခု
ကျနော် ဖျော်ပေးလိုက်မဲ့ဆေး
ပုလင်းရဲ့သုံးပုံ တစ်ပုံကို သောက်လိုက်ပါ..ခဏကြာရင် အိပ်ချင်သလိုလို
တံခါးဖွင့်မပေးနဲ့ ..တယ်လီဖုန်းဆက်ရင်လည်း ကောက်မကိုင်ပါနဲ့ ..အဲ..တံခါးကို
သုံးချက်ခေါက်သံ ကြားရင်တော့ ဖွင့်ပေးနော်..."
" တူညေီသာ အတွေးများ " မီးရထားအိပ်ခန်းတွဲတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးတည်း လိုက်ပါလာကြသည် ။ တစ်ယောက်ကို
တစ်ယောက် အပြန်အလှန် စိုက်ကြည့်နေကြသည် ။ အမျိုးသမီးက မေးသည် ။ " ရှင် အခု ဘာကို တွေးနေတာလဲ.."
" ခင်ဗျား တွေးသလိုပဲ ကျနော်လည်း တွေးနေတယ် " " ဟင်း..ရှင် တော်တော် ညစ်ပတ်ပါလား.."
" စဉ်းစားစရာပဲ " နယ်မှ တစ်ရက်စောပြီး ပြန်လာသည့် ယောင်္ကျားကို မိန်းမက ညစာ ပြင်ကျွေးနေသည် ။ ရုတ်တရက် ၀ရန်တာမှ
အမျိုးသား တစ်ယောက် ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့် ပေါ်လာပြီး ပြောသည် ။
" ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ..ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ အိမ်ခန်းကနေ ကျနော် ဖြတ်သွားလို့ဒီလိုပါ...ကျနော့်အသိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီ လာတယ်..မမျှော်လင့်ပဲ..သူ့ 
ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ ရဲ့အိမ်ဝရန်တာကို ကျနော် တွယ်ဆင်းမိလာပါတယ် "
ထိုသူ အခန်းအပြင်ဘက် ထွက်သွားသောအခါ ယောင်္ကျားက မိန်းမကို ပြောသည် ။ " ငါတို့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ နေတယ်...ဒီလူ ဘယ်အခန်းကို ရောက်ခဲ့ပါလိမ့်..."
" အထင်မသေးပါနဲ့" နယ်မှ ပြန်လာသော ယောင်္ကျားသည် မိမိ မရှိတုန်း မိန်းမဖြစ်သူ တစ်ခြား ယောင်္ကျားနှင့် ဖောက်ပြားကြောင်း
သတင်းအတိအကျရသဖြင့် မိန်းမကို စစ်ဆေးမေးမြန်းသည် ။ " ကောင်မ..နင် လော်လီဖောက်ပြားတဲ့အကြောင်းကို ငါ သိပြီးပြီ.. နင် လိမ်မယ်
မကြံနဲ့..မှန်မှန်ပြောစမ်း
ဘယ်သူနဲ့ဖောက်ပြန်တာလဲ..ရုံးက ငါ့ မိတ်ဆွေ အီဗန် နဲ့ လား."
" ဟိုဘက်တိုက်က ငါ့ သူငယ်ချင်း အင်ဒရေ နဲ့ လား.." " မဟုတ်ပါဘူး "
" ဒါဆိုရင် ငါ့ ကျောင်းနေဘက် နီကလို ငိုနဲ့ လား..."
" နေပါဦး..ဘာဖြစ်လို့ရှင့် သူငယ်ချင်းတွေကို စွပ်စွဲနေရတာလဲ....ဘာလဲ.. ကျမမှာ ကိုယ်ပိုင် ယောင်္ကျား မိတ်ဆွေတွေ မရှိဘူးလို့ရှင် ထင်နေသလား..."
" သတိပေးချက် " ကင်းစောင့် တာဝန်ကျသည့် အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ မှ စစ်သမီးကို အရာခံဗိုလ်က မှာကြားနေသည် ။ လို့ အော်ရတယ်
" သေသေချာချာ မှတ်ထား...ကင်းစောင့် တာဝန်ကျတဲ့သူဟာ ရပ်..။ ဘယ်သလဲူ ရှေ မ့တိုး နဲ့..ကျမ အော်လကို မ်ယ်နော် လို့မပြောရဘူး...နားလည်လား..."
" ဂဏန်းတော်တဲ့ကိချုချာ.." သင်တန်းဆရာက ရဲဘော်များကို လက်ပစ်ဗုံး ပစ်နည်း သင်ပြနေသည် ။
" စနက်တံကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်..အဲ့ဒီနောက် ..၂၁ အထိ ရေပြီး ပစ်လိုက်..ဝေးလေ
မိနစ် အနည်းငယ်အကြာတွင် လက်ပစ်ဗုံးကိ်ု လက်ထဲ ဆက်ကိုင်ထားသည့်
ရဲဘော် ချူချာကို သင်တန်းဆရာ
သတိထားမိရာ..စိုးရိမ်တစ်ကြီး လှမ်းအော် ပြောလိုက်သည် ။ " ဟေ့ ရဲဘော်..ပစ်လိုက်တော့လေ ဘာဖြစ်လို့ဆိုင်းနေတာ လဲ..." " ကျနော ၁၀၀ အထိ ရေတတ်တယ်ခင်ဗျ "
ယောင်္ကျားတို့တာဝန် "
( မိန်း မရစ ယောင်္ကျားများအတွက် အကြံကောင်းများ ) " "
အိမ်မှထွက်တိုင်း..အိမ်သိုြ့ ပန်ရောက်လာတိုင်း မိန်းမကို မွှေးမွှေးပေးပါ " မိန်းမဖြစ်သူ သတင်းစာ ဖတ်နေလျှင် သို့ မဟုတ် တီဗွီကြည့်နေလျှင်
ပုံထားသည့် အ၀တ်များကိ်ု လျှော်လိုက်ပါ "
မိန်းမကို အပ်ပါ " နားထောင်ပါ.."
မိန်းမရဲ့ခွင်ပြုချက် မရဘဲ ဘယ်ကိုမှ မသွားပါနဲ့"
အရက် မသောက်နဲ့ဆေးလိပ် မသောက်နဲ့ရတဲ့ လစာ တစ်ပြားမကျန်အောင်
မိန်းမ အကြိုက်ဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပါ..သူ့ စကားကို တစ်သဝေမတိမ်း
မိန်းမ ရှိခိုး သွားမကြိုး ဆိုတဲ့ စကားကို အမြဲ သတိရပါ.."
အခု ပေးတဲ့ အကြံတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်လို့ မှ မိန်းမက မကျေနပ်ဘူး ဒင်းကို ရေနှစသ်တ်ပလိကု"
" ကျနော့် နာမည် ဘမောင် " " ဒီမှာ မိတ်ဆွေ..ခင်ဗျားမိန်းမ ဘာဖြစ်လို့မကြာခဏ ဆိုသလို မျက်နှာမှာ အညိုအမဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရုံးကို တက်လာရတာလဲ.."
" ကျနော် သူ့ ကို တစ်ခါတစ်လေ ရိုက်နှက်ဆုံးမတယ်....ဒါကြောင့်ပါ..." " အားနွဲ တဲ့ မိန်းမသားကို ရိုက်နှက် ဆုံးမရတယ်လို့ဗျာ..လူကြားမကောင်းပါဘူး.." " သူမွေးထားတဲ့ ကြက်တူရွေးက ချာလီ..ငါ့ကို နင်းပေးစမ်းလို့အမြဲတမ်း အော်နေတာကိုဗျ "
" မယူနဲ့" ကျောင်းနေဘက် အမျိုးသမီး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။ " အိုင် ယောင်္ကျားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ..." " ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း...ဘယ်သူနဲ့ လဲ.." မနေ့ ကတောင် ချီးကျူးသေးတယ် "
" အရင် ရုံးမှာ အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားပဲ..အင်မတန် သဘောကောင်းတယ် အိုင့်ကို အိမ်ထောင် ထိန်းသိမ်းမှု တော်တယ် အချက်အပြုတ် ကောင်းတယ်လို့" အိုင့် အနေနဲ့ ကတော့ ဒီလူကို မယူသင့်ဘူးလို့ထင်တယ် " " ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
" ဘာဖြစ်ရမလဲ....မညားခင်တည်းက လိမ်ပြောတတ်နေပြီ.."
" အပယ်ခံ " " မနေ က့ကျနော့်ကြောင့် မိန်းမ နှစ်ယောက် ရိုက်လား ပုတ်လား အထိ ဖြစ်ကြတယ်.." " ဟာ...မဖြစ်နိုင်တာပဲ "
" မယုံ မရှိနဲ့ကိုယ်တွေ့ ဗျ.. တစ်ယောက်က အော်ပြောတယ် နင့် အကောင်
နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ကက်ကက်လန် ပြန်ပြောတယ် ..ဒီအကောင်ကို့ ငါက
ဘာလုပရ်မှာလဲ တဲ့ "
" နောင်တ "
ကိုဘမောင်တို့လင်မယား အိပ်မောကျ နေကြသည် ။ ရုတ်တရက် မိန်းမဖြစ်သူ တဟီးဟီး နှင့် ငိုသံကို ကြားပြီး
လန့် နိုးသွားသည် ။ ငိုရုံမက တစ်ကိုယ်လုံးလည်း လှုပ်ခါနေသည်ကို တွေ့ ရာ ကိုဘမောင် မိန်းမကို နှိုးလိုက်သည် ။
" ဟေ့ မင်း ဘယ်လြို ဖစ်တာလဲ..အိပ်နေရင်း
" ကျမ အိပ်မက်ဆိုး မက်တယ်ရှင့် " " ဘယ်လို အိပ်မက်မျိုး မို့ လို့ လဲ "
" ကျမ တောင်ပေါ်က လိမ့်ကြပြီး သေသွားတယ် ။ လူတွေ စုလာကြပြီး ကျမကို သင်္ချိုင်းဆီ သယ်သွားတယ်
အဲ့ဒီမှာ သူတို့တွင်းတူးပြီး ကျမရဲ့ အလောင်းကို တဖြည်းဖြည်း ချကြတယ်
..အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရှင်..ကျမကို နှိုး
လိုက်တာပဲ..." ကိုဘမောင် ကိုယ့်နဖူးကိုယ် လက်ဖြင့် ပြန်ရိုက်သည် ၊ နှုတ်မှလည်း ကြိတ်မနိုင်
ခဲမရသံဖြင့် ပြောသည် ။
" တော်တော် အသုံးမကျတဲ့ အကောင်...ဘာဖြစ်လို့မင်းကို ငါ
" ချို ပေါက်ပြီ "
စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကို ကိုချူချာက ပြောသည် ။
" ကျနော့်မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီ လာတောင်းတာပါ
ဆရာ..အခုတစ်လော ကျနော့် မိန်းမရဲ့အ၀တ်အစားတွေကို တစ်
ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတစ်ခု စွဲနေတယ်..၊ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ သူ့ယောက်ယောက်က ခိုးလိမ့်မယ်ချည်း ထင်နေတယ် "
" ခင်ဗျား..သေချာရဲ့ လား "
" သေချာပါတယ်ဆရာ...သူ့ အ၀တ်အစားတွေ မပျောက်အောင် စောင့်ကြည့်ဖို့ 
ငှားထားတယ်..အဲ့ဒီလူကို မနေ့ ညက အ၀တ်အစား ဗီရိုထဲမှာ ကျနော်
တွေ့ လကိုရတယ်..."
" တစ်ခပဲု မှားတယ် " အမျိုးသမီး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။
" အိုင့်ကို ဗေဒင်ဆရာက ပြောတယ် သိလား..၊ အင်မတန် ရုပ်ဖြောင့်တဲ့ ယောင်္ကျား
တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ မယ်
သူ နဲ့အိမ်ထောင်ကျမယ်...အမွှာပူး မွေးမယ်တဲ့.."
" ဟောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်သလား.."
" အိမ်ထောင်ကျတာက လွဲလို့ကျန်တာတွေ အားလုံးမှန်တယ်.."
" ကြံရာပါ " လူငယ်သည် ဒုတိယထပ်သို့လှေကားထောင်ပြီး တက်လာသည် ။ အမှောင်ထဲတွင် ၄င်းက
" အချစ်ရေ...မင်းဘယ်မှာလဲ ဟေ့.."
" ကျမ ဒီမှာ..တိုးတိုးပြောပါရှင့် ..ဖေဖေ နိုးသွားဦးမယ်.." " မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ..မင်းအဖေ အောက်ကနေ လှေကားကို ကိုင်ထားပေးတယ်.. မင်းအမေကိုပါ ခေါ်သွားရင် ငွေ ငါးသောင်း ပေးလိုက်ဦးမယ်တဲ့"
" အတုခိုးသူ " ပီတာလေးသည် ၄င်း၏ အစ်ကိုအကြီးဆုံး လုပ်သည့်အတိုင်း အတုခိုး လိုက်လုပ်လေ့ ရှိသည် ။ တစ်နေ့အခန်းထဲ
ထိုင်နေရင်း တစ်ဖက်ခန်းမှ အစ်ကိုကြီး၏ အသံကို ကြားရသည် ။ အစ်ကိုကြီးက ၄င်း၏ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြနေခြင်း ဖြစ်သည် ။
" ငါ့ ကောင်မလေးကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ် တင်လိုကြ် ပီး တောဘက်ကို
သူ့ ကိုနမ်းမယ် လုပ်တယ်..ဟင်အ့င်း..ဟင်အ့င်း လို့ ပြောပြီး ကောင်မလေး နောက်ကို
မော်တော်ဆိုငကယ်ပေါ်တက်ပြီး စက်ကို နှိုးတယ် " ကောင်းပြီလေ ဒါလေးတောင်မှ
ခွင့်မပြုဘူး ဆိုတော့ ကိုယ့်
ဟာကိုယ် လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်တော့ " လို့ပြောပြီး ငါ မောင်းထွက်သွားတယ်. " နောက်တစ်နေ့ တွင် ပီတာလေး စက်ဘီးစီးရင်း အိမ်နီးချင်း နာတာရှာ လေးကို
တွေ့ သည် ။ စက်ဘီးနောက်ခုံပေါ်
နာတာရှာ လေးကို တင်ပြီး တောထဲဘက် နင်းသည် ။ ရောက်သောအခါ ပီတာလေးက ကောင်မလေးကို မေးသည် ။
" နာတာရှာ..ငါ နင့်ကို နမ်းချင်တယ်..ရမလား.." " နမ်းလေ "
" အင်း...ဒီလိုဆို ရော့..စက်ဘီးယူသွား...ငါ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့မယ် "
" စိတမ်ဆိုး ပါနဲ့" ဧည့်သည်အမျိုးသမီးက အိမ်ရှင် ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။ " တော်ပြီ..ရှင်တို့ အိမ်ကို ကျမ ဒီတစ်သက်
အိမ်ရှင် ယောင်္ကျားက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြန်မေးသည် ။
" ဒေါသ ရှေ့ မထားပါနဲ့..ကျနော့်ကို ပြောပြစမ်းပါ..ဘာဖြစ်လို့ လဲ.."
" ရှင့် မိန်းမ ကျမကို စော်ကားလိုက်တယ်လေ.."
" နေပါဦး..ကျနော့် မိန်းမ ဘာပြောလိုက်လို့ လဲ..." " ကျမကို အပျက်မ လို့သူ ခေါ်လိုက်တယ်လေ.. ကောင်းကြသေးရဲ့ လား..." " သြော်..ဒါလား..ဒါနဲ့ များတော့ စိတ်မဆိုးစမ်းပါနဲ့ ဗျာ....ကျနော့်ကိုပဲ ကြည့်..
ကျနော် ရေတပ်က ထွက်လိုက်တာ ၁၅ နှစ် ရှိပြီ...ခုချိန်ထိ ကျနော့် မိန်းမက
ကပ်ပတီနိ် လို့ခေါ်တုန်း
အင်္ဂလန်ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ကြောငြာတစ်ခု ပါလာသည် ။
" ကျနော်တို့လင်မယား အသက် သုံးဆယ်ကျော်စီပဲ ရှိကြသေးသည် ။ သားသမီး
အားလုံး ယောင်္ကျားလေးချည်း ဖြစ်သည် ။ ကျနော်တို့သမီးလေး တစ်ယောက်
လိုချင်သည် ။ အကြံဥာဏ်
အားဖြင့် ကူညီကြပါရန်..." ကြော်ငြာပါလာပြီး မကြာမီ နိုင်ငံအစုံမှ အကြံပေးစာများ ရောက်လာသည် ။ အမေရိကန် နိုင်ငံသား " ဆက်လက် စမ်းသပ်ပါ "
သြစတေးလျ နိုင်ငံသား " ဘုရားသခင် ရှေ့ မှာ ဆုတောင်းပါ " တောင်အာဖရိက နိုင်ငံသား " အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ "
အိန်ဒြီယ နိုင်ငံသား " ယောဂ ကျင်သ့မျူား အသင်းသို့ဝင်ပါ " ပြင်သစ် နိုင်ငံသား " အမြန်ဆုးံ လာခဲမ့ယ် "
" သဘောမတူဘူး " မွေးပြီး တစ်နှစ်ကြာမှ မိမိတို ၏့သားသမီးများမှာ လမ်းလျှောက်နိုင်ကြပြီး နွား ၊ မြင်း ၊ ဆင် ၊ ဆိတ် စသည့်အကောင်များ၏
သားသမီးများမှာမူ မနက်မွေးပြီး ညနေမှာပင် လမ်းစလျှောက်နိုင်ကြကြောင်း တွေ့ မြင်ရသော မိန်းမများက တရားမျှတမှု မရှိဟု ယူဆကြသည်။
သို့ နှင့် သိကြားမင်းထံ အရေးဆိုရန် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ကြသည် ။ တောင်းဆိုချက်မှာ မိမိ တို့ ကိုလဲ တိရိစ်ဆန်များနှင့် တစ်တန်းတည်း ထားရေး ဖြစ်သည် ။
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မာရီ အမည်ရှိ အသွက်ဆုံးအမျိုးသမီးကို သိကြားမင်းက လက်ခံ
နားထောင်သည် ။ ကျန် ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ ဝင်များက အခန်းအပြင်မှနေပြီး နားစွင့်နေကြသည် ။ မာရီ ၏ ရှင်းပြချက်ကို ကြားသောအခါ သိကြားမင်းက ပြောသည် ။
" ကိုင်း...မင်းတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်စေရမယ်..ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတော့
ရှိတယ် .မိန်းမတွေဟာ တိရိစ်ဆန်တွေ
နည်းတူ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါပဲ မေထုန်မှီဝဲ ကြရမယ် " ထိုအခါ အပြင်မှ အမျိုးသမီးများ အားလုံး သံပြိုင် အော်လိုက်ကြသည် ။
" မေရီရေ...သဘောမတူနဲ့ ဟေ့.."
" ဒီတစ်ခါ ရှင့် အလှည့် "
ဇနီးသည် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ကိုချူချာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မုဆိုးဖို ဖြစ်သွားရသည် ။ အရွယ်ရှိသေးသည့် အတိုင်း မကြာမီမှာပင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသည် ။ ဇနီးအသစ်နှင့် ဘုရားကျောင်းတွင် လက်ထပ်ပြီးနောက်
အိမ်သို့ အတူတကွ ပြန်ရောက်လာသောအခါ ကိုချူချာက ဗီရိုကို ဖွင့်ပြသည် ။ ယင်းဗီရိုထဲတွင် မိန်းမဆောင်း ဦးထုပ် တစ်လုံးကို
မြင်ရသည် ၊ ကိုချူချာက ပြောသည် ။
" မိန်းမရေ..ဒီဦးထုပ်ကို ယူမဆောင်းပါနဲ့ လို့တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ..အရင်ဇနီးနဲ့ 
ဆိုလို့ဒါပဲ၇ှိလို့ ပါ.." အချိန်အနည်းငယ် ကြာသွားသည် ။ ကိုချူချာ ၏ ဒုတိယ ဇနီး
ကွယ်လွန်သွားပြန်သည် ။ ကွယ်လွန်ပြီး မကြာမီ
နောက်မိန်းမ ယူပြန်သည် ။ တတိယဇနီးကို ခေါ်ပြီး အိမ်သို့ ရောက်လာသောအခါ ယခင်အတိုင်း ဗီရိုကို ဖွင့်ပြသည် ။
" " မိန်းမရေ..ဒီဗီရီုထဲက ဦးထုပ်နှစ်လုံးကို ယူမဆောင်းပါ
နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိရစရာ ဆိုလို့ဒါပဲ၇ှိလို့ ပါ.."
တတိယ ဇနီးက ပြန်ပြောသည် ။
" စိတ်မပူပါနဲ့ ရှင်.. ကျမ လက်ဖျားနဲ့ တောင် မတို့ ပါဘူး..ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ရှင်သိထားပါ..
ဒီဗီရိုထဲမှာ ထားမဲ့ တတိယဦးထုပ်ဟာ ယောင်္ကျားဆောင်း ဖြစ်မယ်နော်.."
" အလကား လုပပ်ါ့မလား " " အင်း...ပြောစရာတော့ ဖြစ်နေပြီ...ခင်ဗျားက အီဗန်ကို ပိုက်ဆံ ငါးသောင်း ချေးလိုက်တယ်.. ဒီကောင်က ခင်ဗျားမိန်းမကို ခိုးပြီး ပြေးသွားပါပကော..."
" ကျုပ်ကို အကြောင်းမဲ့ ပိုက်ဆံချေးတဲ့လူစားလို့ခင်ဗျားက ထင်နေလို့ လား..."
" သုံးကားပေါင်း " အိမ်ထောင်ပြုတော့မည် ဟု ပြောလာသော သမီးကို အမေက မေးသည် ။ " ရုပ်ရှင်တစ်ခါ ကြည့်ဖူးတာနဲ့အဲ့ဒီ ယောင်္ကျားနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတော့
မလွန်လွန်းဘူးလား သမီးရယ် "
" ကျမတို့ကြည့်တဲ့နေ့ က သုံးကားပေါင်း ပြတဲ့နေ့မေမေရဲ့"
" အိမ်ေဖာ် "
သမီးဖြစ်သူက အမေ့ကို ဖွင့်ပြောသည် ။
" မေမေ ဒီနေ့ ပဲ သမီးနဲ့ကိုဘမောင်တို့ရုံးတက် လက်ထပ်လိုက်ကြပြီ.." " အေး.အေး ၀မ်းသာပါတယ် သမီးရယ်....မေမေ့ကို မေ့မသွားနဲ့ နော်.. အမေအိုကြီးဆိ တစ်ခါတစ်လေလဲ အလည်လာဦး..ကြားလား..:
" အလည်လာရမယ်..ဟုတ်လား မေမေကလည်း ပြောတော့မယ်..မေမေ့ကို သမီးတို့လုံးဝ ပစ်မထားဘူး...သမီးတို့ နဲ့ လိုက်နေရမယ်..မေမေသိတဲ့အတိုင်း.. ခုခေတ်မှာ အိမ်ဖော်ရှာရတာ အင်မတန် ခက်တယ် မဟုတ်လား.."
" ရုပရ်ငှရ်ူး " ရုပ်ရှင်ကားသစ် ရိုက်ကူးရာတွင် မိမိအား သင့်တော်သည့် နေရာတွင် ထည့်သုံးပေးပါရန်
တစ်ယောက် ဒါရိုက်တာထံ အလုပ်လာလျောက်သည် ။ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာက ပြောသည် ။ " ကျနော် ရိုက်မဲ့ကားမှာ စကော့တလန်သားကိုပဲ လိုတာဗျ..' " ကျနော် စကော့တလန်သားပါ ခင်ဗျ.."
" လေးနှစ်သား ချာတိတ်လေး တစ်ယောက်ကိုလဲ လိုတယ်ဗျ " " ဟန်ကျလိုက်တာ...ကျနော့်သားက လေးနှစ်ပြည့်လို့နှစ်ရက်ပဲ စွန်းသေးတယ် " ထိုလူကို ဒါရိုက်တာ အမြင်ကပ်စ ပြုလာသည် ။ သို့ဖြင့် မည်သို့ 
ပထုတ်ရမည်နည်း ဆိသုည်ကို စဉ်းစားသည် ။
" ဒါပေမဲ့ ချာတိတ်က အမွှာပူးလေးလဲ ဖြစ်ရမယ်ဗျ.." ထိုစကားကြောင့် စကော့တလန်သား အနည်းငယ် တွေသွားသည် ။ ထို့ နောက်
ဒါရိုက်တာကို မေးသည် ။
" ဒါနဲ့ရုပ်ရှင်ကို ဘယ်တော့ စရိုက်ကြမှာလဲ ခင်ဗျာ.."
" တော်တော် ချစ်ပရုံ တယ် " ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံ ဖုန်းဆက်သည် ။ " ဟယ်လို.. ဒေါက်တာပါလား.." " ဟုတ်ပါတယ်.." ရဲ့မပြောနိုင်ဘူး "
" ကျနော့် မိန်းမ မတော်တဆ ငါးအရိုးကို မျိုချလိုက်မိလို့အခု အဲ့ဒိ အရိုးဟာ သူ့လည်ချောင်းထဲမှာ တစ်နေတယ်ခင်ဗျ.. စကားတစ်ခွန်းမှတောင် သူ " ကောင်းပြီ..ကျနော် အခုပဲ လာခဲ့မယ် "
" အလျင်စလိုကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒေါက်တာရယ်..လာမဲ့အပတ် ဒေါက်တာ လာရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်..."
" မ ထုံ ပါဘူး " သူငယ်ချင်းမ နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" မေရီရေ..အင်မတန် စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု အိုင် သိလိုက်ရတယ်ကွယ်.." " ဘာများပါလိမ့် သူငယ်ချင်းရယ် "
" သြော်...ချာလီ ဟာ အိုင့်ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကို မက်ပြီး အိုင့်ကို လက်ထပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ "
" ယူ ဘာစိတ်ဆင်းရဲနေရတာလဲ...၀မ်းတောင်သာရဦးမယ်.." " ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
" ယူပဲ ပြောပြောနေတယ် မဟုတ်လား ယူ့ ယောင်္ကျားဟာ ငထုံ..ငအကြီးဆို သူ မထုံဘူး
မအ ဘူးဆိုတာ ယူသိလကိုရပြီလေ.."
" မေးပဲ မေးရက်တယ် " အမျိုးသမီးတစ်စု လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း ၀ိုင်းဖွဲ့ စကားပြောနေကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။ " တစ်နေ့ က သတင်းစာ တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် .. ပစိဖိတ် အိုးရှင်းထဲက
လူသားစား အရိုင်းအစိုင်းတွေချည်း နေနေကြတယ်ဆိုပဲ " ထိုအခါ ထုံ သည် ၊ အ သည် အတွေးခေါင်သည်ဟု အားလုံးက
သိထားကြသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က မေးသည် ။
" ဟင် ဟုတ်လား အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ ဘာမှ မလုပ်ဘူးလား " " လုပ်ပါသော်ကော .. အခုတင် သာသနာပြု ဘုန်းကြီး ဆယ်ပါးကို လွှတ်လိုက်ပြီ.." " ဘာလဲ...ကျွန်းပေါ်က လူတွေ အငတ်ဘေးနဲ့ကြုံနေရလို လ့ား ဟင် "
" မြန်မြန် သေစေချင်တာလား အချစ်ရယ် "
အဖိုးကြီး အီဗန်နော့ သည် လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်ဖြင့် အိမ်သို့ပြန်လာသည် ။ မိန်းမဖြစ်သူက ဆီးကြို
" ရှင် ဘယ်သွားနေတာလဲ...ညစာအတွက် ပြင်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေတောင် " အေးကွာ...မြို ထဲ့သွားပြီး ပိတ်စ နှစ်ကိုက်ခွဲ သွားဝယ်တာနဲ့ နည်းနည်း
" ပိတ်စက ဘာလုပ်ဘို့ လဲ.."
" ငါ သေရင် ၀တ်ဘို့ရှပ်အင်္ကျီချုပ်မလို့နီကိုလိုင်တို့အပ်ချုပ်ဆိုင်မှာ တစ်ခါတည်း အပ်ခဲ့ပြီ.."
" တစ်ခြားဆိုင်မှာ အပ်ရောပေါ့...နီကိုလိုင် ချုပ်ရင် ရှင့် အင်္ကျီနောက်သုံးလ
လောက်ကြာမှ ရမှာ သေချာတယ်ရှင့်.."
" စားတဲ့ ထမင်း ပြန်ထကွခ်ျင်တယ် " ကပ်စေးနှဲသည်ဟု နာမည်ကြီးသော ကိုဘမောင် ၏ အိမ်သို့အိမ်နီးချင်း လင်မယား အလည်လာသည်။ ကိုဘမောင်၏ ဇနီးက ၄င်းတို့ ကို ညစာ ထမင်းကျွေးသည် ။
" စားကြနော်..အားမနာပါနဲ့ ..ဒါက ပုစွန်ချဉ် လက်သုပ်..ဒါက ၀က်သားဆီပြန် ..ဒါက ကင်ပွန်းရွက် ဟင်းချို
ဒါက ချဉ်ပေါင်ကြော်..ယူပါ..ထည့်ပါ..အားရပါးရ စားကြပါရှင်..." ထိုအခါ..ကိုဘမောင် နေရာမှ ၀ုန်းခနဲ ထပြီး ဇနီးကို အော်ငေါက်သည် ။
ကိုဘမောင်၏ စကားကြောင့် ဧည့်သည်
များ ထမင်းနင်သလို ဖြစ်သွားကြသည် ။
" ဟေ့..ဘာဖြစ်လို့ တစ်ချိန်လုံး ယူပါ ထည်ပ့ါ စားကြပါနဲ့ပြောနေရတာလဲ..သူတို့မြင်ကြပါတယ်ကွ
" ပေါတော့ လံတုာပေါ့ "
စာဖတ်သူ တစ်ဦးက အယ်ဒီတာချုပ်ကို မကျေမနပ် ပြောသည် ။
" အခုခေတ် ဂျာနယ်တွေ .စာစောင်တွေမှာ ၀တ်လစ်စလစ် နဲ့မပေါ့်တပေါ်
အမျိုးသမီး ပုံတွေနဲ့ 
ပြည့်နေတာပဲ ကျုပ်တို့ခေတ်ကများ..ဒါမျိုး မြင်ချင်လို့ တောင် မမြင်ရဘူး..." " ဟုတ်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ဦးတို့ ခေတ်က အ၀တ်အစားဈေးနှုံးဟာ အခု ခေတ်ထက် အများကြီး ပေါပါတယ် "
" အတူတူ စားခွင့် " မိန်းမဖြစ်သူ ယောင်္ကျားကို မြည်တွန်တောက်တီးနေသည် ။ " ဘာဖြစ်လို့မနက် ၄ နာရီကျမှ အိမ်ပြန်လာရတာလဲ.."
" ဘာလဲ..မိသားစုနဲ့ အတူ မနက်စာ စားခွင့် ငါ့မှာ မရှိဘူးလား.."
" သံုး ယောက်နဲ့တစ်ယောက် " မြို့ ပေါ်မှ ဆရာဝန်ကြီး သုံးယောက်၏ ကုသမှုကို ခံယူပြီး
ကွယ်လွန်သွားသော မိန်းမ၏ ယောင်္ကျား (မုဆိုးဖို )က ပြောသည် ။
" သုံးယောက် နဲ့တစ်ယောက်ဆိုတော့ သူ့ ခမျာ ဘယ်ခံနိုင်မလဲလေ"
" အပြောင်းအလဲ " " ယောင်္ကျားသေပြီး နောက်တစ်ရက်အတွင်း တစ်ခေါင်းလုံး ဆံပင်ဖြူသွားတဲ့အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို တွေ့ ဖူးတယ်.."
" ဒါ ဘာဟုတ်သေးလဲ ..ကျနော်တွေ့ ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆို
ယောင်္ကျားသေပြီး နောက်တစ်နေ့ 
မှာတင် တစ်ခေါင်းလုံး ဖြူနေရာက ရွှေရောင်ဆပံင်နဲ့ချစ်စရာလေး ဖြစ်သွားတယ်ဗျ "
" လျှောက် လွှာ "
" ကျနော့်အား ဇနီး ဖြစ်သူ မေရီ နှင့် ကွာရှင်းခွင့် မပြုပါရန် လေးစားစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ။ အကြောင်းမှာ ကျနော်တို့အတူတူ နေခဲ့ကြသော သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်
သူမ အမြဲတမ်း မျှော်လင့် စောင့်စားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။
အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို "
စကားပြောလျှင် မဆင်မခြင် ပြောတတ်သော အန်တီ မြ တစ်ယောက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ တစ်ခု သို့ ရောက်လာသည် ။
ဧည့်ခံ ခန်းမကြီး တစ်ခုလုံး ပရိတ်သတ်များဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသည် ။ မိမိဘေးက ခုံတွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးကို အန်တီ မြက မေးသည် ။
" ဟို..တံခါးအနားက စာပွဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ အရုပ်ဆိုးဆိုး မိန်းမကြီးက ဘယ်သူလဲ ဟင် " " ကျမ အစ်မ ပါ "
အားနာဟန်ဖြင့် အန်တီ မြ ရုတ်တရက် အမ်းတမ်းတမ်း ဖြစ်သွားသည် ။ ထို့ နောက်
တောင်းပန် စကား ပြောသည် ။
" တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်..ကျမ ကိုယ်က ညံ့ပါတယ်..ရှင်တို့ နှစ်ယောက် ရုပ်ချင်း
အင်မတန် ဆင်တယ်ဆိုတာ ကျမ
သတိထားမိဖို့ကောင်းပါတယ်..ဟင်း ဟင်း "
" မပြောမိရင် ကောင်းမယ် " ချူကော့ကာပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိနေသော ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးအဖွဲ့ မှ ရုရှားတစ်ယောက် ကိုချူချာဆီ
ခဏခဏ အလည်လာသည် ။ လာတိုင်းလည်း ဒေါ့ဒ်ကာ အရက်ပုလင်းကို ယူလာသည် ။ အရက်ကို
တစ်နေ့၎င်း၏ မိန်းမကို ပြောသည် ။ " ဟေ့. ဒီနေ့အီဗန်ကြီးလာရင် ငါ အပြင်သွားတယ်လို့ ပြောလိုက်...သူ တိုက်တဲ့
အရက်ကို ငါ မသောက်
ချင်တော့ဘူး..ဒါပေမဲ့ ..ငါ ဘယ်ကိုမှ မသွားဘူး..ကန့် လန့် ကာနောက်မှာ
ပုန်းနေမယ်..." ကိုချူချာ ၏ ဇနီးကို
အီဗန် ရောက်လာသည် ။ ကိုချူချာ မရှိဟု ဆိုသဖြင့် အရက်ပုလင်းကို ထုတ်ကာ
တိုက်သည် ။ ရေချိန် နည်းနည်းကိုက်လာသောအခါ ကိုချူချာ ၏ ဇနီးကို ရုရှား အီဗန် ဖက်ရမ်း နမ်းရှုတ်သည် ။ ကန့် လန့် ကာ
နောက်ကွယ်မှ အားလုံးကို မြင်နေရသော ကိုချူချာက မိမိကိုယ် မိမိ ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ပြောသည် ။
" ဒီကောင့် မျက်ခွက်ကို လက်သီးနဲ့ ပိတ်ထိုးဖို့အချိန်တန်ပြီ...ဒါပေမဲ့ ငါ အိမ်မှာ
" ကြင်နာမှု " ကိုဘမောင်သည် ၄င်း၏ ဇနီးကို လက်ကဆွဲလျှက် သွားအထူးကု ဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းထဲသို့ ဝင်လာသည် ။
ကိုဘမောင်က မေးသည် ။
" ဒေါက်တာ..သွားတစ်ချောင်း နှုတ်ခ ဘယ်လောက် ကျပါသလဲ ခင်ဗျ " " ထုံဆေး ထိုးပြီး နှုတ်ရင် ၂၅၀၀ ။ ထုံဆေး မပါပဲဆို ၁၅၀၀ ပါ " " ထုံဆေး မပါပဲ နှုတ်ပေးပါ.."
" ခင်ဗျား တော်တော် သတ်တိ ကောင်းပါလား.." ဆရာဝန်က ချီးကျူးစကား ပြောသည် ။
ကိုဘမောင် ဇနီးသည်ဘက် လှည့်ပြောလိုက်သည် ။ " မိန်းမရေ...မင်းကို ငါ အပြင်ဘက်မှာ စောင့်နေမယ် နော်.."
အကျင့် ရြှိ ပီးသား "
သူဌေးကတော်က အိမ်ဖော်မ အသစ်ကို ပြောသည် ။ "
ညည်းကို ငါ ကြိုပြောထားချင်တယ်...ဒီအိမ်က အကြီးကြီး ..ပြီးတော့
အဲ့ဒီတော့ ညည်းအတွက် အားချိန် နားချိန် ဆိုတာ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး.."
" စိတ်မပူပါနဲ့ဒေါ်ဒေါ်...ကျမ တောမှာ နေတုန်းက ၀က်အကောင် နှစ်ဆယ်ကို
နေ့ စဉ် အစာကျွေးရတယ်
၀က်ခြံကိုလည်း နေ့ စဉ် သန့် ရှင်းရေး လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင့် "
" ကံ အဆိုး ဆုံးနေ့" အရက်ဘားတွင် ဖြစ်သည် ။ အရက်ခွက်ကို ရှေ့ မှာ ချပြီး လူတစ်ယောက် ညှိုးငယ်စွာ ထိုင်နေသည် ။
ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဗလ ကောင်းကောင်း လူတစ်ယောက် ၀င်လာပြီး ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် စောစောက လူရှေ့ ရှိ
အရက်ခွက်ကို ဆွဲယူကာ သောက်ချလိုက်သည် ။ ထိုင်နေသူမှာ မျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုသည် ။
ဗလကြီး အံ့သြသွားသည် ။ ထိုသူကို သနားစိတ် ၀င်သွားသည် ။ သို့ နှင့် နှစ်သိမ့်စကား ပြောသည် ။ " ဟေ့လူ ဒီလောက်တောင် ၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့ ..ကျနော် ကျီစားတာပါ..ခင်ဗျား
တစ်ခွက်ဘိုး ကျနော် ပေးပါမယ် "
ထိုသူ မျက်ရည်သုတ်ပြီး ပြန်ပြောသည် ။
" ဒါကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး.. ကျနော့်အဖြစ်ကို ခင်ဗျား မသိလို့ ပါ .. ဒီနေ့ ဟာ ကျနော့်အတွက် ကံအဆိုးဆုံးနေ့ ပါ.
မနက်က အိပ်ရာထ နောက်ကျသွားတယ်..အလုပ်နောက်ကျလို့ ဆြို ပီး
အလုပ်ရှင်က အလုပ်က ထုတ်လိုက်တယ်
အလုပ်က အပြင်ကို ထွက်လိုက်တော့ ကျနော့် စက်ဘီး မရှိတော့ဘူး.....ဒါနဲ့အိမ်ကို
ခြေလျင် ပြန်လာရတယ်. အိမ်
ရောက်တော့ မိန်းမကို လင်ငယ်နဲ့ တွေ တ့ယ် ...မိန်းမက ရှင့်ကို
မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး အိမ်ပေါ်က မောင်းချတယ်
ကျနော့် ဘ၀ဟာ အလကားပဲ.. အရက်ဆိုင်ကိုလာပြီး အရက်နဲ့ဖြေဖျောက်ဘို့ 
မှာလိုက်တယ်...အဲ့ဒီမှာတင် အတွေးပေါ်လာတယ်.. ဒီလောက် ကံဆိုးနေမှတော့
လူ့ ပြည်မှာ ဘာလုပ်ဖို့ဆက်နေ
တော့မှာလဲ ဆိုတဲ့ အတွေး.......ဒါနဲ့အရက်ခွက်ထဲကို
မသေရပါလားနော်...ကျနော့်ကိုက ကံဆိုးပါတယ်ဗျာ.." " ဟိုက်..."
" မေ့တတ်တဲ့ အရွယ် " " ဒေါက်တာ...ကျနော့်အသက် ၈၀ ရှိပြီ...ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ ကောင်မလေး ချောချောလှလှလေးတွေ
တွေ့ ရင် သူတို့ နောက်ကို လိုက်မိနေတုန်းပဲ...."
" ဟာ...ဒါ..ကောင်းတာပေါ့ အန်ကယ်ရဲ့"
" ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်....ဒါပေမဲ့..ဘာအတွက် ကျနော် လိုက်သလဲဆိုတာ..ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့မရဘူး..."
" အဖေ့ သား " လူကြီးတိုင်းတွင်..လျှို့ ဝှက်ချက် တစ်စုံတစ်ခု ရှိစမြဲ ဆိုသော စကားကို ပီတာလေး ကြားလိုက်ရသည် ။ သို့ နှင့် ကျောင်းမှ ပြန်လာလာချင်း အမေဖြစ်သူကို ပြောသည် ။ " မေမေ..ကျနော် အကုန်လုံး သိတယ်..."
အမေက စိုးရိမ်သော အမူအရာဖြင့် ပီတာလေးကို ပြန်ပြောသည် ။
" ရော့ သား...ပိုက်ဆံ ငါးဆယ် ယူသွား...ဒါပေမဲ့..ဖေဖေ့ကို လုံဝ မပြောနဲ့ နော်..." ပီတာလေး..အဖေ့ဆီ သွားသည် ။
" ဖေဖေ...ကျနော် အကုန် သိတယ်..." " တိုးတိုးပြောပါကွ..ရော့..တစ်ရာ ယူသွား မင်းအမေကို ဘာမှ မပြောနဲ့ နော်.."
ပီတာလေး အိပ်ထဲ ပိုက်ဆံ ထည့်ပြီး လေတစ်ချွန်ချွန်နှင့် လမ်းလျှောက်သည် ။
လာနေသော စာပို့ သမားကို တွေ့ ရသည် ။ ပီတာလေး ခပ်တည်တည်နှင့် ပြောလိုက်သည် ။ " ဦးလေး...ကျနော် အကုန်သိတယ်ဗျ.."
စာပို့ သမား ပီတာလေးကို အတန်ကြာ စိုက်ကြည့်သည် ။ မျက်ရည်တွေ
ကျလာသည် ။ ထို့ နောက်
ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ကာ ပီတာလေးကို ပြောသည် ။
" အောင်မယ်လေး သားရယ်...ဖေဖေ့ကို လာဖက်စမ်းပါလားကွယ်..."
" အကြောင်းရင်း " လေ့လာရေးခရီးအဖြစ် ဆရာမသည် အတန်းသူ အတန်းသားများကို ဆောက်လုပ်ရေး
ခေါ်သွားသည် ။ ၄င်းတို့ ရောက်ရှိနေစဉ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား တစ်ဦးသည် ထောင်ထားသော လှေကားပေါ်မှ ကျကာ
ပွဲချင်းပြီး သေသွားသည် ။
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်လာကြသည် ။ မြင်ခဲ့ရသော
စိတ်မကောင်းစရာ နှင့် ပတ်
သက်ပြီး ဆရာမ စကား စသည် ။ " နာတာရှာ..လုပ်သားကြီး ဘာဖြစ်လို့ လိမ့်ကျတယ် ထင်သလဲကွယ်..." " လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာလို့ထင်ပါတယ်.." " နီကိုလိုင်...မင်းကကော ဘယ်လို ထင်သလဲကွဲ့"
" အဲ့ဒီ ဦးဦး အရက်သောက်ထားတယ် ထင်ပါတယ်.. " ပီတာလေး နေရာမှ ထပြီး ပြောသည် ။
" မဟုတ်ဘူး...ကျနော့် အမေကို သူ ဆဲလို့လိမ့်ကျတာ.." " ဟဲ့..မင်း ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ပြောတာတုန်း "
" ကျနော် ကိုယ်တိုင် ကြားလိုက်တယ် ဟေ့ ချာတိတ.် .မင်းအမေ -ိုး လှေကားကို မလှုပ်ပါနဲ လို့ 
ဘယ်နစှခ်ါ ပြောရမလဲကွ ဟေ တဲ့ "
" ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု " အီဗန်နော့ နေ့ လယ်စာ စားရန် ပြင်သည် ။ ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသော မိန်းမသည် တစ်ကိုယ်လုံး
အနက်ရောင် အ၀တ်အစား ၀တ်ထားသည်ကို တွေ့ ရာ မေးလိုက်သည် ။
" ဟေ့....ဘာဖြစ်လို့တစ်ကိုယ်လုံး အမည်းရောင် ၀တ်ထားရတာလဲ ကွ.." " ဒီနေ့ရှင့်အတွက် မှိုဟင်း ချက်ထားလို့ ပါ "
" ချစ်ဇနီး " နီကိုလိုင် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ကိုချူချာ၏ အိမ်သို့အလည်သွားသည် ။ အိမ်ရှင်များက ညစာကျွေးသည် ။ ထမင်းပွဲ လာပြင်ပေးသော အရုပ်ဆိုးလှသည့် အမျိုးသမီးကို ကြည့်ုပြီး နီကိုလိုင် မအောင့်နိုင်ဘဲ မေးသည် ။
" အချက်အပြုတ် အင်မတန် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ခင်ဗျား ခဏခဏ ချီးကျူးနေတဲ့
အမျိုးသမီးဟာ သူလား "
" မေးပဲ မေးရက်တယ်..ကျနော့်ကို ငထုံ ငအ လို့ခင်ဗျား ထင်နေလား...ဒီလောက်
ကျုပ်က အ်ိမ်ဖော် အဖြစ် ထားမှာတဲ့လား...ဒါ ကျုပ်မိန်းမ ဗျ.."
အားလုံးကို အထင်သေးတယ် "
ကိုချူချာ၏ဇနီး ပိုက်ဆံထုပ် ပိုက်ပြီး မော်စကိုသို့တက်လာသည် ။ အကောင်းစား ဟော်တယ်တွင် အခန်းတစ်ခု ယူပြီး
မြို လ့ယ်ခေါင်တွင် ဖွင့်ထားသည့် လောင်းကစားရုံ ( ကာစီနို ) သို့ သွားသည် ။ ရူးလက် ( roulette ) ကစားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ပါလာသမျှ ပိုက်ဆံအားလုံးကို ကူပွန်အကြွေပြားများ ၀ယ်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက်
၂၂ ဂဏန်းတွင် ပုံအောပြီး ထိုး
လိုက်သည် ။ ဒိုင်လုပ်သူက မေးသည် ။ " အမကြီး ရူးလက် ကစားတာ ဒါ ပထမဆုံး အကြိမ်ထင်တယ်.." " ဟုတ်ပါတယ် "
" အဲ့ဒါဆို ကျနော် စေတနာနဲ့အကြံပေး ပါရစေ..၊ ကူပွန်တွေ အားလုံးကို ၂၂
တစ်ခုတည်းမှာ ပုံအောပြီး မထိုးစေချင်ဘူး
မ ဂဏန်း ၊ စုံ ဂဏန်း ၊ အနီရောင်..အမည်းရောင် တွေမှာ မျှပြီး ထိုးပါ..ဒါမှ ပေါက်ဖို့ 
အခွင့်အလမ်း ပိုများပါလိမ့်မယ် "
" ဟင့်အင်း..ကျမ ၂၂ မှာပဲ ထိုးချင်တယ်ရှင့် " ဒိုင်လုပ်သူ ခုံဝိုင်းကို လှည့်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် ဂေါ်လီလုံးကို ခုံဝိုင်းထဲ
ပစ်လိုက်သည် ။ အလည် ရပ်သည့်အချိန်
ကြည့်လိုက်သောအခါ ဂေါ်လီလုံးသည် နံပါတ် ၂၂ တွင် ရောက်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
အမျိုးသမီးသည် လျှော်ငွေ အားလုံးကို မိမိဘက် ဆွဲယူလိုက်ပြီး နံပါတ် ၂၂ မှာပင်
ထပ်အော ပြန်သည် ။ ဒိုင်လုပ်သူက ပြောသည် ။
" အမကြီး စောစောက အမကြီး အင်မတန် ကံကောင်းလို့ပေါက်တာပါ..ဒီတစ်ခါ ပေါက်ဖို့ 
ဂဏန်း တစ်ခုတည်းပေါ်မှာ နှစ်ခါ ကျလေ့ မရှိပါဘူး.."
" လှည့်ပါ...ကျမ ၂၂ ကိုပဲ ထိုးချင်တယ်.."
ခုံဝိုင်းကို ထပ်လှည့်သည် ။ ဂေါ်လီလုံးမှာ ၂၂ မှာ ထပ်ကျပြန်သည် ။ ထိုအတိုင်း
အမျိုးသမီးသည် တစ်ညနေလုံး ၂၂ မှာပဲ
ဆက်ထိုးသည် ။ အကြိမ်တိုင်းလည်း ၂၂ မှာချည်းပဲ ကျသည် ။ ကာစီနို ပိုင်ရှင်နှင့် ဧည့်သည်များ ၀ိုင်းအုံလာသည် ။ တစ်နေ့ တည်းနှင့် တစ်နှစ်
စာ အရှုံးပေါ် သွားသော ကာစီနို ပိုင်ရှင်က မေးသည် ။
" ဘယ်လို အခြေခံမူတွေကို အသုံပြုပြီး ထိုးသလဲဆိုတာ သိပါရစေလား ခင်ဗျာ " " ဘာမူမှ မရှိဘူး ။ ကျမက အတိတ် နိမိတ်တွေကို ယုံတယ် ..မော်စကို ကို ကျမ ၇
ရက်နေ့ မှာ ရောက်တယ် ..ကျမ ရတဲ့ ရပ်ပေးတယ်.. "
ဟော်တယ် အခန်းက နံပါတ် ၇ ၊ ကာစီနိုကို လာဖို့ကားငှားတာ ၇ စီးမြောက်မှ ပရိတ်သတ်များ ပြိုင်တူ မေးလိုက်ကြသည် ။
အမျိုးသမီးသည် အားလုံးကို အထင်သေးသည့် မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်လိုက်ပြီး ပြောသည် ။
": ခုနှစ် သုံးလီ ၂၂ မဟုတ်ဘူးလား ရှင့် .ကဲ "
" ဆင်းရဲ ချမ်းသာ "
အသက် အရွယ် ကြီးရင့်ပြီဖြစ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးသည် ငယ်ရွယ်သော မိန်းခလေးတစ်ဦးကို လက်ထပ်ယူလိုက်သည် ။ တစ်နေ့ တွင် အဘ်ိုးကြီးက မေးသည် ။
" မင်း..မှန်မှန် ပြောစမ်း...ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ငါ့ကို မင်း ယူလိုကတ်ာလား..." " မဟုတ်ရပါဘူးရှင်...ကျမ အင်မတန် ဆင်းရဲလို့ ပါ "
" ကျေးဇူးတင်လကို တ်ာ " သူဌေးကတော်တွင် သားမက် သုံးယောက်ရှိသည် ။
မိမိအပေါ် သားမက်တွေ ဘယ်လို
စမ်းသပ်ရန် သူဌေးကတော် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ တစ်နေ့ တွင် သားမက်အကြီးဆုံး ဖြတ်သွားချိန်နှင့် ကိုက်လျှက် တံတားပေါ် မှ မြစ်ထဲ
သို့ ခုန်ချလိုကသ်ည် ။ " ကယ်ကြပါဦး ..ကယ်ကြပါဦး " ဟု အသံကုန်အော်သည် ။ ချက်ချင်းဆိုသလို သားမက်ကြီး ရေထဲ ခုန်ဆင်းပြီး
ယောက်ခမ ကို ကယ်သည် ။ နောက်တစ်နေ့ မနက်တွင် အိပ်ရာက နိုးသည့်အချိန် ပြတင်းပေါက်က ကြည့်လိုက်သော အခါ အိမ်အောက်
တွင် မော်စကိုဗစ်ခ်ျ ကားတစ်စီး ရပ်ထားသည်ကို သားမက်ဖြစ်သူ တွေ့ လကိုရသည် ။ ကားရှေ့ မှန်ပေါ်တွင် စာတိုလေး တစ်စောင်ကို
လည်း တွေ့ ရသည် ။ " အချစ်ဆုံး သားမက်အတွက် ..ကျေးဇူးတင်ပါသော ယောက်ခမ ( အမေ )၏ လက်ဆောင် " ဟု ရေးထားသည်။
နောက်တစ်ရက်တွင်..ယခင်နည်းအတိုင်း သားမက်အလတ်ကို စမ်းသပ်ပြန်သည် ။
ဆင်းပြီး ယောက်ခမ ကို ကယ်သည် ။ နောက်နေ့ မနက်တွင် သားမက်အလတ်နေသည့် အိမ်အောက်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် တစ်စီး
နှင့် စာတိုတစ်စောင်ကို တွေ့ သည် ။ " ချစ်ရသော သားမက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသော ယောက်ခမ ( အမေ ) ၏ လက်ဆောင် " ဟု ရေးထားသည် ။
အငယ်ဆုံး သားမက်ပဲ ကျန်တော့သည် ။ သူ့ ကိုလည်း ယခင်နည်းအတိုင်း စမ်းသပ်ရန်
သားမက်ဖြစ်သူ ဖြတ်သွားချိန်တွင် မြစ်ထဲ ခုန်ချသည် ။ " ကယ်ကြပါဦး...ကယ်ကြပါဦး " ဟု အော်သည် ။ ယောက်ခမ ၏ အော်သံ ကြား သောအခါ သားမက် ဖြစ်သူ စဉ်းစားသည် ။
" အကြီးဆုံးသားမက်ကို မော်စကိုဗစ်ခ်ျနဲ့ကျေးဇူးဆပ်တယ် ..သားမက်အလတ်ကို
ငါ့ ကို စက်ဘီးပဲ ပေးလိမ့်မယ်...ဒီစက်ဘီးအတွက်နဲ့ဆောင်းတွင်းကြီး ရေခဲရေ ထဲကို
အငယ်ဆုံးသားမက် ဆင်းမကယ်ချေ...၊ ယောက်ခမလည်း ရေနစ် သေသွားသည် ။ နောက်တနေ့မနက် အိပ်ရာက နိုးလို့ကြည့်လိုက်သောအခါ အိမ်ရှေ့ တွင် မာစီဒီး
၆၀၀ အသစ်တစ်စီး ရပ်ထားသည်ကို
တွေ့ လိုက်ရသည် ။ ကားပေါ်မှ စာတိုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် ။
" ချစ်စွာသော သားမက်အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိသော ယောက်ခမ (အဖေ ) ၏
" စဉ်း စား စ ရာ " အသုဘ အခမ်းအနားတွင် ဖြစ်သည် ။ အခေါင်း ၏ အပေါ်တွင် ပလပ်စတစ် သွားအုံ တစ်ခုကို တင်ထားသည် ။ လိုက်ပို့ 
သူများ စကားမပြောကြ ။ သွားလေသူ
အကြောင်း စဉ်းစားရင်း လိုက်ပါလာကြသည် ။ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်သည် ။
ရုတ်တရက် လိုက်ပို့ သူတွေထဲမှတစ်ယောက်က
မနား ရယ်သည် ။ တစ်ယောက်က မေးသည် ။
" ဟေ့လူ..အသုဘ အခမ်းအနားမှာ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင် ရယ်နေရတာလဲ..."
" သေတဲ့သူက သွားဆရာဝန်လေဗျာ..အဲ့ဒီတော့ အခေါင်းပေါ်မှာ သွားအုံ တစ်ခု ကျနော်က သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်လေ..ကျနော် သေရင် အခေါင်းပေါ် ဘာတင်မလဲ
" ဆေး စာ နဲ့ပါ လား " အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆေးဆိုင်သို့ရောက်လာပြီး ပိုတက်စီယမ် ဆိုင်ရာနိုက် ( အဆိပ် ) ရောင်းပါရန်
အရောင်းစာရေးကို ပြောရာ အရောင်းစာရေးက အံ့သြသံဖြင့် ပြန်မေးသည် ။ " အဆိပ်ကို ခင်ဗျား ဘာလုပ်ဖို့ လဲ "
" ကျမယောင်္ကျားကို အဆိပ်ခပ်သတ်မလို့ဒင်း တစ်ခြားမိန်းမနဲ့ 
ဖောက်ပြန်နေတယ် ရှင့် "
" ၀မ်းနည်းပါတယ်..ခင်ဗျားယောင်္ကျား ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆိပ်ကို ဒီအတိုင်း ရောင်းလို့ 
ထိုအခါ အမျိုးသမီးသည်ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ဖောက်ပြန်နေသည့် မိန်းမ ၏
ဓါတ်ပုံကို အိပ်ထောင်ထဲက ထုတ်
လိုက်ပြီး ဆေးရောင်းသူကို ပြသည် ။ ဓါတ်ပုံရှင်သည် မိမိ၏ ဇနီး ဖြစ်နေကြောင်း အရောင်းစာရေး ထိတ်လန့် တကြား မြင်လိုက်ရသည်။
အဆိပ်ကို အမျိုးသမီး လက်ထဲ ကမ်းပေးရင်း အရောင်းစာရေး ပြောသည် ။ " ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ...ခင်ဗျားဆီမှာ ဆေးစာ ပါတယ်ဆိုတာ မသိလို့ ပါ..."
" အစမို့မှားတာပါ " အလုပ်ဝင်တာ မကြာသေးသော လူငယ်ဆရာဝန်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးဖွားရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်
အဖြစ် အစအဆုံး တာဝန်ယူရသည် ။ အားလုံးပြီးစီးသော အခါ မိမိ ၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက် ပေးပါရန်
ဆရာဝန်ကြီးအား ပြောရာ ၄င်းက ပြုံးပြီး ပြောသည် ။ " ပထမဆုံး အကြိမ်အနေနဲ့မဆိုးပါဘူး...ဒါပေမဲ့ နောက်ကျရင်မှတ်ထား...
ကလေးရဲ့တင်ပါးကို ပုတ်ပေးရတယ်....အမေ့ တင်ပါးကို မဟုတ်ဘူး...."
" တူ ညီ သော လို အင် " လူပျိုပေါက်သားက မိဘများကို ရန်လုပ်နေသည် ။
" တော်ပြီ..အဖေ အမေ တို့ နဲ့နေနေရတာ ကျနော် ငြီးငွေ့ လာပြီ..၊ အမြဲတမ်း
အိမ်ပြန်ရောက်ရတယ်.. ဘယ်မှလည်း မလည်ရဘူး ။ ကျနော်
စွန့် စားချင်တယ်..ဘီယာသောက်ပြီး မိန်းမချောတွေနောက် လိုက်ချင်တယ်..
တော်ပြီ ကျနော် မနေ
တော့ဘူး.... သွားတော့မယ်...ကျနော့်ကို မတားပါနဲ့ .."
ထိုသို့ ပြောပြီး တံခါးဘက် လျှောက်သည် ။ အဖေဖြစ်သူ နောက်က
ပြေးလိုက်လာသည် ။ သားက
အဖေ့ကို ခက်ထန်စွာ ပြောသည် ။ လမ်းဖယ်ပေးပါ.."
" ကျနော့်ကို မတားနဲ့ လို့ ပြောတာ အဖေ မကြားဘူးလား ကျနော့်ကို " အထင်မလွဲပါနဲ့ သားရယ်...အဖေလဲ မင်းနဲ့ အတူ လိုက်မလို့ ပါ
" အရင်းမစိကုပ်ဲ အမြတ်ထတြု ခင်း " ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ နယူးယောက်သို့ရောက်လာသည် ။ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုသို့သွားပြီး ဆိုင်မန်နေဂျာကို မေးသည် ။
" ဒီဆိုင်မှာ ဆာရာ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်..သူမကို
ဘယ်မှာ တွေ့ နိုင်မလဲ ခင်ဗျာ.."
မန်နေဂျာက ဘားကောင်တာဘေး ရပ်နေသော အမျိုးသမီးကို ညွှန်ပြလိုက်သည် ။
ကောင်မလေးအနားသို့ရာဘင်
နိုဗစ်ခ်ျ ကပ်လာပြီး ပြောသည် ။ " ခင်ဗျားဟာ အင်မတန် ချောတဲ့မိန်းခလေးပါလား...ကျနော်နဲ့ အတူ လိက်ုအိပ်ပါလား
ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးမယ်လေ
ကောင်မလေး သဘောတူလိုက်သည် ။ နောက်တစ်နေ့ တွင် ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ထပ်ရောက်လာပြီး မနေ့ က အတိုင်း
ကမ်းလှမ်းသည် ။ ကောင်မလေး သဘောတူပြန်သည် ။ တတိယနေ့ တွင်လည်း ယခင်ရက်များအတိုင်း ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ကမ်းလှမ်းပြန်သည် ။
မငြင်း..။ ဟော်တယ်ခန်းတွင် ကောင်မလေး ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျကို မေးသည် ။
" အစ်ကိုကြီးက ပိုက်ဆံ သိပ်ပေါတယ်နော်..ဘယ်က လာတာလဲဟင်.." " မော်စကို က "
" ဟင်....ဟုတ်လား.၊ ကျမရဲ့ဒေါ်လေး အဲ့ဒီမှာ နေတာ ရှင့် " " အေး...မင်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပေး ပေးပါလို့သူပဲ လူကြုံပါးလိုက်တာလေ..."
" မြန်မြန်ခနုပ်ါ " မိမိ ကိုယ် မိမိ သတ်သေရန် ဆုံးဖြတ်ထားပုံရသည့် လူတစ်ယောက် မိုးပျံတိုက်၏
ခုန်ချရန်ပြင်နေသည် ။ အောက်မှ လူအုပ်သည် အပေါ်သို့စိုးရိမ်စွာ မော့ကြည့်နေကြသည် ။ မိန်းမတစ်ယောက်က ဘေးကလူကို ပြောသည် ။
" ဘုရား..ဘုရား...နောက် ငါးမိနစ်အတွင်သာ သူ မခုန်ချရင်တော့ ကျမ
" သံ သ ယ " မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက် ဆြုံ ကသည် ။ တစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကို မေးသည် ။ " ဘယ့်နှယ့်လဲ....ခင်ဗျား မိန်းမ နေကောင်းရဲ့ လား " အမေးခံရသူက နာကြည်းသံဖြင် ပြန်ဖြေသည် ။
" ကောင်းလွန်းလို့ခက်နေတယ်...အိမ်မှာနေပြီး တစ်ချိန်လုံး ကိတ်
အလုပ်က ပြန်လာလည်း မုန့် ဖုတ်တယ်..မနက် အလုပ်သွားလည်း ဖုတတ်ယ်.." " ဟာ..အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လဲ...မင်းကလည်း မရှိတဲ့ ပြသနာကို ရှာမနေစမ်းပါနဲ့" ဟေ
" ဒီလောက်ဖုတ်နေတဲ့မုန့် ကို တစ်ယောက်ယောက်တော့ စားမှာပဲ မဟုတလ်ားကွ အေး ငါကိယ်ုတိုင်တော့ အခုအချိန်ထိ မမြည်းဖူးသေးဘူး.."
" ရော ဂါ ရင့် နေ ပြီ " အပျိုကြီးမမ တစ်ယောက် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကု ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသည် ။ အမျိုးသမီးတွင် စွဲကပ် နေသော ရောဂါ ၏ သဘောသဘာဝကို သိလိုသဖြင့် ဆရာဝန်က မေးသည် ။ " ကုတင်ကို မြင်တဲ့အခါ ခင်ဗျား ဘာကို တွေးမိသလဲ " " ယောင်္ကျားကို တွေးမိပါတယ်.." " ကုလားထိုင်ကို မြင်ရင်ရော..."
" ယောင်္ကျားကို ပါပဲ "
" စားပွဲကို မြင်တဲ့ အခါမှာရော..." " ယောင်္ကျားရဲ့ရုပ်ပဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတယ်.." " ပိုက်ဆံကို တွေ့ တဲ့ အခါရော.."
" ယောင်္ကျားကိုပဲ စဉ်းစားမိပါတယ် " " ယောင်္ကျားကို မြင်ရင်ရောဗျာ "
" ဘာအကြောင်းကိုမှ မစဉ်းစားတော့ဘူး..."
" လက် အိပ် ပဲ ရ လာ တယ် " လူငယ်နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။ တစ်ယောက်က တိုင်ပင်သည့် သဘောဖြင့် မိမိ၏ အခက်အခဲကိုပြောပြသည် ။
" ဆေးဆိုင်မှာ ကွန်ဒုန်း ရှိသလားလို့သွားမေးရမှာ ငါ ရှက်တယ်ကွာ.." " ရှက်ရင် ငါ့နည်းကိုသုံး...ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး သားရေလက်အပိရ်သှိ လား လို့ မေး
လို့အရောင်းစာရေးမ
မရှဘိူး
ကဖြေရင် အဲ့ဒါဆို လက်ချောင်းလေးတွေကို စွပဖ်ို့ကွနဒ်နုး ဆယ်ခု ပေး လို့ သာ
ပြောလိုက်...သဘောပေါက်ပြီလား.." " ပေါက်ပြီ..."
" အဲ့ဒါဆို သွားစမ်းကြည့် " မိနစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် မျက်နှာပျက်ပျက်နှင့် လူငယ် ပြန်ရောက်လာသည် ။
" မင်း ရယ်ချင်ရယ်မယ်..သူတို့ ဆီမှာ လက်အိပ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကွာ.."
" စောင့် နေ ကြ မှာ စိုး လို့" ကိုဘမောင်ထံ မိတ်ဆွေတွေ အလည်ရောက်လာကြသည် ။ ကိုဘမောင် တံခါး ထဖွင့် ပေးသည် ။
ပွင့်သွားသော တံခါးမှ၎င်းမွေးထားသော ကြောင် လှစ်ခနဲ ထွက်ပြေးသည် ။ အိမ်မျက်နှာကြက်ကို ပြေးတက်သည် ။
ထို့ နောက် အိမ်အောက်သို့ခုန်ဆင်းသည် ။ ယင်းမှတစ်ဖန် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ဖျတ်လတ်သွက်လက်စွာ ပြေးတက်ပြန်
သည် ။ အပေါ် ရောက်တော့လည်း ကြာကြာ မနေ ။ ဧည့်ခန်းကို ဖြတ်ကာ ခြံထဲရှိ အမှိုက်ပုံဘက် ခုန်ပေါက်ထွက်သွားသည်။
ဒါတွေ အားလုံး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်နေရာ ဧည့်သည်များ အငေးသား ကြည့်နေကြရသည် ။ ဘာကိုမှလည်း နားမလည်ကြ ။
ကိုဘမောင်က ၀မ်းနည်းသံဖြင့် ရှင်းပြသည် ။
" ကျနော် ဒီကောင့်ကို ဒီနေ့သင်း လိုက်တာဗျ.." " အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ.."
" အချိန်းအချက် လုပ်ထားတာတွေ ဒီကောင် လိုက်ဖျက်နေရတာပေါ့.." " မောင့်ကို သေစေညွှန်းရော့သလား " ဆရာဝန် ၏ ဆေးခန်းသို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသော ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက်
မိန်းမနှင့်အတူ ရောက်လာသည် ။
လူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် သီးသန့် ဆွေးနွေးရန် ဟု ဆိုကာ အခန်းထဲ ခဏနေခဲ့ပါရန် လူနာ၏ ဇနီးသည်ကို ပြောသည် ။ လူနာ
ယောင်္ကျားက နားလည်မှု ရှိစွာဖြင့် အခန်းအပြင်သို့ထွက်သွားသည် ။ နှစ်ယောက်တည်း ကျန်သောအခါ ဆရာဝန်က အမျိုးသမီးကို ပြောသည်။
" ခင်ဗျား ယောင်္ကျား စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းနေတာကြောင့် အအိပ်ပျက် အစားပျက်ပြီး
အခုလို တစ်နေ့ တစ်ခြား
ပိန်ချုံးလာတာဗျ.. အဲ့ဒီတော့ သူ လုပ်ချင် ဖြစ်စေချင်တာမှန်သမျှကို
ဖြည့်ဆည်းပေးပါ..ဥပမာ သူ အလုပ် မလုပ်
ချင်ဘူးဆိုရင် မလုပ်ပါစေနဲ့ .. အိမ်မှာပဲ ထိုင်နေပါစေ..နံနက်စာကို အိပ်ရာထဲ
ယူလာခဲ့လို့သူအမိန့် ပေးရင် မငြို
မငြင် ယူလာပေးပါ..။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အပြင်ကို
ထွက်ချင်တယ်ဆိုလည်း မတားပါနဲ့"
" နို့ မဟုတ်ရင် ..ဘာဖြစ်မလဲ.."
" သူ မကြာခင် သေသွားပါလိမ့်မယ်.." မိန်းမဖြစ်သူ အပြင်သို့ပြန်ထွက်လာသောအခါ ယောင်္ကျားက လှမ်းမေးသည် ။
" မင်းကို ဆရာဝန်က ဘာပြောလိုက်သလဲကွ.." " ရှင်..မကြာခင် သေမယ်တဲ့.."
" ငါး မိ နစ် "
ရုံးဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် အလုပ်ချိန် နောက်ကျသဖြင့် အရာရှိက ဝေဖန်ပြစ်တင်သည် ။
ရုံးဝန်ထမ်းများစာရေးမများကလည်း သွားရေးလာရေး အခက်အခဲကို တင်ပြသည် ။ အရာရှိကလည်း ဇွတ် တင်း သည် ။
" ခင်ဗျားတို့သိဖို့ က အလုပ်ဟာ အလုပ်ပဲ.." " ဟာ...ဒီလိုဇွတ်လုပ်ရင် အစည်းအဝေးခေါ်တာ အလကားပဲပေါ့..ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့.." " ဒါကတော့ ညှိနှိုင်းသင့်မှ ညှိနှိုင်းမှာပေါ့...ခင်ဗျားတို့ က အများစု ဆိုတော့
အနိုင်ယူလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ..စည်းကမ်းနဲ့အနိုင်ယူရမှာပေါ့ .." " ဟာ...ရှင်က ကိုယ်နိုင်တာနဲ့ကိုင်လို့ဘယ်ရမလဲ..." " ဘယ် , မရတော့ ညာ , ရတာပေါ့ဗျာ..."
" တော်..ရှင်ဆက် မပြောနဲ့ တော့.. ဒါ ရုံးမို့ လို့ .. အိမ်မှာသာ ဆိုရင် ရှင် ဒုက်ခ ရှင် သတ်တိ ရှိရင် ငါးမိနစ်လောက် ကျမ ယောင်္ကျား ဖြစ်ကြည့်ပါလား.."
" ပိငု ရှင် " တရားရုံးတွင် လင်မယား ကွာရှင်း ပြတ်စဲမှုကို ကြားနာနေသည် ။ ကွာရှင်းပြီးသည့်အခါ သားသမီးများကိုအုပ်ထိမ်းခွင့် မည်သူရသင့် သနည်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်ရှေ့ နေများ လျှောက်လဲကြသည် ။ ယောင်္ကျားဘက်က ရှေ့ နေ ပြောသည် ။
" ပိုက်ဆံ ထည့်တဲ့လူပေ့ါ.."
" အဲ့ဒါဆို ကလေးတွေကို ကျနော့်အမှုသည် လက်ထဲ အပ်လိုက်ပါ.."
" လေးခု မြောက် အကြောင်း "
ဆေးကျောင်းတွင် ဖြစ်သည် ။
ကျောင်းသားသည် ကလေးဆေးပညာ ( pediatry ) ဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုရမည်
ဖြစ်သည် ။ မွေးခါစ ကလေးငယ်ကို
မှန်မှန်ကန်ကန် ဖွံ့ ဖြိုးကြီးထွားလာစေရန်မည်ကဲ့သို့ပြုစုရမည်နည်း နှင့် ဆက်စပ်သည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရဖွယ် ရှိသည် ။ သို့ သော်
ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင် ကျက်မှတ်ထားခြင်း မရှိသဖြင့် စာမေးပွဲခန်းထဲ မ၀င်ခင် ကတည်းကပင် ၄င်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် ။ ထင်သည့်
အတိုင်းဖြစ်သည် ။ ဘယ်မေးခွန်းမှ မလွယ် ။ အခက်ဆုံးမှာ" စက်ရုံထုတ် နို့ ဘူးနှင့် နှိုင်းစာလျှင် မိခင် နို့၏ အားသာချက် လေးခု ကို ဖော်
ပြပါ " ဟူသည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည် ။ အဖြေကို ကျောင်းသား မသိ ။ အမျိုးမျိုး စဉ်းစားကြည့်သည် ။ မရ ။
အချိန်အတန်ကြာမှ " အားသာချက် သုံးခု " ပေါ်
ထွက်လာသည် ။ ၄င်းတို့ ကို စာရွက်ပေါ် ချရေးသည် ။
" တစ် - မိခင်နို့ ကို ကျိုချက်စရာ မလို " " နှစ်
- ဘယ်အချိန် သောက်သောက် အန်တရယ် မရှိ "
" သုံး - လိုတဲ့ အချိန်မှာ ရသည် "
လေးခုမြောက် အားသာချက် အဘယ်နည်း ။ ဖြစ်နိင်တာကို တွေးကြည့်သည် ။ ဘာမှ
မယ်မယ်ရရ ပေါ်မလာချေ ။
သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကုန်ဖို့တဖြည်းဖြည်း နီးလာသည် ။ စဉ်းစားလို့မရသေး ။ ကျောင်းသားရဲ့နဖူးမှာ ချွေးတွေ စို့ လာသည် ။
ဗြုန်း ဆို ဘေးနားမှ ထိုင်နေသော ကျောင်းသူသည် ထိုင်ရာမှထပြီး မိမိ၏ အဖြေလွှာကို အပ်ရန် ဒေါက်ဒေါက် ဒေါက်ဒေါက် နှင့် တစ်ကိုယ်
လုံး လှုပ်ခါပြီး လျှောက်ထွက်သွားသည် ။ သူမကို ကြည့်ပြီး ကျောင်းသား၏ မျက်လုံးတွေ ၀င်းလက်လာသည် ။ ခေါင်းထဲ အတွေး တစ်ခု
ဖျတ်ခနဲ ၀င်လာသည် ။ အဲ့ဒီအတွေးကို ချက်ချင်း ချရေးလိုက်သည် ။
" လေး - ဘယ်လိုပဲ ပက်ကင် ထုတ်ထား ထုတ်ထား တစ်အားကြည့်လို့ 
ကောင်းသည် ။ "
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လူထုအမြင်ကောက်ခံရေးတက္ကသလိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်ထံ လူငယ်တစ်ဦးရောက်လာပြီး မိမိ၏လေ့လာချက်အကြောင်းကို ပြောပြသည်။
"အမျိုးသမီးပေါင်း နှစ်ထောင်တိတိကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ခိုင်မာတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်ရတယ်၊ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးထုရဲ့ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို မဝတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲ" "ဘာလဲ ခင်ဗျားကစာရင်းအင်းဌာနက ဝန်ထမ်းလား" "မဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးသမီးဖိနပ်ဆိုင်မှာ ဈေးရောင်းတဲ့သူ"
ကြည့်ချင်မှ ဆရာမသည် အတန်းသားများကို ခေါ်ကာ တိရစ္ဆာန်ရုံသို့သွားသည်၊ တိရစ္ဆာန်ရုံသို့ ရောက်သည်နှင့်ကလေးများသည် မျောက်များရှိရာဘက် ပြေးသွားကြသည်၊ သို့သော် မျောက်တစ်ကောင်ကိုမှ မတွေ့ချေ၊ သို့နှင့် ဆရာမက တိရစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းအား အကြောင်းရင်းကို မေးရာ ၄င်းက ဤသို့ ဖြေသည်။ " ဒီလိုပါ၊ အခုအချိန်ဟာ မျောက်တွေမိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်ပါ၊ အခု လူသူတွေ မမြင်အောင် သူတို့ လှောင်အိမ်ထဲ ၀င်နေကြပါတယ် " ..............ဆရာမ ရှက်သွေးဖြာသွားသည်၊ သို့သော်က္ဏနြေ္ဒဆယ်လိုက်ပြီး ၀န်ထမ်းကို ပြောသည်။ ......" ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရှင်၊ ကလေးတွေကို သနားပါတယ်၊ သူတို့ ခမျာ
မျောက်ကို တွေ့ဖူးချင်ကြလွန်းလို့ ခဏခဏ ပူဆာတာနဲ့ ကျွန်မ အခုခေါ်လာတာရှင့်၊ ငှက်ပျောသီးတွေ ပစ်ပေးပြီး မြားခေါ်ရင် သူတို့ ထွက်လာမယ်ထင်သလားရှင် "........ တိရစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းက ပြန်ပြောသည်။
....." ကျွန်တော်တော့ သိပ်မထင်ဘူး၊ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပေါ့ ဆရာမရယ် "..//( မျိူးမင်း)
(လက်ထပ်လျှင်) အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် တစ်နေ့လက်ထပ်ရင် ဘယ်လိုယောင်္ကျားမျိုးကိုရှာပြီး လက်ထပ်ရမည့် အကြောင်းပြောနေကြသည်။ ပထမမိန်းမ။
။အို……….ဒါဆို နင်ကယောင်္ကျား ၃ ယောက်တောင်ယူမှာလား
(ကြိုက်နေလို့ ပါ) ဒီအမျိုးသမီးကို ခင်များ ဘာလို့အဓမ္မ ကျင့်ရတာလဲ” တရားခံကို တရားသူကြီးကမေးသည်..။ “သူ့ကို ကျနော်ကြိုက်လို့ပါ”ဟုတရားခံက မျက်လုံးနှစ်ဖက် ကို လက်နှင့်ပိတ်ရင်းပြန်ဖြေသည် ..။ ”ဒီယောက်ျားကိုရော ဘာဖြစ်လို့အဓမ္မ ကျင့်ရပြန်တာလဲ “ဟုတရားသူကြီးကထပ်မေးသည် ..။ “သူ့ကိုကျနော်ကြိုက်လို့ပါ “ဟုတရားခံကမျက်လုံးနှစ်လုံးကို လက်ဝါးဖြင့်ပိတ်ရင်းပြန်ဖြေသည်။ ’ဒါနဲ့နေပါအုံး ခင်များဘာဖြစ်လို့ မျက်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပိတ်ပြီးဖြေနေရတာတုန်း “ “တရားသူကြီးမင်းကိုလည်းကျနော်ကြိုက်နေလို့ပါ..။”
(ညီမျှ သလိပဲု)
အသက်၄၀ခန့်ရှိသောလူပျိုသိုးကြီးသည် မိဘများအား အိမ်ထောင်ပြုချင်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောသည်။ ထိုအခါမိဘဖြစ်သူတို့က ရိုးအသော သားအကြာင်းသိသဖြင့် ဒါဆိုမေမေတို့က မင်းနဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီမဲ့ အသက်၃၀ကျော်မိန်းခလးတစ်ယောက်ရှာပေးမယ်နော်။ ထိုအခါလူပျိုသိုးကြီးက မျက်နှာငယ်လေးဖြင့်…….့် မေမေတို့စကားလည်းနားထောင်ပြီးသားဖြစ်အောင် သားလိုချင်တာလည်းဖြစ်အောင်
သိသွားပြီ တခါက အရူးတွေကို ခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အရူးထောင်မှာထား တယ်တဲ့ တနေ့ကျတော့ အရူးတွေက အော်နေကြ တယ် ” ၂၂ ” ဆြို ပီးတော့ အဲဒါနဲ့တာဝန်ကျဆရာဝန်ကလည်း ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီး
မြေညီထပ်ကအရူးတွေကိုသွားမေးတယ် အရူးတွေကအပေါ်ထပ်ကအော်လို့အော်ရတာပါတဲ့ ဒါနဲ့ ဆရာဝန်လည်း ဒုတိယထပ်ကိုတက်သွားပြီးမေးပြန်တယ် ဒုတိယထပ်က အရူးတွေကကျတော့နဲနဲအဆင့်မြင့်လာတယ်
စာတန်းတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့ သူတို့ကလည်းအပေါ်ကအော်လို့အော်ရတာပါလို့ဖြေပြန်တယ် ဒါနဲ့ထပ်တက်ပြန်တာပေါ့ တတိယထပ်ကျတော့ မိုက်ကရိုဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့အော်နေကြတာပေါ့ သူတို့ကလည်း
အပေါ်ကအော်လို့အော်ရတာပါလို့ပြောပြန်ကော ဒီလိုနဲ့ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးထပ် ခုနှစ်လွာကိုရောက်တော့ အဲအထပ်မှာက ဂိဏုးစတား အရူးတွေကြီးပဲရှိတယ် ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကထုံးစံတိုင်းမေးပြန်ရောတဲ့ အရူးတွေကဘာမှမပြောဘူး ပြတင်းပေါက်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ် ဆရာဝန်ကလည်းဘာများလည်းဆိုပြီးသွားကြည့်တာပေါ့ အဲချိန်မှာအရူးတွေက
ဆရာဝန်ကိုခြေထောက်ကနေကိုင်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေပစ်ချလိုက်ကြတယ် ပြီးတော့ သူတို့အားလုံးအော်လိုက်တာက ၂၃. ၂၃ တဲ့
(တူပါတယ်) မောင်ချစ်။ ။ ငါသေသွားခဲ့ရင် မင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား? ဇနီးဖြစ်သူ။ ။ ဟင့်အင်း… ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ နေမှာ။ ဒါနဲ့ ရှင်ကော ကျွန်မ သေသွားရင် နောက် အိမ်ထောင် ပြုမှာလား? မောင်ချစ်။ ။ ဟင့်အင်း… ငါလဲ မင်းလိုပဲ မင်းညီမနဲ့ပဲ နေမှာပေါ့။
ဘာသာ စကား တရုတ်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင် ဝေချောင်လင်းသည် လုပ်ငန်း ကိစ္စဖြင့် နယူးဒေလီ မြို့သို့  ရောက်လာစဉ် အရေးပေါ် နာမကျန်း ဖြစ်၍ ဆေးရုံ တက်ရသည်။ ဝေချောင်လင်းနှင့် သိကျွမ်းသော်လည်း တရုတ်စကား မတတ်သည့် အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင် ဘာဂျမ်း ဆေးရုံသို့ လူနာမေး ရောက်လာ သည်။
ဝေချောင်လင်း၏ ကုတင်အနီးတွင် ထိုင်နေသော ဘာဂျမ်းကို ဝေချောင်လင်းက မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်ပြီး `“လီကိုင်ယန် ကျွိဂွမ် ” ဟု ပြောသည်။ ဘာဂျမ်းကက ဘာပြောမှန်းမသိ၍ ဝေချောင်လင်း ကိုသာ ငေးကြည့် နေသည်။ “လီကိုင်ယန် ကျွိဂွမ် ” “လီကိုင်ယန် ကျွိဂွမ် ” ဟု ဝေချောင်းက အကြိမ်ကြိမ် ပြောသည်။ ဘာဂျမ်းက နားမလည်၍ ထိုင်နေမြဲ အတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေဆဲ “လီကိုင်ယန် ကျွိဂွမ် ” ဟုအော် အသံပြုရင်း
အသက်ပျောက် သွား၏။ ဘာဂျမ်း အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှ နေအိမ်သို့  ပြန်လာသည် နောက် တစ်လခန့် ကြာသောအခါ ဘာဂျမ်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ သို့ အလုပ် ကိစ္စဖြင့် ရောက်လာ၏။ ရှန်ဟိုင်းမြို့  တစ်နေရာတွင် တရုတ်-အိန္ဒိယ အဘိဓါန်စာအုပ် တွေ့ ၍ ၀ယ်လိုက်ပြီး “လီကိုင်ယန်ကျွိဂွမ် ” ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာသည်။
စာမျက်နှာ ၆၈ တွင် တွေ့ ၏။ “လီကိုင်ယန်ကျွိဂွမ် ” = အောက်ဆီဂျင် ပိုက်ကို ဖင်ခု မထိုင်ထားပါနဲ့ ။
အရေးကြီးတာပေါ့....... ဆရာဝန်တစ်ယောက် လက်ထပ်လိုက်သည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင် သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တွေက ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်။
ဟေ့ကောင် … ပိုကာဒေါင်းမယ်။ မြန်မြန်လာခဲ့။ ဒီမှာ တစ်အိမ်လိုနေလို့ " ဆရာဝန်က အရေးပေါ် ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုအတွက် ဆေးရုံမှ ဖုန်းဆက်ကြောင်း ဇနီးသည်အားပြောသည်။ အလောတကြီး အ၀တ်အစားလဲနေသော ယောက်ျားကိုကြည့်ရင်းဇနီးဖြစ်သူကမေးသည်။ "ဟိုမှာ တော်တော်လေး အရေးကြီးနေလို့လား မောင်"ဆရာဝန်က ခပ်တည်တည်ပြန်ဖြေသည်။ "အရေးကြီးတာပေါ့။ ဟိုမှာ ဆရာဝန်(၄)ယောက်တောင် ရောက်နေကြပြီ"
သာဓုနဲ ပ့ါပုဆွေးနွေးခန်း
သာဓု - “အိမ်ထောင်ဆိုတာဘာလဲ” ပါပု - “အိမ်ထောင်ဆိုတာ အ၀ိုင်းခံထားရတဲ့ ရဲတိုက်နဲ့တူတယ်။ အထဲရောက်နေတဲ့
လူတွေကအပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်။ အဲ အပြင်ကလူတွေကြတော့ အထဲဝင်ဖို့ အားခဲနေကြတယ်” သာဓု - “လူငယ်တွေဟာ မိန်းမယူပြီးတဲ့နောက်မှ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ပိုလာသလား” ပါပု - “ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိရင် သူတို့ မိန်းမ မယူဘူး” သာဓု - “လူပျိုနဲ့ လူအို ဘာကွာသလဲ”
ပါပု - “လူပျိုက အိမ်အလုပ်ကို သူ့ဟာသူလုပ်တယ်၊ လူအိုကတော့ မိန်းမခိုင်းလို့ လုပ်ရတယ်” သာဓု - “မိန်းမဆိုတာဘာလဲ” ပါပု - “မိန်းမဆိုတာ နှင်းဆီပန်းပဲ၊ ပွင့်ချပ်တွေကို ချစ်သူ ရည်းစားတွေက ခူးသွားကြတယ်၊ သူယူတဲ့ ယောက်ျားအတွက် ဆူးပဲ ကျန်တယ်” သာဓု - “မယားငယ်ဆိုတာ ဘာလဲ” ပါပု - “အိမ်ခန်းထဲမှာ ထားစရာ နေရာမရှိတဲ့ အဖိုးတန် ပရိဘောဂ” သာဓု - “မိန်းမတစ်ယောက်ထဲ ယူတဲ့စနစ်နဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက် ယူတဲ့စနစ် ဘာကွာသလဲ” ပါပု - “ဘာမှ အကွာဘူး၊ နှစ်ခုစလုံးမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ပိုနေတယ်” သာဓု - “မိုက်တွင်းနက်ပြီး မိန်းမနဲ့ ကွာရှင်းနိုင်သလား” ပါပု - “မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် မိုက်တွင်းနက်ပြီး မိန်းမတွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကောက်ယူနိုင်တာတော့ အမှန်ပဲ”
သာဓု - “မိန်းမကိုဘာနဲ့ နှိုင်းလို့ ရမလဲ” ပါပု - “စောင်နဲ့ ၊ ခြုံလိုက်ရင် အိုက်တယ်၊ ဖယ်လကိုရင် ချမ်းတယ်” သာဓု - “အလွန်အကျွံ သတိမေ့ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ”
ပါပု - “နယ်ကပြန်လာတဲ့ ယောက်ျားက ရွှေဆွဲကြိုးကို မယားကြီးကိုပေးပြီး ညစ်ပတ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားကို လျှော်ဖွတ်ဖို့ မယားငယ်ကိုပေးခြင်း” သာဓု - “အကောင်းမြင်သမားဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိူးလဲ”
သာဓု - “ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ သူတို့ရဲ့ပါတနာတွေကို ဘာကြောင့်လဲသလဲ” ပါပု - “အမျိုးမျိုးခံစားချင်တဲ့အခါ ယောက်ျားဟာ မိန်းမကိုလဲတယ်၊ အဲမိန်းမကတော့ ဘာမှမခံစားရတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားကိုလဲတယ်”
သာဓု - “မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မိချောင်းနဲ့ အတူတူနေနိုင်သလား” ပါပု - “မိချောင်းမှာ ပိုက်ဆံရှိရင်နေမှာပေါ့” သာဓု - “ငွေသာ ပဓာနဆိုတာ အမှန်ပဲလား”
ပါပု - “မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီငွေရဲ့ အရေအတွက်ကသာ ပဓာန” သာဓု - “ဘယ်အရာက မိန်းမတစ်ယောက်ကို အလှတိုးစေသလဲ” ပါပု - “ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲက ၀ီစကီနှစ်ခွက်” သာဓု - “ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အင်အားချိနဲ့တဲ့ သဘောကို ခံစားရသလဲ” ပါပု - “မိန်းမချောတစ်ယောက်က ရှင်အင်မတန်တော်တဲ့ လူပါလားလို့ ချီးကျုးတဲ့အခါမှာ” သာဓု - “ယောက်ျား ယူတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုဘယ်လို အကဲဖြတ်နိုင်သလဲ” ပါပု - “ယောက်ျားအများကြီးရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ခံရတဲ့ဘ၀ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုခံရတဲ့ဘ၀နဲ့ လဲလိုက်ခြင်းပဲပေါ့”
သာဓု - “မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက် မှန်သမျှကို သိအောင် ဘယ်လိုရမလဲ” ပါပု - “သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းရှေ့မှာသူ့ကို ချီးမွမ်းကြည့်”
သာဓု - “မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကို အံ့သြအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ” ပါပု - “သူ တစ်ချိန်လုံးပူဆာနေတဲ့ စိန်နားကပ်အစား လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည် ၀ယ်ပေးလိုက်” သာဓု - “မိန်းမဟာ ဓားပြထက်ပိုကြောက်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ” ပါပု - “ဓားပြဟာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘ၀ကို အဆုံးခံမလားလို့မေးတယ်၊ မိန်းမကတော့ နှစ်ခုစလုံးကို တောင်းတယ်”
ပါပု - “စကားပြောနေကြတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ ကွာသလဲလိုပဲပေါ့” သာဓု - “ဘီယာနဲ့မိန်းမ ဘာကွာသလဲ” ပါပု - “ဘီယာက ခင်ဗျားဘယ်အချိန် အိမ်ပြန်မလဲဆိုတာ စိတ်မပူဘူး” သာဓု - “ရုပ်ချော၊ ဉာဏ်ကောင်း၊ ဂရုစိုက်တတ်ပြီး ပိုက်ဆံလည်း ချမ်းသာတဲ့ ယောက်ျားကို ယူချင်ရင် ဖြစ်မလား”
ပါပု - “ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လင်လေးခါယူရမယ်” သာဓု - “ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ခွေးကို ဘာဖြစ်လို့ ငထုံကြီး”လို့ နာမည်ပေးရတာလဲ”
ပါပု - “လမ်းမှာ ဒီကောင့်ကို ငထုံကြီးခေါ်လိုက်ရင် ယောက်ျားတွေ အတော်များများ လှည့်ကြည့်ကြတာ အရသာရှိလွန်းလို့” သာဓု - “ကိုယ့်မိန်းမနဲ့စကားများကြရာမှာ ကိုယ်က အနိုင်ရတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ“ ပါပု - “ရှင်းရှင်းလေးပဲ သူ့ကို တောင်းပန်လိုက်”
သာဓု - “ဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးကို ပျော်ရွင်အောင် လုပ်နိုင်သလား” ပါပု - “လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ မိန်းကလေးကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာ ပိုကောင်းတယ်” သာဓု - “ပညာနဲ့ အသပြာ ဘယ်ဟာကို ယူသင့်သလဲ” ပါပု - “ကိုယ့်ဆီမှာ မလုံလောက်တာကို ယူ”
အပြန်အလှန်ယဉ်ကျေးမှု ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုတွင် ၁၅-နှစ်သား လူပျိုပေါက်က မိမိနှင့် တွဲကပါရန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သွားဖိတ်သည်။ "ကျွန်မ ကလေးနဲ့ မကဘူး" "တောင်းပန်ပါတယ်၊ ခင်ဗျား ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိလို့ပါ" ( အစေ့ )
တစ်ခါက ချင်းတောင်က ချင်းအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ အလည်အပတ် ရောက်လာသတဲ့ ။ ချင်းတောင်မှာ အုန်းပင် မရှိလို့ အုန်းသီး တခါမှ မစားဘူးတဲ့ ချင်းအမျိုးသားက
အုန်းသီးကို စားကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ချလိုက်ပုံက " အောက်ပြည်အောက်ရွာက အုန်းသီးကောင်းတယ်ဆိုလို့ စားကြည့်ပါတယ် ။ အရသာကလဲ ဖန်တွတ်တွတ်နဲ့ အစေ့ကလဲ အကြီးကြီး "
( ဘာရမလဲ ) တစ်ခါကရွာတရွာမှာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးတပါးက သူ့သွားတွေကို ဖြူဖွေးနေအောင် မနက်တိုင်း တိုက်လေ့ရှိသတဲ့။တနေ့တော့ မိန်းမကြီးတဦးက စိန်လက်စွပ်အကြီးကြီး ဝတ်ပြီး လက်ကို ခါယမ်းပြီး " ဒီနေ့ ဘာနေ့ -
ဘာနေ့ပါလဲ ဘုရား " လို့ ဘုန်းကြီးကို မေးတော့ ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာ " အင်း ...ဒီ ဒကာမကြီးတော့ ငါ့ကို သူ့စိန်လက်စွပ်ကြွားနေပြီ ။ ငါလဲ ဘာပြန်ကြွားရမလဲ " လို့ စဉ်းစားပြီး ဖြေလိုက်ပုံက"ဗုဒ္ဒဟီး....ဒကာမကြီး ...."
လို့ သွားကိုဖြဲပြီးဖြေလိုက်သတဲ့ ။ ( တိေုနတယ် ) တစ်ခါက ရွာတရွာမှာ မောင်လှဆိုတဲ့ လူရွယ်တဦးရှိသတဲ့ ။ မောင်လှ အရွယ်ရောက်လာတော့ မိဘများက အိမ်ထောင်ချပေးချင်ပေမဲ့ မောင်လှမှာ အောက်နှုတ်ခမ်းပြတ်နေလို့ ယုမဲံ မိန်းမ မရှိဘူးတဲ့ ။ တနေ့တော့ မိတ်ဆွေဟောင်းဆီက တဆင့် တခြားရွာတရွာက သမီးပျိုကို မိဘချင်း စကားကမ်းလှမ်းကြသတဲ့ ။ မောင်လှ မိဘများက သူတို့သားအောက်နှုတ်ခမ်းမရှိတာကို ဖုံးကွယ်ချင်တော့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ညဖက်မှာပဲ
မီးမှောင်ချပြီး ကျင်းပရမယ်လို့ အဆိုပြုတယ် ။ သတိုသမီးရှင်ဖက်ကလဲ ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိတော့ မောင်လှရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို နေ့ကောင်းရက်သာ ရွေးပြီး တညမှာ မီးမှောင်ချပြီး ကျင်းပကြသတဲ့ ။ မင်္ဂလာဦး ထမင်းစားဝိုက်းမှာ မောင်လှက ဟင်ချိုပူကြောင်းကို "ဟင်းချိုကလဲ ဝူလိုက်တာ " လို့ပြောတော့ သတိုသမီး ပြန်ပြောလိုကိပုံက " ဝူရင် ဝုတ်တောက်ပေါ့ " တဲ့ ။
အဆုံးအဖြတ် နွားနို့ညှစ်ပြိုင်ပွဲသို့ ရွှာအသီးသီးမှု သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသော မောင်မိုး ၊ ပိုး နှင့် ကျော်ဇော တို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ုပြိုင်ပွဲ၏အမှတ်ပေးဒိုင်လူကြီးအဖြစ်သီလ၊သမာဓိ၊ဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဦးလူသစ် အား ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ကြလေသည်။ ဒိုင်လူကြီးဦးလူသစ် မှ ပြိုင်ပွဲတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နွားများ
ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းနှင့် နွားနို့အလေးချိန်သာမဟုတ်ဘဲအခြားအရည်အချင်းများဖြင့်လည်း ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပေးလေသည်။ သို့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ပိုး မှ အားကျိုးမာန်တက်ဖြင့်စတင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးနွားနို့(၅)ပိသာနှင့်(၅၀)ကျပ်သားခန့် ရရှိလေရာလက်ပန်းပေါက်ခတ်၍ဆင်းသွားလေသည်။
ဆက်လက်၍ ကျော်ဇော မှကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ပြီး နွားနို့(၅)ပိသာနှင့်(၃၅)ကျပ်သားခန့် ရရှိလေရာ လက်သီးလက်မောင်း တန်း၍ဆင်းသွားလေသည်။ ၄င်းညှစ်ရသောနွားမှာ ရွေးကျ နွားပိန်မလေး ဖြစ် သဖြင့်ပထမဆုရနိုင်ပေသည်။ ထို့နောက် မောင်မိုး မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ နွားနို့(၂၅)ကျပ်သားခန့်သာ ရရှိလေ သည်။မောင်မိုး လည်းသုန်မှုန်၍ဆင်းသွားလေသည်။ မကြာမီ ဒိုင်လူကြီးဦီးလူတစ် မှ
နွားနို့(၂၅)ကျပ်သားခန့်သာရရှိသော မောင်မိုး အား ပထမဆု ရရှိကြောင်း ကြေငြာလိုက်လေသည်။ ပြိုင်ပွဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှုနှေ မန်ဘာများက မကျေမနပ်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း အော်ဟစ်ကြလေရာဒိုင်လူကြီးဦးလူသစ် မှ မတ်တတ်ရပ် လက်နှစ်ဘက်မြှောက် ၍ “ကျွန်တော်
ရှင်းပြပါ့မယ်၊ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါ့မယ်၊ ကိုမိုး ညှစ်သွားတဲ့နွားဟာ နွားထီးဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား” ဟု ကြေငြာလိုက်လေတော့သနည်း။
*တတ်အောင်သင်လုက်ိတယ်* တစ်ခါက ဓားပြတစ်ဖွဲ့သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၊ပြင်သစ်လူမျိုး၊မြန်မာလူမျိုး သုံးယောက်ကိုဖမ်းမိသည်။ ထို့နောက်တစ်ယောက်စီကို အခန်းတစ်ခန်းစီတွင် မျောက်မတစ်ကောင်စီနှင့်ထားသည်။ အစားအသောက်အပြည့်အစုံနှင့်ထားပြီး တစ်နှစ်အတွင်း မျောက်မကိုစကားပြောတတ်အောင်သင်ခိုင်းသည်။ တစ်နှစ်ကြာလို့မှ စကားမပြောတတ်လျှင် အသက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ကြာသော် အင်္ဂလိပ်၏အခန်းကိုသွားစစ်သည်၊ အင်္ဂလိပ်သည်မျောက်မနှင့်ညစာအတူစားနေသည် ''ဒီမျောက်မက စကားမသင်ချင်ဘူးဗျ'' အင်္ဂလိပ်ကိုသတ်လိုက်သည် ပြင်သစ်၏အခန်းကိုသွားစစ်သည်၊ပြင်သစ်သည်မျောက်မနှင့်အတူအရက်ထိုင်သောက်နေသည် ''ဒီကောင်မက ပြင်သစ်စကားကိုမလေးစားဘူးဗျ သူစကားမပြောတတ်သေးဘူး'' ပြင်သစ်ကိုသတ်လိုက်သည်။
နောက်ဆုံးမြန်မာ၏အခန်းကိုသွားကြည့်ရာ သိသိသာသာဝဖြိုးလာသော မြန်မာလူမျိုးနှင့် ပိန်ချုံးနေသောမျောက်မကိုတွေ့လိုက်ရသည် ''ဟာ ဟိတ်ကောင် မင်း မျောက်မကိုအစာမကျွေးဘူးလားကွ'' ''ကျွေးသားပဲ တစ်နေ့ကိုသုံးနပ်တောင်ကျွေးတယ်'' ထိုအချိန်တွင်မျောက်မကဝင်ပြောသည် ''သူလျှောက်ပြောနေတာမယုံကြပါနဲ့ရှင်'' ထို့နောက်မြန်မာလူမျိုးဘက်လှည့်ကာ ''အကိုကြီးရယ် ကျွန်မကိုထမင်းကျန်၊ဟင်းကျန်လေးနဲနဲလောက်ကျွေးပါ''
ကြွပြ် ကွပအ်တိတ်စ်အတိ…်* ဟောပြောပွဲတစ်ခု၌ သူဌေးကြီးတစ်ဦးက သူ့အနေဖြင့် ဤမြို့သို့ရောက်ခဲ့စဉ်က ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကလေးတစ်လုံးသာပါရှိခဲ့ကြောင်း ယခုသိန်းပေါင်းများစွာ
ချမ်းသာနေပြီဖြစ်ကြောင်းများကိုပြောပြပြီးနောက် သတင်းထောက်ကမေးလေသည်။ သတင်းထောက်။ သူဌေး။
။ဇွဲလည်းကောင်း အခက်အခဲတွေလည်း ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာပေါ့။
။ဒါထက်…လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ဒီမြို့ကို ရောက်ခါစမှာ
။အဲဒီကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲမှာ ဘာတွေများပါလဲ လူကြီးမင်း။ ။ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ထောင်ပါ။ ။ဗျာ
"ပော့လူ နေကောင်းလား" ဒီလို နေရာမျိုးမှာ အလာပ သလာပ စကား ပြောရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်။ မကောင်းတတ် တော့လည်း ပြန် နှုတ်ဆက် ရသည်ပဲပေါ့။ "ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးပါ" အသေအချာ အကျအန ထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမယ် ကြံကာ ရှိသေး အလိုက် မသိတတ်သော ငနဲသားက ထပ်မေးလာပြန်သည်။
"ခင်ဗျား ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ် နေတာလဲဗျ" ပာာ.... ဒီလူတော့ ခက်ပြီ ... ဘာလဲကွာ ... ဒီလို နေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျ မေးခွန်းမျိုးတွေ လာ မေးနေရတာလဲ။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ဘုတော ပစ်လိုက်သည်။ "ခင်ဗျားလိုပဲပေါ့ဗျာ" ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန် လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူး လိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် မေးခွန်း တစ်ခု ထပ် ထွက်လာပြန်သည်။
"ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဗျာ...ရမလား" "ဗုဒ္ဓေါ...ဒီလူ ဘယ်လိုလလဲူ...ဂေးလား" ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် ကျင်လည် ကျက်စားရာ နေရာ မပာုတ်လို့ သတိတော့ ထားနေရသည်။ ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော ဒေါသကို အသာ ချိုးနှိမ်လျက် အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ "မလုပ်နဲ့လေဗျာ... ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ" တဖက်က ဒုန်းကနဲ တံခါးဆောင့် ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရပြီး ပိာုဖက်က ပြန်ပြောသည်။ "နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်... ပာိုဖက် အခန်းထဲက သောက်ပေါ တစ်ကောင်က ရူးသလို နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့"
" ကုယ်ိတငို ပ်ဲ စီးမယ်..." လူပျိုပေါက်က မေးသည် ။
" မိန်းမ ယူရင် ဘယ်လိုမိန်းမမျိုး ယူရမလဲဗျ " ....
လူပျိုခေါင်းက ပြန်ဖြေသည် ။
" အေး..မှတ်ထား....မော်တော်ကား ရယ် မြင်း ရယ် မိန်း မ ရယ်
ပန်းတိုင်ကို အရင်ရောက်မှ အမျိုးအစား ကောင်းတာ..အဲ့လိုမျိုး ရွေးယူ "
" အမျိုးအစား ကောင်း မကောင်း ဘယ်လို ရွေးမလဲဗျ.."
" ကိုယ်တိုင် စီးကြည့် ..ဒါမှ မဟုတ် စီးဘူးတဲ့သူကို မေးကြည့် ..."
" စမ်းကြည့်လိုက်ေရာပေါ့.." အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာကြီး " ဘားနတ်ရှော " ( Bernard shaw 1856-1950 ) ထံ ၄င်းနှင့်သိကျွမ်းခြင်း
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွစ်ဇာလန်မှနေပြီး စာတစ်စောင် ရေးလိုက်သည် ။ စာထဲတွင် " ရှင့် ဆီမှာ အကောင်းဆုံး ဦးနှောက်.. ကျမဆီမှာ
အကောင်းဆုံး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်...ဒီနှစ်ယောက်ကို ပေါင်းလိုက်ရင်..လောကမှာ အကောင်းဆုံး
ကလေးတစ်ယောက် မွေးလာမှာ သေ ချာတယ် " ဟု ဖော်ပြထားသည် ။
အမျိုးသမီး၏ စာကို ဘားနတ်ရှော
အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ကြားလိုက်သည် ။
" အဲ့ဒီ့ သနားစရာ ကလေးငယ်ဟာ ကျနော့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဦးနှောက်ကို အမွေ ဆက်ခံလိုက်ရင်
ဘယ်လို နေမလဲ ဟင် " ဟု ဖြစ်သည် ။
" အမှနက်ို ပြောမှပေါ့ "
အဘိုးကြီး နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။
" ဂွတ်မောနင်း...ဘယ့်နှယ့်လဲ...နေကောင်းရဲ့ လား...တွေ့ တာတောင် တော်တော်
" ကောင်းပါတယ်...ကျုပ် မနေ့ ကပဲ ထောင်က ထွက်လာတယ်..." " ဟုတ်လား.....ခင်ဗျား ထောင်ကျသွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ လဲ.." " ကျုပ် အိမ်မှာ နေတဲ့အိမ်ဖော်မလေးကို မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား... အဲ့ဒီ
ဒင်းကို ကျုပ် မုဒိန်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်လို့" " ဒင်း တိုင်တဲ့အတိုင်း ဟုတ်နေလို့ လား..."
" ဘယ်ကလာ..ဟုတ်ရမှာလဲ...ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ကျုပ်ကို စွတ်စွဲတော့ ကျုပ် သိက်ခါ အကျ မခံချင်တာနဲ့ 
ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်... ထောင်တစ်လခွဲ ချလိုက်တယ်.." " မုဒိန်းမှုက ထောင် တစ်လခွဲပဲ ကျသလား....နည်းလှချည်လား...." " မုဒိန်းမှုနဲ့မဟုတ်ဘူး...လိမ်လည်ထွက်ဆိုမှုနဲ့ချလိုက်တာ..."
" အချစ်လျော့သွားသူ " သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အချစ် အကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည် ။
" အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာ လူဟာ သိသိသာသာကြီး
လက်မထပ်ခင်တုန်းကဆိုရင် တစ်လောကလုံးမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး မှန်သမျှကို ငါ
လိုချင်တပ်မက် တဲ့ 
စိတ် ရှိခဲ့တယ်.. " " အခုကော "
" တစ်ယောက် လျှော့သွားတယ် "
သူရေဲကာင်းရွေးချယ်ပွဲ တစ်ခါကဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည် နိုင်ငံ အတွင်းတွင် သူရဲကောင်းရွေးချယ်ပြီးသူကောင်းပြုရန်အတွက် အကြံရလေသည်။ သူသည် သူ၏ဖောင်တော်ကို
မိချောင်းများ မွေးမြူထားသော ရေကန်၏အလယ်တွင် ကျောက်ချစေပြီးမူးမတ်များကို ဤသို့ကြေငြာစေသည်။ “တိုင်းသူပြည်သားများ ခင်ဗျား ဘုန်းကံ ကြီးမြတ်သော ရွှေနန်းရှင်၏သူရဲကောင်းရွှေးချယ် ပွဲကြီး စတင်ပါမည်ခင်ဗျား... မိချောင်းများကို
တိုက်ခိုက်၍ ဤရေကန်ကို ကူးခတ်လာနိုင်သူအား ဘုရင်မင်းမြတ် ကြီးမှဆုတော်လာဘ်တော်များ ပေးသနားပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ် ချီးမြောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲ စပါပြီခင်ဗျား။ “ ပရိတ်သတ် များသည်ကမ်းလုံးပြည့်မျှစည် ကားလှ၏။ အမတ်ကြီးကထိုသို့ကြေငြာလိုက်သော်လည်း ပရိတ်သတ်ကြီးက တုတ်တတ်ုမျှမလှုပ်။ မည်သူမှ
ရေထဲ မဆင်းရဲပဲ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ အတန်ကြာ တော့ ဘုရင်ကြီးဒေါသထွက်လာသည်။ ငါကိုယ်တော်ရဲ့တိုင်း ပြည်ထဲမှ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့သူ မရှိတော့ ဘူး လားဟုမူးမတ်များကို မေးသည်။ တစ်ခဏနေ သော် ရေထဲသို့ လူတစ်ယောက် ဗွမ်းခနဲ့ ခုန်ချ သွား သည်။ မိချောင်းများက သူ့ထံသို့ စုပြုံ လိုက်ကြလေသည်။ထိုသူသည် မိချောင်းများကို
ရှောင်တိမ်း ရင်း ဖောင်ဆီသို့ ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းလေ၏။ ပရိတ်သတ်ကြီး လည်း အသက်ပင် မရှုနိုင်ပဲ သည်းထိတ်ရင်ဖို စွာ ကြည့်ရှု့ကြလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုသူသည် ဖောင်တော်ဆီ သို့
အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိလေ သည်။ ထိုအခါ ဘုရင်ကြီးက အားရတော်မူပြီးရွေဓါးဆုကို ချီးမြင့်လေသည်။ မူးမတ်များ က ချီးကျူး စကား ဆိုကြ၏။ ပရိတ်သတ်များကလည်း သောင်းသောင်းဖျဖျ လက်ခုပ်တီး သြဘာပေး ကြလေသည်။ထို့နောက် ပရိတ်သတ်များ ငြိမ်သက်စေရန် အမတ်ချုပ်ကြီးက လက်ကာပြလိုက်ပြီး
သူရဲကောင်းကြီးအား “သူရဲကောင်းကြီး အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုဘာများပြောချင်ပါသေးသလဲခင်ဗျာ“ မေးလိုက်ရာ သူရဲ ကောင်းကြီးမှ ပရိတ်သတ်ကြီးဖက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး “ဘယ် မအေ..ိုး... ကျုပ်ကိုတွန်းချတာလဲကွ“ ဟူ၏။
သေချာပြောပါ မော်တော်တစ်စီးပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်သည် အိတ်ဇောပိုက်ကြီး အနီးတွင် တောင်းကြီးပိုက်ပြီးထိုင်နေသည်။ မော်တော်ထွက်သောအခါ မော်တော် မောင်းသူက သတိပေးသည်။“ဒေါ်ကြီး အဲဒါအိတ်ဇောနော်“ “အေးပါသိပါတယ်ဟဲ့“ မကြာမှီထိုသူက ထပ်သတိပေးပြန်သည်။“ဒေါ်ကြီး အဲဒါအိတ်ဇောနော်“
“အေးပါသိပါတယ်ဆို“ ထိုအချိန်တွင်မော်တော်က လှိုင်းအပုတ်တွင် လှုပ်သွားရာ ထိုအဒေါ်ကြီးမှာအိတ်ဇောဖြင့်ထိမိလေရာ ထအော်လေသည်။
“အမလေးပူလိုက်တာ“ ထိုအခါမော်တော်မောင်းသူက“အဒေါ်ကြီးကို ပြောသားပဲ အဲဒါအိတ်ဇောပါလို့“ ထိုအခါ အဒေါ်ကြီးက ဤသို့ပြန်ပြောလေသတည်း။ “သေနာလေး ပူ ပူတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး အိတ်ဇောလေးဘာလေးနဲ့“….
မျက်နှာ လိကုတ်ယ် တစ်ခါကကျေးရွာတစ်ရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ဖိုးသူတော်တပါးရှိလေသည်။ တစ်နေ့သော် ရွာရှိဒကာတစ်ဦးက ဂဏန်းများလာပေးရာ အရှင်တွေဖြစ်နေသည်။ ဆရာတော်သိလျှင် ထိုဂဏန်းအား လုံးကို
လွတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖိုးသူတော်က ဂဏန်းလည်း စားချင်သည် ဆရာတော်ဆူမှာ ကိုလည်း ကြောက်သဖြင့် ဂဏန်းများကို မချက်ရဲပဲ အကြံအိုက်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အကြံတစ်ခုရသည်။ သူသည် မီးဖိုကြီးဖိုပြီး အပေါ်တွင် ရေနွေးဒန်အိုးတယ်ပြီး။ ပြီးလျှင် ဒန်အိုးပေါ်တွင် ၀ါးခြမ်းသေး သေး လေးတင်ပြီး ဂဏန်းများကို ဖြတ်လျှောက်စေပြီး
“ကဲဂဏန်းတွေရေ မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ကစားကြမယ် မင်းတို့ ဒီဝါးခြမ်းကို ဖြတ်လျှောက်နိုင်ရင် လွပ်လပ်ရာသွားပေတော့“
ဟုဆိုကာတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် ၀ါးခြမ်းပေါ်သို့ တင်ပြီး ဖြတ်လျှောက်စေသည်။ ထိုအခါ ၀ါးခြမ်းက သေးသည်ကတစ်ကြောင်း ရေးနွေးငွေ့အပူကြောင့် လည်းကောင်းတစ် ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ရေး နွေးအိုးထဲကျကုန်၏်။ နောက်ဆုံးတွင် အကြီးဆုံး ဂဏန်းကြီး အလှည့်တွင် မူကား ထိုဂဏန်းကြီးသည်
အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်သဖြင့် ၀ါးခြမ်းကို ကုတက်တ်ပြီး ဖြတ်ကျော်သွားနိုင် လေသည်။ ထိုအခါဖိုးသူတော် က အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး “မင်းက အကောင်ကြီးတယ် နှစ်ခေါက်ဖြတ်“
ဟုဆိုကာ ဂဏန်းကြီးကို ၀ါးခြမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်လေသတည်း။
ကျမမပြောဘူးလား ကျနော်နဲ့ ကျနော့်မိန်းမ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ကို အလည်ရောက်ခဲ့စဉ်ကပေ့ါ။ တည်းခိုတဲ့ နေရာကလည်း ပဲရစ်မြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် “ချစ်သူလမ်းကြား” အနီးက ဟိုတယ် တစ်ခုမှာလေ။ ညနေစောင်းလဲ ရောက်ရော ကျနော့်ဇာတိက ပြလာတယ်၊ အဲဒီ “ချစ်သူလမ်းကြား” ထဲကို သွားကြည့်ချင်တာလေ။ ဝါသနာ ပါတာကိုး။ ဒါနဲ့ မိန်းမကို လှည့်ပတ်ပြောခဲ့ပြီး ဟိုတယ်အခန်းမှာ ခဏထားခဲ့လိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ချစ်သူလမ်းကြား တလျှောက် အစုံအဆန် လိုက်ကြည့်မိတယ်… အားပါးပါး… မိန်းမလှလေးတွေဗျာ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ၊ တိုက်နံရံဘေးမှာ၊ လှေခါးအဆင်း နေရာလေးတွေမှာ… ပေါမှပေါ ချောမှချော။ အသားလေးတွေများ ဝင်းစိုအိဖတ်နေလိုက်တာ.. ခြေသလုံးလေးတွေဆိုရင် ပြေးပြေး ဟပ် လိက်ုချင်တယ်.. တကယ်
မနေနိုင်တာနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကပ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တယ်… “မိန်းကလေး… ဘယ်ဈေးလဲကွ” “ရိုးရိုးဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀၊ အစုံဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၅၀” “ဟင်… အဲလောက်တောင် ဈေးကြီးတာလား။ ငါက ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ထင်နေတာ” “အဲဒါဆိုရင်တော့… ရှင် ဟိုဘက်တစ်လမ်းကျော်ကိုသွား၊ အဲဒီမှာ ၂၅ ဒေါ်လာတန်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ စုပ်ပြတ်နေတာတွေပဲ ရမှာနော်” “အော်… အေးပါကွာ။ မသွားတော့ပါဘူး။ ပြန်တော့မယ်” “ကြွ… ကြွ” ဟူး… မလွယ်ဘူး။ သွားပြီး စပ်စုမိတာ အကောခံလိုက်ရတာ အဖတ်တင်တယ်။ အခန်းပြန်မှ…
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ကိုပြန် ရေမိုးချိုး မိန်းမကို လက်ဆွဲပြီး နှစ်ယောက်သား ညစာစားဖို့ လမ်းမအတိုင်း ဆိုင်လိုက်ရှာ ရွေးနေတုန်း… ကံများဆိုးချင်တော့ ခုနက မိန်းကလေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုးပါလေရောဗျာ။ သူကလည်း မှတ်မိတယ်။ မှတ်မိတာထက် ဆိုးတာက သူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားဗျ…
“အော်.. ခုတော့ ၂၅ ဒေါ်လာတန်ကြီး မ လာတယ်ပေါ့လေ။ ကျမ မပြောဘူးလား။ စုပ်ပြတ်နေတာပါလို့”
ဂျက်ကောင်း အလွန် အရှက်ကြီးသော မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက် ငယ်သူတို့ဘာဝ ချစ်သူရည်းစား အဖြစ် လူငယ်လေး တစ်ဦးနှင့် ရည်ငံ နေကြပါသတဲ့။
တစ်နေ့မှာ ချစ်သူနှစ်ဦး သာယာတဲ့ မြစ်ကမ်းဘေး သစ်ပင်ရိပ်အောက် မြက်ခင်းလေးမှာ ချိန်းတွေ့နေကြတယ်။
သည်အခိုက်မှာ မနက်ခင်းတုန်းက ပဲကြီးလှော်သုပ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ အပြင်အဘွားရဲ့ လျှက်ဆားကိုပါ တို့မြီးခဲ့တဲ့ မိန်းမပျိုခမျာ လေလည်ချင် လာခဲ့ပါလေရော။ ခက်ပြီ။
အရှက်ကလည်းကြီး၊ ချစ်သူကလည်း အနီးမှာ အတူထိုင်နေတော့ လေများ လည်မိလိုက်ရင် မဟာ အရှက် ဟက်တက်ကွဲ တော့မှာပဲ။
အောင့်ထားရလွန်းလို့ သွားတွေလည်း စိပြီး၊ ခြေမကလည်း ကွေးလို့။ အဲဒီ ကွေးနေတဲ့ ခြေချောင်းတွေနဲ့ ခြေမကို မြင်သွားတဲ့ ချစ်သကူ
“အချစ်ရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေက လှရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ကွေးထား တာလဲကွယ်” လို့ ပြောပြောဆိုဆို ခြေမလေး တစ်ဖက်ကို ကိုင်ပြီး ဆန်လ့ိုက်တယ်။
အဲလိုလုပ်လိုက်မိတာနဲ့ပဲ မိန်းမပျိုမှာ လေကို အောင့်ထားလို့ မရတော့ဘဲ ကျယ်လောင် ရှည်လျားတဲ့ အသံနဲ့ ထွက်ကျ သွားရော။
မိန်းမပျိုလေးဟာ မျက်နှာကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ အုပ်ပြီး ရှကလ်ွန်းလို့ မြစ်ထဲ ခုန်ဆင်း သေမလို ဖြစ်သွားတယ်။
ချစ်သူကောင်လေးဟာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်ပြီး ပျာပျာသလဲ ချော့မော့တောင်းပန် လိုက်တာက “အချစ်ကလေးရဲ့ အီးခလုတ်မှန်း မသိလို့ ကိုင်မိလိုက်တာပါ။ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွာ။ နောက်ဆို မကိုင်မိစေရပါဘူးနော်”တဲ့။
ငါမရူးဘူး စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆေးရုံကြီတွင် ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံကော်မတီရှင်က လူနာတို့၏ အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးသည်။
လူနာများကို ငါးမျှားတံ တစ်ချောင်းစီ ပေးကာ ရေဆွဲအိမ်သာ တစ်ခုစီ၏ ရှေ့တွင် ထိုင်ခိုင်းသည်။ ထိုနောက် တစ်ယောက်ချင်းစီထံ သွားကာ ငါးတွတ်လားဟု မေးလေသည်။
လူနာအားလုံးလိုလိုက ငါးတွတ်ကြောင်း ပြန်ပြောလေသည်။ တစ်ဦးကသာ ငါးမတွတ်ကြောင်း ပြန်ပြောလေသည်။
ဆေးရုံကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးလုပ်ကာ ငါးမတွတ်ဟု ဖြေသော လူနာကိုသာ လူကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး
ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ထိုလူနာဆေးရုံမှ မဆင်းမီ အခန်းဖော်များက သူ့အားမေးလေသည်။ “ခင်ဗျားက ဘာလို့ ငါးမတွတ်ဘူးလို့ ဖြေရတာတုန်း” လူနာက ပြန်ပြောလေသည်…
“ငါးတွတ်တဲ့နေရာကို သူတို့ကိုပြောရအောင် ကျနော် အရူးမှ မဟုတတ်ာပဲ”
ဟာသ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင် သွားပြီး မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်း တွေကို ပြုပြင်လိုက်တယ်။
ဒေါ်လာ ငါးထောင်လောက် သုံးပစ်လိုက်ရပေမဲ့ အင်မတန် အကျိုးထူးတဲ့ ရလာဒ် ကြောင့် သူမ ပျော်ရွှင် နေတယ်။ အိမ်အပြန် လမ်းမှာ သတင်းစာ ဝင်ဝယ်လိုက်သေးတယ်။ သတင်းစာ ဝယ်ပြီး ပြန်မထွက်ခင် သူမက စာရေးကို မေးလိုက်တယ်။
“ဒို့ တစ်ခု မေးရင် မောင်လေး စိတ် မဆိုးဘူးထင်တယ်၊ ဒို့ အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ခန့်မှန်းနိုင်လား” “၃၂နှစ်လောက်ပေါ့” စာရေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ “အိုး၊ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒို့က ဒီနေ့ပဲ ၅၀ ပြည့်တာ” အမျိုးသမီးက ပျော်ရွှင်စွာပြောလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူမက မက်ဂ်ဒေါ်နယ်ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားပြီး ကောင်တာက ကောင်မလေးကို အဲ့ဒီ မေးခွန်း ပြန် မေးလိုက်ပြန်တယ်။
ခုတော့ အမျိုးသမီးက သူမကိုယ် သူမ တော်တော်လေး ကျေနပ် နေပြီ။ သူမ လမ်းဆက် လျှောက်လာရင်း ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင် တွေ့တော့ ဝင်ပြီး ပူရှိန်းသကြားလုံး တစ်ချို့ ဝင်ဝယ်လိုက် ပြန်တယ်။ ကောင်တာကို ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း သူမမေးချင် လွန်းလှတဲ့ မေးခွန်းကို မေးလိုက် ပြန်တယ်။ “အိုး၊ ၃၀လို့ ထင်တယ်” ကောင်တာစာရေးက ဖြေလိုက်တယ်။ “ဒို့အသက်က ၅၀ကွ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
အမျိုးသမီးကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက် ပြန်တယ်။သူမ အိမ်ပြန်ဖို့ ဘတ်စ်ကား စောင့်နေတုန်း သူမဘေးမှာ ကားစောင့်နေတဲ့အဖိုးအို တစ်ဦးကို တွေ့တော့ အဲ့ဒီ မေးခွန်းကိုပဲ ထပ်ပြီး မေးလိုက်ပြန်တယ်။ အဖိုးအိုက ပြောတယ်။
“ဒီမှာ အမျိုးသမီး။ ငါ့အသက်က ၇၈နှစ် ရှိနေပြီ။အမြင်အာရုံတွေလဲ မွဲနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ငါ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိန်းမတွေရဲ့အသက်ကို တိတိကျကျ ပြောနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့စကားက သိပ်ပြီး စည်းကျော် နေမလားပဲ။ မမြင်ရမေမဲ့ မင်းရဲ့ ဘော်လီ အင်္ကျီအောက်ကို ငါ လက်နှိုက် စမ်းသပ်လို့ ရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အသက်ကို တိတိကျကျ၊ သေချာပေါက်ကို ပြောနိုင်မှာပါ” အမျိုးသမီးက ခဏတိတ်သွားပေမဲ့ ဒီအဖိုးကြီးရဲ့ အဖြေကို ကြားချင်တဲ့ စိတ်ကအနိုင်ယူ သွားခဲ့တယ်။သူမ သိချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတဲ့ အဆုံး အဖိုးကြီးကို စူအောင့်အောင့်နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ “ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်းပြီလေ။ စမ်းကြည့်ပေါ့”
အဖိုးအိုက အမျိုးသမီးရဲ့ရင်သားနှစ်ဖက်ကို စမ်းသပ်လိုက်၊ ဆုပ်နယ်လိုက်၊ပွတ်သပ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတယ်။ အချိန် နည်းနည်းကြာတော့ အမျိုးသမီးက စိတ်မရှည်တော့ဘူး။
“ကောင်းပြီ အမျိုးသမီး၊ မင်းရဲ့ အသက်က ၅၀ မဟုတလ်ား” အမျိုးသမီးက အံ့ဩလွန်းလို့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ကြားရတာ မယုံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။ “တကယ်ကို မယုံနိုင်စရာပဲ၊ ရှင် ဘယ်လိုလုပ် အတိအကျကို ပြောနိုင်တာလဲ”
“ပြောပြရင် မင်းငါ့ကို စိတ်မဆိုးရဘူး၊ ဘာမှလဲမလုပ်ရဘူး” အဖိုးအိုက ကတိတောင်းတယ်။ “ကောင်းပါပြီ၊ ကတိပေးပါတယ်” အမျိုးသမီးက ကတိပေးလိုက်တယ်။ “မက်ဂ်ဒေါ်နယ် ဆိုင်မှာတုန်းက ငါ မင်းအနောက်မှာ တန်းစီနေတာလေ”
သူလချိုင်တာ ရုရှားအမျိုးသမီးတယောက်ဟာ ကနေဒါလူကြီးလူကောင်းတယေက်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး မြို့တော် တိုရန်တို မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခဲ့ကြသတဲ့။
အမျိုးသမီးလေးက အင်္ဂလိပ်လို နဲနဲပါးပါးတောင် မပြောတတ်ပေမယ့် သူ့ယောက်င်္ကျားနဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံ ရမယ်ဆိုတောတော့ အတော်ကလေး ကြိုးစားထားရှာတယ်၊ လင်မယားချင်းဆိုတော့ အဲဒီအချိန်အထိ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့။ ခု…တကယ့် ပြဿနာက ဈေးဆိုင်မှာဈေးဝယ်တဲ့တုန်းဖြစ်တာ..။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို….။
တနေ့တော့… သားငါးရောင်းတဲ့ကုန်စုံဆိုင်သွားပြီး ကြက်ပေါင် ၀ယ်ချင်တာကစတော့တာပါပဲ…။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ကိုရောက်ပြီး…သူလိုချင်တာကို ဆိုင်ရှင်နားလည်အောင် ဘယ်လိုစပြောရမယ်မှန်း မသိလေတော့ ရမ်းသမ်းမှန်းပြီး ကြက်မ လို့ ကတော်..ကတော်… နဲ့ အသံပြုလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ စကပ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ မပြီး ပေါင်ကို လှန်ပြလိုက်တယ်။ဒီတော့ သူရဲ့ပေါင်တံ
အဖွေးသားတွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဆိုင်ရှင်က သူဘာကိုဆိုလိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီး သူ့ကို ကြက်ပေါင် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
နောက်တနေ့ကျတော့ သူလိုချင်တာက ကြက်ရင်အုံဝယ်ချင်ပြန်သတဲ့..ဒါပေမယ့် ဒါကို ဆိုင်ရှင်သိအောင်ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်ရော…။
ဒါနဲ့ … ဆိုင်ရှင်ရှေ့ကိုသွားပြီး သူမရဲ့ အင်္ကျံကြယ်သီး ကိုဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုပြလိုက်တယ် ဆိယုင်ပဲ ဆိုင်ရှင်က ကြက်ရင်အုံတွေ ထုတ်ပေးလိုက်ပြန်ရောပေါ့။
ဒါနဲ့ တတိယမြောက်နေ့မှာ သူမ ခမျာ အကြပ်တွေ့နေတယ်၊သူလိုချင်တာကို ဆိုင်ရှင်သဘောက်ပေါက်အောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှင်းပြရမလဲ ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လေ။ဒါနဲ့ ပဲနောက်ဆုံးအကြံရပြီး… သူ့ယောင်္ကျားကိုခေါ်သွားလိုက်တော့တယ်။
မင်းဘာတွေ လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာလဲ? သူ့ယောက်င်္ကျားက အင်္ဂလိပ်လိုမေးလိုက်တယ်။ ဇနီးသည်က သူတတ်ထားတဲ့အတိုင်း တခွန်းတည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မပြောနဲ့…” သူဝယ်ချင်တာက ဝက်အူချောင်း တဲ့။
မွေးနေ လ့က်ဆောင် လူချောလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ ရည်းစားအသစ်စက်စက်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။
သူ့အသဲလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်အောင်…ဘာလက်ဆောင်ပေး ရင်ကောင်းမလဲလို့ အသည်းအသန်စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ သူ့အချစ်လည်း ပေါ်လွင်ရမယ်။ သူမအတွက်လည်း အသုံးဝင်ရမယ်။ အမှတ်တရနဲ့ ဂန္ဓ၀င်လည်း မြောက်ရမယ်ပေါ့။ ဈေးကြီးတာလည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံးအကောင်းစား လက်အိတ်ဖြူဖြူလေးတစ်စုံဝယ်ဖို့ကြည်နူးစွာဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းမအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုသွားမှာမို့ ချစ်သူရဲ့ညီမလေးလည်းပါလာတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် လှလှလေးပါပဲ။ ဆိုင်ရောက်တော့ သူကလက်အိတ်အဖြူလေးတစ်စုံ ၀ယ်တယ်။ ချစ်သူ့ညီမလေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ (ပင်တီ) တစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ထုပ်ပိုးပေးတဲ့အရောင်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူ့ညီမကလက်အိတ်ရသွားတယ်။ သူလည်း ဖွင့်စစ်ဆေးမနေဘဲ (ပင်တီ) ပါဆယ်ထုတ်နဲ့ စာတစ်စောင်ရေးပြီးစာတိုက်ကပို့လိုက်တယ်။
စာကတော့… အသဲလေး ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ် ညနေခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်သတိပြုမိလို့ပဲ။ ကိုယ်ကနှိပ်ကြယ်သီးပါတာ ၀ယ်ဦးမလို့ပဲ။ မင့်ညီမက ချွတ်လို့စွတ်လို့လွယ်အောင် အဲ့ဒါကိုပဲ ၀ယ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ ဟုတ်တယ်…သူစွပ်ပြချွတ်ပြတယ်…လှလိုက်တာလေ။ စွတ်ရချွတ်ရတာလည်း လွယ်တယ်။ အရောင်းစာရေးမကတောင် သူမလည်းဒါပဲ ၀တ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြချွတ်ပြသေးတယ်။ အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူမက အပေအစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်းအာမခံတယ်လေ။ ဒီတစ်ခါ ကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာ မြင်ချင်တယ်။ တွေ့ရင်တော့လား အထပ်ထပ်အခါခါနမ်းပစ်မိမှာပဲ။ သောကြာနေ့မှာ ကိုယ်နမ်းဖို့ ဆက်ဆက်ဝတ်ထားနော်…နော်… အသဲလေးရဲ့ ကိုအောင်
ရယ်စရာ သြဇီ ဗန်းစကား
သြစတေးလျမှာ အချို့ ဗန်းစကား အသုံးအနှုံးများမှာ တုက်ိရိုက် အဓိပ္ပါယ် ပြန်ကြည့်လျှင် အလွန်ပင် ရီစရာ ကောင်းသည့် ဟာသများကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူတို့ ပြောလေ့ရှိကြသည့် ဗန်းစကား ရီစရာ အချို့တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြသည်။ ဗိုက်အလွန်ဆာနေသည့် အချိန်တွင် -
“I could eat the horse and chase the jockey.” ရေငတ်နေသည့် အချိန်တွင် -
“I’m dry asadead dingo’s donger.” အပေါ့သွားချင်သည့် အချိန်တွင် “Gonna drain me dragon.”
အလေးသွားချင်သည့် အချိန်တွင် “I gotta back one out.”
အော့အန်ချင်သည့် အချိန်တွင် “Gotta go Ralph”
သူ့ အမှု ထောင်ထဲသို့ ထောင်သားအသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းလာသောအခါ လူဟောင်းများက မေးကြသည်။ “ဘာအမှုနဲ့လဲ ဘယ်လောက်ကျလဲ” “ငါးခိုးဖမ်းမှုနဲ့ ထောင်ဆယ်နှစ်” ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ထိုအခါ ထောင်သားဟောင်းများက အံ့သြတကြီး မေးကြလေသည်။ “ငါးခိုးဖမ်းတာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် ထောင်ဆယ်နှစ်ကျရတာလဲ” “ကျွန်တော်ဗျာ..ငါးကန်ထဲကို လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးပစ်လိုက်တယ်။ ငါးသုံးကောင်နဲ့ ရေငုပ်သမားရှစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်လေ”
လုပပ်ုံ ကောင်းဘွိုင်တစ်ယောက် အရက်ဘားအတွင်းသို့ ဒေါသတကြီးဝင်လာကမေးလေသည်။ “အပြင်မှာ ချည်ထားတဲ့ ကျုပ်မြင်းကို ဘယ်ကောင်ဆေးသုတ်သွားတာလဲ” ဘယ်သူမှပြန်မဖြေ။ ထိုအခါ ကောင်းဘွိုင်က “ဘယ်ကောင်သုတ်သွားတာလဲလို့ မေးနေတယ်နော်၊ နောက် ငါးမိနစ်မှ အဖြေမသိရင်
ကျုပ်အဖေလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကလုပ်သလိုကျုပ်လုပ်လိုက်မှာနော်” ဟု ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်လေသည်။ ထိုအခါ ဘားထဲမှ လူများအားလုံးကြောက်ရွံ့ပြီး မြင်းပေါ်မှဆေးများပြောင်စင်သွားအောင် အားလုံးဝိုင်းဆေးပေးလိုက်သည်။ ထိုအထဲမှ လူတစ်ဦးက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့် ကောင်းဘွိုင်ကို မရဲတရဲ သွားမေးလေသည်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က ခင်ဗျားအဖေက ဘယ်လလိုပ်လိုက်သလဲဟင်” ကောင်းဘွိုင်ပြန်ဖြေလိုက်သောစကားက
မှားပုံ ဆရာဝန် - ကိုမြမောင် ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဆေး ခင်ဗျားအတွက် အထောက်အကူပြုရဲ့လား။ ကိုမြမောင် - ပြုပါသော်ကောလား ဆရာရယ်။ အဲဒီဆေးကို ကျွန်တော့်ဦးလေး မှားသောက်မိလို့ သူ့ဆီက အမွေတွေ အကုန်ရလိုက်တယ်လေ။
မျှော်လင်ချ့က် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ပြောင်းလဲသွားကောင်းသည်ဟု မျှော်လင့်၍ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြသည်။ တကယ်တန်းတွင် မပြောင်းလဲခဲ့ကြပေ။
သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ညတွင် မိန်းမက အိမ်ပြန်မအိပ်ဘဲ မနက်တွင်မှ ပြန်လာပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်တွင်
အိပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူက မယုံကြည်သဖြင့် မိန်းမ၏ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၁၀ ယောက်ကို ဖုံးဆက်မေးသည်။ အားလုံးက သူမ မလာခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ တစ်ညတွင် ယောက်ျားပြန်မအိပ်ဘဲ နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်မှ ပြန်လာပြီး တူညီသောဆင်ခြေကိုပေးသည်။ မိန်းမက မယုံသဖြင့် သူငယ်ချင်း ၁၀ ယောက်ကို ဖုံးဆက်မေးရာ ၈ ယောက်က သူ့တို့အိမ်တွင်
လာအိပ်သွားကြောင်း အသီးသီးဖြေပြီး ၂ ယောက်က သူမ၏ ယောက်ျားမှာ အိပ်ခန်းထဲတွင်ပင် ရှိသေးကြောင်း ဖြေကြလေသည်။
" မျှော်လင်တ့စ်ကြီး " အမျိုးသမီးတစ်ဦး နို့ စို့ ကလေးငယ်ကို ပိုက်လျှက် မော်စကို မြေအောက်ရထားတစ်စီးပေါ် တက်လာသည်
လွတ်နေသော တစ်နေရာတွင် ၀င်ထိုင်သည် ။ သူမ၏ ဘေးနားတွင် ဂျော်ဂျီယာသား တဦး ထိုင်နေသည် ။ အမျိုးသမီးက ၄င်း၏ သားငယ်ကို ပြော သည် ။
" သားရယ် မေမေ့နို့ ကို စို့ လိုက်ပါကွယ် နော်..." ကလေးငယ်သည် အမေ့နို့ ကို မစို့ လိုသဖြင့် ခေါင်းကို ယမ်းသည် ။
" ချိုချိုလေး စို့ လိုက်ပါသားရယ်..ရော့.."
ဘယ်လို ချော့တိုက်တိုက် ကလေးသည် နို့ ကို မစို့ ချေ ။
" စို့ ပါသားရယ်...နို့ မဟုတ်ရင် ဘေးနားက ဦးဦးကို တိက်ုလိုက်မယ် သိလား.." ပြန်သည် ။
မဆာသည့်အတွက် ကလေးငယ်သည် နို့ ကို မစို့ ချေ ။ အမေဖြစ်သူ ထပ်ချော့ " စို့ လိုက်ပါသားရယ်..သား မစို့ ရင် ဘေးနားက ဦးဦး စို့ လိုက်လိမ့်မယ်ကွဲ့"
မိခင်ဖြစ်သူ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားကြိုးစား မအောင်မြင်ချေ ။
" သားက လိမ်မာပါတယ်ကွယ်....ကိုင်း..စို့ လိုက်..နို့ မဟုတ်ရင် ဟို ဦးဦးကို တိုက်လိုက်မယ်နော်.."
ဂျော်ဂျီယာသား သည်းမခံနိုင်တော့... " ဒီမှာ...ခင်ဗျား...တစ်ခုခုကို အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ.. ကျနော် ဆင်းရမဲ့ သုံးခုတောင် ကျော်သွားပြီဗျ "
" တစ်ရက်ကို ဆယ်ပေါင် " လူကြီးတစ်ယောက် ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ရင်း အားကစားရုံကြီးတစ်ခုမှာ ကြော်ငြာထားသည့်
ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ " တရက်မှာ ဆယ်ငါးမိနစ် နဲ့ဆယ်ပေါင်ကျသွားစေရမည်..အာမခံသည်..
ပေါင်ချိန်မကျပါက ငွေပြန်အမ်းမည် " ကျသင့်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၀
လူကြီး အားကစားရုံထဲဝင်သွားပြီး အသေအချာ စုံစမ်းသည် ။ စိတ်တိုင်းကျသည်နှင့်
ပေးပြီး ခန်းမကျယ်ကြီးထဲသို့ဝင်ရသည် ။ အ၀တ်အစားများ အားလုံး ချွတ်ထားခဲ့ရသည် ။ ခန်းမကျယ်ကြီးထဲ ၄င်း ၀င်သွားသည်နှင့်
တံခါးပိတ်သွားပြီး အခြားတစ်ဖက် တံခါးတစ်ခုမှ ၀တ်လစ်စလစ် မိန်းမချောလေး တစ်ဦး ၀င်လာသည် ။ စပီကာမှ အသံထွက် လာသည်။
" ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း မိန်းခလေးကို မိအောင်ဖမ်းနိုင်ရင် လူကြီးမင်း ကြိုက်တာ
လူကြီး ပျော်သွားသည် ။ ဒေါ်လာ ၂၀ တည်းနှင့် ကောင်မလေး တစ်ယောက်လဲ
ကောင်မလေးရှိရာဖက်သို့ပြေးသည် ။ ကောင်မလေး ကြောက်ရွံ့ ဟန် ဖြင့် ပြေးသည် ။ နောက်မှ လိုက်သည်..၊ မိလုမိခင် နှင့် လွတ်သွား
သည်ချည်းဖြစ်သည် ။ တစ်နေရာ အရောက်တွင် ကောင်မလေး ချောင်ပိတ်မိသွားသည် ။ ကိုယ်လုံးလေးကို သိုင်းဖက်ပြီး နမ်းရန် ပြင်သည်။
စပီကာမှ အသံထွက် လာသည် ။
" ကလင် ကလင် ကလင်...ဆယ့်ငါးမိနစ် ပြည့်သွားပါပြီ ခင်ဗျာ.." လူကြီး မကျေမနပ်နှင့် ကောင်မလေးကို လွှတ်ပေးလိုက်ရသည် ။ အပြင်ကို
တကယ်ပင် ဆယ်ပေါင်တိတိ ၀ိတ်လျော့သွားကြောင်း တွေ့ ရသည် ။ ဒါပေမဲ့ စားရခါနီးမှ လွတ်သွားသည့် ကောင်မလေးကို စိတ်ကစွဲနေ သည် ။
နောက်နေ့ ထပ်သွားသည် ။ အ၀တ်အစားများချွတ်ပြီး အခန်းကျယ်ကြီးထဲသို့ 
တက်ကြွစွာ ၀င်သွားသည် ။ အခြား
တစ်ဖက် တံခါးပေါက်ပွင့်သွားသည် ။ အရပ် ၆ ပေ ကျော် နီဂရိုးကြီး တစ်ယောက် အ၀တ်အစားမပါပဲ အခန်းတွင်း လှမ်းဝင်လာသည် ။
ပေါင်လယ်ကို ကျော်နေသည့် ဒုတ်ကြီးကလည်း ဘယ် ညာ ရမ်းနေသည် ။ စပီကာ မှ အသံထွက်လာသည်။ " ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း သူ့ လက်က လွတ်အောင်ပြေးပါ မဟုတ်ရင်တော့
သူ့ စိတ်ကြိုက် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် "
စကားသံဆုံးသည်နှင့် နီဂရိုးကြီး လိုက်သည် ။ လူကြီး ဒီတစ်ခါတော့ လွတ်အောင် ပြေးသည် ။ ကြာတော့ ဟောဟဲလိုက်ပြီး မောလာသည်။
တစ်နေရာတွင် မိသွားသည် ။ နီဂရိုးကြီးက သူ့ ကို တစ်ဖက်သို့ဆွဲလှည့်လိုက်သည် .. " ကလင် ကလင် ကလင် .." သက်ပြင်းကို အနိုင်နိုင်ချပြီး အခန်းအပြင်ဘက်ကို
ထွက်သည် ။ ပေါင်ချိန် ကြည့်သည်။ ၁၅ ပေါင် ၀ိတ်လျော့သွားသည် ။
၁၈ နှစ်ေတာင်ရြှိ ပီ တနေ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြတယ် မ။ ရှင်ကတခါလာလဲ အမေ့ဘို့အမေအတွက်ဒါပဲအမြဲပြောတယ်ကျွှန်မကိုရောသတိရသေးရဲ့လား။ ကျား။ ဟအမေကအသက်ကြီးပြီးလေဒါကြောင့်ငါကပိုပြီးဂရုစိုက်ရမယ်ကွ၊ တို့ဘုရားတောင်မှမိခင်အတွက်နို့တလုံးဘိုးတောင်ကျေမဆပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်ငါ့မိဘမသေခင်မှာငါသောက်စို့ခဲ့တဲ့နို့ဘိုးအကြွေးကို တတ်နိုင်သမျှပြန်ဆပ်နေတာလေမင်းပြစ်ထားလို့လား။ မ။ အော်....ရှင်ကတော်တော်နို့ဘိုးအကြွေးဆပ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ ကျား။ အေးဆပ်ချင်တာပေါ့အဲဒါဘာဖြစ်လဲ။
မ။ ဒါဆိကျွှုန်မမေးမယ်။ ကျား။ မေး.....မေးကြိုက်တာမေး မ။ ရှင်နဲ့ကျွှန်မနဲ့ပေါင်းလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ ကျား။ မင်းရူးနေပြီလား ၁၈နှစ်ရှိလေ။ မ။ အဲဒါကြောင့်ရှင့်ကိုပြောတာပေါ့..ရှင့်ကိုရှင့်အမေကချစ်လွန်းလို့ဆိုပြီးနို့တိုက်ရင်၃နှစ်ပေါ့...... ကျမဆိုယင်ရှင့်ကိုချစ်လွန်းလို့...ခု ၁၈ နှစ်တောင်ရှိနေပြီ.....ငတုံးရဲ့....
ဟာသ ဆရာမတယောက်.ကလေးများကိုအနည်းကိန်းနှင့်အများကိန်း.ကွဲပြားပုံကိုရှင်းပြနေသည်။ “ မိန်းမတယောက်ဟာ..ပြတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်နေတယ်ဆဘိုာခေါ်မလဲကွယ် “ “ အနည်းကိန်းပါဆရာမ“ “ကဲ..ဒါဆို မိန်းမ၃ ယောက် ဆိုရင်ရော “ ဂျွန်နီလေးကထဖြေသည် “ ဇိမ်ခန်းပါဆရာမ“ အမျိုးသမီး- လေးစားသဖြင့် ကျမယောက်ျားကျမကိုလိမ်နေပါတယ်..သူ့ ကိုကွာရှင်းခွင့်ပေးပါတရားသူကြီးရှင့်။ တရားသူကြီး- သေချာစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါ..ဒါပေါ့သေး၂ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး..သူမင်းကိုလိမ်နေတယ်ဆတိုာ.သက်သေရိလှား“ အမျိုးသမီး- သိပ်ရှိတာပေါ့ ..ဟိုတနေ့ ကဘရော့ဒ်ဝေးလမ်းမပေါ်မှာ သူ့ ကိုမိန်းမတယောက်နဲ့ပြဇာတ်ရထုဲံဝင်သွားတာကျမတွေ့ လကိုတယ် “ တရားသူကြီး- အဲဒိမိန်းမကိုသိပါသလား“ အမျိုးသမီး- ကျမသူ မျ့က်နှာကိုသေချာမတွေ လို့က်လို မ့သိပါဘူးရှင့်“ တရားသုကြီး- ဒါဆိလုည်းသေချာအောင်..ဘာလို့ သူတို့ နောက်ကိုနောက်ယောင်ခံပြီးလိက်ုမသွားလဲ“ အမျိုးသမီး- ကျမလိက်ုချင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒိပြဇာတ်ကကျမကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ ပါ။
လက်ထပ်မည့်ရက်မတိုင်ခင်တညတွင် ဂျယ်ရီ သည်သူ၏ဘာမှမသိသေးသောသတို့ သမီးကိုခေါ်ပြီး “တကယ်တော့မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား လက်ထပ်တာဘာမှ ရှက်စရာမရိဘှူး..ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး..ဒီညမင်းကို ငါ..ငါ့ညီဝမ်းကွဲ အယ်လဗ်င်..ရဲ့ ..မင်္ဂလာဦးညအတွေ့ အကြုံကို..လက်တွေ့ ပြမယ်.. ပြီးရင်..ဗန်ဆန်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ...နောက်ဆုံးကျရင်..အန်ကယ်လ်ဂျွန်ရဲ အ့တွေ့ အကြုံကလို ည်းပြမယ်...“ နောက်တနေ့ တွင်သူ ဆီ့သို့ သတို့ သမီးဆီမသှံကြိုးစာရောက်လာသည်.။ “ ရှင့်ရဲ့ လက်တွေ့ သင်ခန်းစာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျမ..အန်ကယ်လ်ဂျွန်နဲ့ လိုက်ပြေးသွားပါပြီ“
ွှအတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ လူ့ငယ်တယောက်ဟာ သူ့ ကောင်မလေးအတွက် ကြက်တူရွေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးသတဲ့။ ပထမညနေမှာကောင်မလေးဟာရေချိုးဖို့ အဝတ် လဲပါတယ်..ကြက်တူရွေးကထအော်တယ် .. “ လှတယ်..လှတယ်..ပင်တီပန်းရောင်လေး “ “ တော်လကိုတဲ့ငှက်..ပင်တီအရောင်ကိုတောင်ခွဲနိုင်တယ် “ လို့ ကောင်မလေးကတွေးလိုက်တယ်။ နောက်တနေ့ ကျတော့လည်း ပထမနေ က့လိုပဲ ရေချိုးဖို့ ပြင်ပါတယ်..ပင်တကီတော့အရောင်ပြောင်းသွားတယ်..ကြက်တေူရွးကအော်ပြန်ပါတယ်.. “ လှတယ်..လှတယ်..ပင်တီအပြာလေး“ “ ငါတော့တကယ် ကို့အသိဥာဏ်ရတှိဲငှ့က်ကိုရထားတာပဲ..“ တခါနောက်တနေ ကျ့ပြန်တော့လည်းအရင်နေ့ တွေကလိုပဲရေချိုးဖို့ ပြင်ပြန်တယ်...ဒါပေမယ့်ဒီတခါတော့ ပင်တီတောင်မပါတော့ဘူး..။ ကြက်တူရွေးကထအော်တယ်. “လှတယ်..လှတယ်..ဓါးရောပြင်ပြီးပြီလား “
လူငယ်တယောက်ဆရာဝန်ထံသွားတွေ့ သည်။ “ ဆရာ..ညတိုင်းကျနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအိပ်မက်တွေမက်တယ်.. ကောင်မလေးလှလှလေးတွေအရောင်စုံ..အရွယ်စုံ..ကျနော့်နားမှာပေါ်လာပြီး ကျနော့်ကိုဝိုင်းနမ်းဖို့ ကြိုးစားကြတယ်“ “အဲဒီတော့.....“ “ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာ..ကျနော့် လက်တွေကသူတို့ ကတွိုန်းချည်းထုတ်နေတယ်“ “ အဲဒီတော့ ငါကမင်းကိဘုာလုပ်ပေးရမှာလဲ“ ဆရာဝန်ကစိတ်မရှည်သလိုမေးသည် “ကျနော့် လက်တွေကိုချိုးပေးပါဆရာ“
ဆယ်နစ်ှကျော်အရွယက်လေးမလေးတယောက် ချောင်းဆိုးနေသဖြင့်သူမ၏ မိခင်ကဆရာဝန်ထံခေါ်သွားသည်။ ဆရာဝန်ကစမ်းသပ်ရန် ရင်ဘတ်ကြယ်သီးကိုဖြုတ်ခိုင်းသည်၊.ထို့ နောက်နားကျပ်ကို ရင်ဘတ်ပေါ တ်ွင်ထောက်ပြီး.. “ အသက်ပြင်းပြင်းရှူ “ ကောင်မလေးက အလွန်ဂုဏ်ယူသောမျက်နှာဖြင့် ပြန်ပြောလိုက်တာက “ ဟုတက်ဲ့...ဒါတောင် ကျမ ခုမှ ၁၃ နှစ်ပဲရှိသေးတာ “ ( ဒါလေးကရုတတ်ရက်ဆို နားမလည် မှာစိုးလို့hints လေးပေးပါမယ်.. အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာကို “ big breaths “ လို့ ရေးထားပါတယ်..ကောင်မလေးဘယ်လိုနားကြားလွဲ ပြီး အဲဒီလိုပြန်ပြောလဲဆတိုာတော့ ကိုယဟ့်ာကို စဉ်းစားကြပေါ့)
စားသုံးသူတယောက်နစ်ှအတန်ကြာမရောက်ဖြစ်တဲ့ စားနေ ကျစားသောက်ဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တော့ဆိုင်မှာရိတှဲဝ့န်ထမ်းမိန်းကလေးအားလုံး .ဝတ်စုံအသစ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ ရတယ်.. နာမည်တွေကလည်းဘယ်ဘက် အိတ်ကပ်အပေါ်မှာ ရိုက်ထားသေးတယ်...ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတယောက်ကမေးတယ် .. “ ဦး.. ဒီဝတ်စုံပုံစံ လှတယ်မလှား..“ “ အင်း..မဆိုးပါဘူး..ဒါထက် ညာဘက်တလုံးနာမည်ကရော ဘယ်လိုတဲ့လဲ “ ( သေချာစဉ်းစားကြည်ြ့ ကနော် )
" ဖြစ် လာ မှာ ပါ " ဘားကောင်တာသို့" ဂျိမ်းစ်ဘွန်း " လျှောက်လာသည် ။ ကုလားထိုင်လွတ်တစ်ခုတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး မာတီနီ မှာသောက်သည် ။ ဘေးကုလားထိုင်တွင် မိန်းမချောလေး
သူမကို " ဂျိမ်းစ်ဘွန်း " လုံးဝ ဂရုမစိုက် ၊ လက်တွင်ပတ်ထားသော မိမိ၏
နာရိကိုသာ မကြာခဏ ကြည့်
နေသည် ။ အမျိုးသမီး စိတ်ဝင်စားလာပြီး မေးသည် ။
" ဘာလဲ..အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ နောက်ကျနေတာလား "
" မဟုတ်ပါဘူး..နောက်ဆုံးပေါ် နာရီကို ကြည့်မ၀ ဖြစ်နေလို့ ပါ " " တစ်ခြားနာရီတွေထက် ဘာများ သာလို လဲ့ရှင့်"
" အများကြီးသာတာပေါ့..သူ့ မှာ ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ ဥာဏ်ပါတယ်...ဥပမာ.. ခင်ဗျား..ဘရာစီယာ ၀တ်မထားဘူးလို့နာရီက သတင်းပေးနေတယ်.." အမျိုးသမီးက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ပြီးပြောသည် ။
" ရှင် နာရီမှားနေပြီ. ကျမမှာ ဘရာစီယာ ပါတယ်ရှင့်.." " ဂျိမ်းစ်ဘွန်း " နာရီကို သေသေချာချာ
ပြန်ကြည့်ပြီး ပြောသည် ။
" နာရီက နာရီဝက် တိတိ မြန်နေတာကိုး "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မနက် ငါးနာရီထိုးမှ အိမ်ပြန်ရောက်လာသည် ။ မိန်းမက ခါးထောက်ပြီး မေးသည် ။ "
ရှင် ဘယ်ကို သွားနေတာလဲ.."
ရှင်သာ ကျမနဲ့မညားရင် ရှင် ဘယ်ကို သွား သွား နေမှာလဲဟင် လို့ 
မင်း ခဏခဏ မေးဖူးတယ် မဟုတ်လား
အေး အခု ငါ အဲ့ဒီက ပြန်လာတာဟေ့.."
မိတ် ဆွေ "
ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရှေ့ တွင်ဖြစ်သည် ။ မကြာမီ လက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပမည် ဖြစ်သည် ။ သတို့ သားအနီးသို့သတို့ သမီး၏ အမေ ကပ်လာပြီး ပြောသည် ။ "
ဒီအချိန်ကစပြီး အန်တီဟာ မင်းရဲ့ယောက်ခမ သာမကပဲ မိတ်ဆွေလဲ
ကပ်လာပြီး ပြောသည် ။ "
နောက် တစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင် သတို့ သမီး ၏ အဖေ သတို့ သား အနား ဒီလို မိတ်ဆွေမျိုးကို ရထားပြီးရင် ရန်သူ ရှာစရာ မလိုတော့ဘူး.."
" အိကု တိုး ပ ဂေး ဆန် "
ကိုဘမောင်သည် ရုံးသူရုံးသားများရှေ့ တွင် မိမိ၏ ဇနီးအကြောင်း ကြွားဝါနေသည် ။ ပြန်လာတယ် ဆိုရင်ပဲ
" ကျနော့်မိန်းမဟာ တကယ့်ကို တော်တဲ့ မိန်းမပဲဗျ..ကျနော် ရုံးက အခန်းအ၀င်ဝမှာ ဖိနတ်နဲ့ အိမ်နေ အ၀တ်အစားကို
ချထားပေးတယ်..ပက်လက်ကလုားထိုင်
ဘေးက စားပွဲပေါ်မှာ သတင်းစာကို တင်ပေးထားတယ်...ညစာလည်း
ပြီးသား....အဲ..ပြီးတော့ မီးဖိုပေါ်မှာ..ရေနွေးအိုးကို တယ်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်
" ရေနွေးအိုးက ဘာအတွက်လဲ ဗျ.."
" သြော်..ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေကို ကျနော်..ရေအေးနဲ့မဆေးတတ်ဘူး ဆိုတာ သူသိတယ်လေ.."
" ၂ နာ ရီ ပဲ ချစ် မယ် " မေရီက မိမိ ၏ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြနေသည် ။
" တစ်ည အိမ်မှာ အိုင် တစ်ယောက်ထဲ အိပ်နေတယ်..တစ်ချိန်မှာ ရှပ် ..ရှပ်..
ရှပ် ရှပ် နဲ့ 
အသံကြားလို့လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်...
တစ်ယောက်ပါလား. ခိုးမလို့လာတာနဲ့တူတယ်..ရုပ်ကလေးက
သနားကမားနဲ့ပြီးတော့
ဗလ ကလည်း ကောင်းပါ့.....ဒါနဲ့သူ ကို့ အိုင်က ပြောလိုက်တယ်.. နောက် ၂ နာရီ ကြာမှ အိမက်ထွကသ်ွား...."
" အ သေ စော သူ များ "
ဘ၀တစ်ပါးသိ်ု့ပြောင်းသွားကြသော ယောင်္ကျားကြီးနှစ်ယောက် အခြားဘုံ တစ်ခုတွင် ဆုံမိကြပြီး စကားပြောဖြစ်ကြသည် ။
" ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့သေတာလဲဗျ.." " အဆုတ် အအေးမိလို့ ..ခင်ဗျားက ကော.." " ကျနော်က အံ့သြလွန်းပြီး သေတာ.." " ဘယ်လို .ဘယ်လို အံ့သြလွန်းလို
" ဒီလိုဗျာ..ကျနော် လူ့ ပြည်မှာရှိတုန်းက တစ်နေ့အလုပ်ကနေ အချိန်မတော်
အဲ့ဒီ့မှာ ကျုပ်တို့ လင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးကို အတွင်းကနေ ဂျက်ချထားတာ
တွေ့ ရတယ်.. အထဲက လင်ငယ်နဲ့မြူးနေပြီလို့ 
ခိုးခိုးခစ်ခစ် နဲ့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ ရယ်သံတွေ ကြားနေရတယ်..ဒီကောင်မ ကျုပ် တပ်အပ်တွက်လိုက်တယ်...ဒါနဲ့အိပ်ခန်းတံခါးကို တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ ထုတယ်..
ပွင့်သွားတယ်..လား လား ကောင်မက ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ
မတွေ့ ရဘူး ဘာရမလဲ.. တစ်အိမ်လုံးကို
ဗီရို..အိမ်သာ..ရေချိုးခန်း မီးဖိုချောင် အနှံ့လိက်ုရှာတယ် လုံးဝ မတွေ
့ဘူး...စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ မိန်းမကို အမျိုးမျိုး ငြင်းတယ်..ကျုပ် အကြီးအကျယ် အံ့သြ နှလုံးသွေးကြောပြတ်
ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီး နင့် လင်ငယ် ဘယ်မှာလဲ လို့ မေးတယ်..ဒင်းကလည်း စိတ်မကျေနပ်လို့ထပ်ရှာပြန်တယ်..မတွေ့ ဘူး.. ဒီကောင့်ကို မတွေ့ တော့ ကျုပ် သွားတယ်..စိတ်လှု ပ်ရှားပြီး ရင်ခုန်သံ တဒုန်းဒုန်း မြည်လာတယ် ခဏနေတော့ ပြီး ရှော သွားတာပဲဗျာ..."
" ခင်ဗျား တော်တော်ညံ့တဲ့လူဗျာ...ရေခဲသစ်တာ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့လား..အဲ့ဒါဆို ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက်
စလုံး အသက်ဆက်ရှင်နေမှာပေါ့..တောက်...အသေ စောရလေခြင်းဗျာ...."
" လာနေတုန်းပဲ " ကိုချူချာကို ၀ိုင်းမေးကြသည် ။
" ဒီလောကမှာ..ဘယ်လူမျိုးဟာ အထုံဆုံး အထိုင်းဆုံးလဲ " " အာမေးနီးယန်း တွေပေါ့ " " ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
" ကျုပ်ရဲ့အိမ်ရှေ့ တည့်တည့်က အိမ်မှာ အာမေးနီးယားသားတစ်ယောက် ကျုပ်မိန်းမဆီကို မလာနဲ လို့ကျုပ် သူ့ ကို နေ့ တိုင်း ပြောတယ် .. ဒါပေမဲ့ သူ နားမလည်ဘူး.."
သဘောကျတယ်။ တစ်ခါက လှေတစ်စင်း မြုပ်လုနီးနီးမှာ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး လာကယ်ခဲ့တယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်က ကြိုးတစ်ချောင်းကို ပစ်ချပြီးကယ်တော့ ယောကျာ်း၁ဝယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က အဲဒီကြိုးမှာ ပါသွားခဲ့တယ်။
ကြိုးမှာချိတ်နေတဲ့ လူ၁၁ယောက်ကို ရဟတ်ယာဉ်က မနိုင်ဘဲဖြစ်နေလို့ လူတစ်ယောက် လက်လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ယောကျာ်းတွေက လက်မလွှတ်ချင်ကြဘူး။ က "အားလုံးအတွက် ကျွန်မ အနစ်နာခံပါ့မယ်။
ကိုယ့်ယောက်ျားအတွက်၊ ကိုယ်ရင်သွေးတွေအတွက် ပေးဆပ်တာကို မမျှော်ကိုးဘဲ အမြဲစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံနေရတဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေအတွက် ဒါမျိုးက ရိုးနေပါပြီ.. "လို့ အော်ပြောလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးလဲ
ပြောပြီးရော ယောကျာ်းတွေ အားလုံး လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြတော့တယ်..
Company ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက မန်နေဂျာရာထူးအတွက် လျှောက်ထားသူသုံးဦးအား လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းလျက် ရှိရာ ထိုရာထူးအတွက် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတစ်ဦး၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့်
စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးတို့အား မေးခွန်းမေးရာ ပိုင်ရှင်။ ။ ၂နဲ့၂ပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလဲ... အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ။ ။ ကိန်းဂဏန်းများတွက်ချက်နိုင်သည့်ပေတံကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ကာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး ၄ရပါတယ်ဆရာ။ ပိုင်ရှင်။ ။ ခင်ဗျားကရော ၂နဲ့၂ပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလည်းပြောပါဦး.... ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ။ ။ အိတ်ထဲမှဂဏန်းပေါင်းစက်ကိုထုတ်ကာခလုတ်များနှိပ်ပြီးနောက် ၄ရပါတယ်ဆရာ ပိုင်ရှင်။ ။ ကဲ.... ခင်ဗျားလည်းပြောပါဦး..... စာရင်းအင်းသမား။ ။ ပိုင်ရှင်၏မျက်နှာကိုအတန်ကြာစူးစိုက်ကြည့်ရှုပြီးမှ ဘယ်လောက်ဖြစ်စေချင်လည်း ပြောပါဆရာ
ဒါကြောင့်ပါ ဆရာဝန်က လူနာတယောက်ကို စမ်းသပ် မေးမြန်းတာပါ။
ဆရာဝန်..“ခင်ဗျားရဲ့ နားတဖက်ကို ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ” လူနာ......“ကျွန်တော် မကြားရတော့ဘူးပေါ့”
ဆရာဝန်..“ အင်း....ဒါဟာ ပုံမှန်စိတ်ပဲ....နောက်နားတဖက်ကို ထပ်ဖြတ်လိုက် မယ် ဆိုရင်ကော...”
လူနာ........“ ကျွန်တော် မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့” ဆရာဝန်....“ ဟာ...ဘာဖြစ်လို့လဲ”
လူနာ........“ ကျွန်တော့် မျက်မှန် ပြုတ်ကျသွားမှာပေါ.
နမူနာ စုတ်ပြတ် နုံချာနေသော အ၀တ်အစားဝတ် လူတစ်ဦးသည် လမ်းသွားလမ်းလာတို့ထံမှ ပိုက်ဆံတောင်းနေသည်။ သားနားခန့်ညားစွာ ၀တ်ထားသောလူတစ်ဦး လမ်းလျှောက်လာသည်။ “နောင်ကြီးရယ်၊ စားစရာမရှိလို့ပါ၊ စေတနာရှိသမျှ မ,စပါခင်ဗျာ" “မပေးနိုင်ဘူး၊ မင်းကို ငါးဒေါ်လာလောက် ပေးကြည့်၊ ချက်ချင်းအရက်သောက်ပစ်မှာ မဟုတ်လား”
“ကျွန်တော်အရက်မသောက်တတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ” “မသောက်လည်း မင်း…ဖဲကစားပစ်မှာပေါ့” “ကျွန်တော် အလောင်းအစား မလုပ်တတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ” “အို…ဒါ မဟုတ်လည်း မကောင်းတဲ့မိန်းမဆီ မင်းသွားမှာပေါ့” “ဒါလည်းဝါသနာ မပါပါဘူးခင်ဗျာ...” လူကြီးသည် သူတောင်းစားကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး…… “OK…မင်းကိုငါ ငါးဒေါ်လာပေးမယ်… ဒါပေမဲ့ မင်းငါအိမ်ကို ခဏလိုက်ခဲ့ရမယ် ဘာအပျော်အပါးမှမလိုက်စားတဲ့ယောက်ျားတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ငါ့မိန်းမကိုမြင်အောင်ပြချင်လို့
" ၀ါသနာကို မစွန် န့ငို ဘ်ူး " ငါးမျှားဖော် မိတ်ဆွေရှေ့ တွင် အီဗန် ငြီးတွားနေသည် ။ " ကျနော် အကြပ်ရိုက်နေပြီ...ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး...သုံးကြိမ်ရှိပြီ..
ငါးမျှားရာက ပြန်လာတိုင်း ကုတင်အောက်မှာ မိန်းမရဲ့ လင်ငယ် ပုန်းနေတာကို
" ဘာလဲ..ငါးမျှားမထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား " " ဟာ...မျှားတာတော့ မျှားရမှာပေါ့..ကုတင်ခြေထောက်တွေ ဖြတ်ပစ်ရရင် စဉ်းစားနေတာ..."
" အကြောင်း သုံးခု " အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူမ၏ သူငယ်ချင်းမကို ပြောပြနေသည် ။
" အိုင် ဒီလူ့ ကို လက်မထပ်တာ အကြောင်း
သုံးခုရှိတယ်........ပထမအချက်က သူ ရတဲ့လခလေးနဲ့ 
အိုင့်လို မိန်းမမျိုးကို သူ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားနိုင်မှာ
လူကုံတန်စာရင်းထဲ မပါဘူး.. သုံးအချက်..သူနဲ့အိုင်နဲ့သိကျွမ်းပြီး
မကြာခင်မှာပဲ ဘယ်ကိုမှန်း မသိ
ထွက်သွားတယ်..အခုထိ ပြန်ကို ပေါ်မလာတော့ဘူး "
" လွယ် လိကု တာ " " သူငယ်ချင်း..မင်းရဲ့ကွာရှင်းခွင့် က ပြီးသွားပြီလား " လျှောက်လွှာကို
" အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်. လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးသွားပြီကွ..ကွာရှင်းခွင့် ကမ်းပေးလိုက်ရုံ ရှိသေးတယ် တရားသူကြီးက ချက်ချင်း
" ဘာလဲ..မင်းရဲ့ မိန်းမ မပါဘဲနဲ့ ကို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တာလား.." " ဟုတ်တယ်..ငါလည်းပထမတော့ အတော် အံ့သြမိတယ်...နောက်မှသိရတာက တရားသူကြီးက သူ့ ရဲ့ပထမ ယောင်္ကျားကိုး..."
" တော်လေးဝ ၀င် မယား " ဗေဒင်ဆရာက သန်းကြွယ်သူဌေး ၏ ဇနီးကို ပြောလိုက်သည် ။
" သူဌေးကတော်ရဲ့ခင်ပွန်းဟာ မကြာမီ ကာလအတွင်း အသေဆိုးနဲ့သေရမဲ့ကိန်း ရှိနေပါတယ်..."
" အဲ့ဒီအခါမှာ သူ့ ကို ကျမ သတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှ မထင်ဘူး မဟုတ်လားဟင် "
" ကံ ဆိုး သူ " အဖေလုပ်သူ ပန်းကန်များ ဆေးကြောနေစဉ် ပီတာလေး မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်လာသည် ။
" ဖေဖေ...မယား နှစ်ယောက်နဲ့လူဆိုတာ ဘယ်လို လူမျိုးလဲ ဟင်.." " လောကမှာ ကံအဆိုးဆုံးလူပေါ့သားရယ်...ဖေဖေ့ထက် နှစ်ဆပိုပြီး
ပန်းကန်ဆေးရတယ်ကွဲ့"
" မိန်း မ ယူ မည် " ရဲဘော် နှစ်ယောက် မိမိတို ၏့တပ်မှူးအား ခွင့်တောင်းနေသည် ။
" ဗိုလ်မှူး..ကျနော် မိန်းမ ယူမှာမို့ခွင့်ရက် ၂၀ ပေးပါခင်ဗျ " " ကျနော်လည်း မိန်းမ ယူမှာမို့ခွင့်ရက် ၂၅ ရက် ပေးပါခင်ဗျ " " မင်းက ဘာဖြစ်လို့၅ ရက် ပိုယူရတာလဲကွ.."
" ကျနော်က ယူမယ့် မိန်းမကို ရှာရဦးမှာ မို့ လို့ ပါ.."
" မ တား ပါ ဘူး " " သမီးကို အဖေ ပြောစရာ ရှိတယ်...သမီးနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် လူငယ်တစ်ယောက်ကို အဖေ တွေ့ ထားပြီသမီး......သူက သမီးအပေါ်လည်း ချစ်ရှာတယ်.."
" အဟင့် ..အဟင့်....သမီး ယောင်္ကျားယူရင် အမေ့ကို ပစ်သွားရမှာပေါ့..." " ဒါများကွယ်...သမီးနဲ့တစ်ပါတည်း အမေ့ကို ခေါ်သွားပေ့ါ.. အဖေ မတားပါဘူး...."
" အလုပအ်ကိုင် မကောင်းဘူး.." လုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးသည် အလုပ်အကိုင် မကောင်းသဖြင့် ငြီးတွားနေကြသည် ။ " ကျနော့် အလုပ်မှာ ခန့် ထားတဲ့လူအင်အားကို ထက်ဝက် လျှော့လိုက်ရတယ်..." " ခင်ဗျားကလည်း ပြောရော့မယ်..လူအင်အားဆိုလို့ခင်ဗျားရုံးမှာ အတွင်းရေးမှူး မ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတာမဟုတ်လား..."
" ဟုတ်တယ်လေ....ဒါပေမဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ် ဒေါ်မေရီ အစား အသက် ၂၀ အရွယ် မရှပ်တေးလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်ရပါပကော..." " မြန် မြန် လေး " လက်ခဏာ ကြည့်နေသော အမျိုးသမီးသည် ဗေဒင်ဆရာအား အလောတကြီး
" ကျမ ရဲ့လက်ခဏာမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး ရုပ်ချောတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ 
ပေါင်းဖက်ရမယ် ဆိုတာ ပြောစမ်းပါ.."
မြင်ရတာမှန်ရင် သူ့ ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာ အမြန်ဆုံး ကြည့်ပြီး
" ငွေ ရ တု " လင်မယား လက်ထပ်သည့် ၂၅ နှစ်မြောက် ငွေရတု နေ့ တွင် ယောင်္ကျားလုပ်သူက မိန်းမကို ပြောသည် ။
" တကယ်ဆိုရင် ..မင်းနဲ့ငါနဲ့ညားတာဟာ မှားယွင်းမှု တစ်ခုရဲ့ရလာဒ်ပဲ.." " ဘယ်လို...ဘယ်လို ..ပြောစမ်းပါဦး.."
" သြော်..ဒီလိုလေ...အဲ့ဒီနေ့ က ငါ လေချွန်တာက မင်းကို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘူး တက်စီ သမားကို ခေါ်တာကွ.."
" အ ညွှန်း အ တိငုး "
" ဒေါက်တာရယ်..ကျနော်နဲ့ကျနော့်မိန်းမဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လုံးဝကို နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ တကျက်ကျက်ပဲ..ဘာလုပ်ရမလဲ..အကြံပေးပါဦး "
" အင်အားတွေ များလွန်းလို့စကားများကြတာပါ..တစ်နေ့ ကို ၁၀ မိုင်အနည်းဆုံး လမ်းလျှောက်ဗျာ
နောက် နှစ်ပတ်ကြာရင် ကျနော့်ဆီ ဖုန်းဆက်ပါ..အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီး
ဆိုတာ ညွှန်ကြားပါ့မယ် " နှစ် ပါတ်အကြာတွင် ...
" ဟယ်လို..ဒေါက်တာလား...ကျနော်ပါ....ကျေးဇူးပဲ ဒေါက်တာရယ်..သိပ်ကို ဟန်ကျတာပဲ.."
" ခင်ဗျား မိန်းမနဲ့ ရော ရန်ဖြစ်သေးလား.." " ဘယ် ရန်ဖြစ်တော့မလဲခင်ဗျ...ခုဆိုရင် သူ နဲ့မိုင် ၁၄၀ အကွာမှာ ကျနော်
" သိ မယ် ထင် လို့" မေရီသည် လမ်းတစ်ဖက်အိမ်မှ အမည်မသိ လူငယ်ကို အလွန်
စိတ်ဆိုးနေသည် ။ အကြောင်းမူ ။ တစ်နံနက်ခင်း
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် မိမိအား အမြဲတမ်း ကြည့်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည် တွင် မေရီသည် ထို လူငယ်အား ဖုန်းလှမ်းဆက်သည် ။
" ဟယ်လို .ကျမက ဒီဖက်လမ်း အိမ်က အမျိုးသမီးပါ..ကျမရဲ့ ခြေအိပ်ကို ဘယ်မှာ ထားမိသလဲ
မသိဘူး.. အဲ့ဒါ ရှင်များ မြင်ရင် ပြောပြပါလား..."
" အိမ် ထောင် ဦး စီး " " ဟေ့..အီဗန်..မင်းအိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးက
" ဒါဖြင့်..မင်းဘာဖြစ်လို့အိမ်ရှေ့လှေကားအောက်မှာ အိပ်ရတာလဲ..." " အိမ်မှာ ငါက အရှင်သခင်ပဲ.. အိပ်ချင်တဲ့နေရာ ..အိပ်မှာပေါ့ကွ.."
" ကြိုက် တာ သာ ပြော " " မိန်းမရေ..တို့ အိမ်မှာ ဒီနေ့ညစာလာစားဖို့မိတ်ဆွေ တစ်ချို့ ကို ငါ ဖိတ်လာခဲ့တယ်
အဲ့ဒါ မင်း...တစ်ခုခု ချက်ပေးပါဦးကွ.." " ရပါတယ်...ဒါနဲ့သူတို့နောက်တစ်ခါ ထပ်လာချင်အောင်
ဘယ်တော့မှ မလာရဲအောင် ချက်ပေးရမှာလား..ရှင် ကြိုက်တာသာ ပြော "
" အ ရင် က လို မ ဟုတ် တော့ ပါ " အိမ်ထောင်သက် ၅၀ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော လင်မယားနှစ်ယောက် ဆိုဖာပေါ် ထိုင်နေသည် ။ မိန်းမက စပြောသည် ။
" အချိန်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ကျမအပေါ် ရှင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးလည်း
တုန်းကဆိုရင် ..ကျမအနား ရှင် ကပ်ထိုင်နေကျ.. အခုတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲ
ထိုင်တော့တယ်..." ရွေ့ ထိုင်သည် ။
" ဒါက ပြုပြင်ရတာ လွယ်ပါတယ်..." ဟု ယောင်္ကျားက ပြောပြီး မိန်းမအနား " အရင်တုန်းကဆိုရင် ရှင်က ကျမကို ဖက်နေကျ.." " ဒီလို မဟုတ်လား..." ဟု ပြောပြီး ယောင်္ကျားက မိန်းမကို ဖက်သည် ။
" မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား... အရင်တုန်းကဆိုရင်..ရှင်က ကျမလည်တံကို
ဖွဖွလေး နမ်းပြီး နားရွက်ကို
မနာအောင်..သွားနဲ့ကိုကတ်ယ်လေ...." ထိုအခါ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နေရာမှ ထပြီး ဘေးခန်းသို့ ထွက်သွားရန် ပြင်သည် ။
" ရှင် ဘယ်သွားမလို့ လဲ..."
": သွားတုတွေ သွားတပ်မလို့ ပါကွာ..အခုပဲ ပြန်လာခဲ့မယ်..."
" အရှက် အကြောက် ကြီးလို့" " မေမေ...ဖေဖေဟာ လူပျိုဘ၀တုန်းက အင်မတန် အရှက်အကြောက် ကြီးတဲ့လူဆိုတာ
အဟုတ်ပဲလား ဟင်.." " သိတ်ဟတ်ုတာပေါ့..သားရယ်...နို့ မဟုတ်ရင် သားရဲ့ အသက်ဟာ ဒီ့ထက် လောက် ပိုကြီးနေမှာ ကလား..."
" ယောင်္ကျားတို့စေတနာ " သားငါးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံ အပြည့်ပါသည့် ဈေးခြင်းတောင်းကို မနိုင်မနင်း ဆွဲကာ
ပြန်ရောက်လာသည့် ဇနီးသည်ကို ကြည့်ကာ ယောင်္ကျားက ပြောသည် ။ " မင်း အသက်အရွယ်နဲ့ဒီလို အလေးအပင်တွေ ဆွဲနေတာကို ငါ မကြည့်ရက်ဘူး ဒီနေ့ ကစပြီး ရပ်လိုက်ဖို့လိုပြီ...."
" ရှင်က ဘယ်လို အကြံပေးချင်လို့ လဲ..." " ဈေးကို နှစ်ခေါက်သွား.."
" စံပြ မိန်း မ " " ရုပ်ချော သဘောကောင်းရုံတင် မကဘူး..အင်မတန်လည်း ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို မင်း လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆို.."
" မင်းကို ဘယ်သူ ပြောလဲ.."
" မင်း မိန်းမ "
" မရှဘိူး " " ယောင်္ကျား မရှိဘူးလား..."
" ဟင့်အင်း...နှစ်ခါ ရှိပြီ မရှိတာ..." " အားနာစရာကြီး " ( အနောက်နိုင်ငံများတွင် တစ်ယောက်ယောက် ကွယ်လွန်လျှင် ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုးများက
အသုဘ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပါရန် မိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ကြားရသည့်
ထုံးစံရှိသည် ။ ) မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" ဖီးလစ်...ဒေးဗစ်ရဲ့ ဇနီး အသုဘကို ဘာဖြစ်လို့ရှင် လိုက်မပို့ တာလဲ.. ရှင့်ကို သူ ဖိတ်တယ် မဟုတလ်ား..."
" သွားသင့်တာတော့ မှန်ပါရဲ့ ..ဒါပေမဲ့ ငါ မျက်နှာပူတယ်ကွာ.." " ဘာဖြစ်လို့ လဲ.."
" သြော် .....အရင်မိန်းမ ဆုံးပြီးနောက် သူယူတဲ့ ဒုတိယမိန်းမ ဆုံးပြန်တာ မဟုတ်လား..
ဒါပါနဲ့ ဆို သူ င့ါကို ဖိတတ်ာ နှစ်ခါ ရှိပြီ ငါက သူ့ ကို တစ်ခါမှ
" လမ်း ပြ " ကိုဘမောင် ရေချိန်လွန်နေပြီ ။ လျှာလေး အာလေးနှင့် တစ်ယောက်ကို မေးသည် ။
" ကျနော့်အိမ်ကို ဘယ်လို သွားရတယ်ဆိုတာ လမ်း..လမ်းပြပေးနိုင်မလား ဟင် " " ပြပေးနိုင်တယ်.."
" ကျနော်..ကျနော်.ဘယ်မှာ နေ ..နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ်သိ
ကျနော်တို့အိမ်..အိမ်နီးချင်းတွေ လားဟင် " " ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း....ကျုပ် ရှင့်မိန်းမ.."
" ကြိမ်း မောင်း ခြင်း " လူမှန်သူမှန်း မသိအောင် မူးပြီး ၁၈ ထပ်ရှိ တိုက်ခန်းသို့ပင်ပန်းစွာ ပြန်ရောက်လာသော ယောင်္ကျားသည်
မိန်းမ ဖြစ်သူကို လင်ငယ်နှင့်အတူ တွေ့ ရာ လင်ငယ်ကိုဆွဲထုတ်ပြိး ၁၈
ထပ်ပေါ်က ပစ်ချလိုက်သည် ။ နှုတ်
မှ လည်း ကြိမ်းမောင်းသည် ။
" နောက်တစ်ခါ မင်းကို တွေ့ ရင်တော့လား..အသေသတ်ပစ်မယ်ဟေ့.."
" ဘယ် မှာ ပြော တာ လဲ "
တစ်ရုံးတည်းလုပ်သူ မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။ ရယ်လိုက်တာ
" မနေ့ က ခင်ဗျားမိန်းမ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ..ဟာသတစ်ပုဒ် ပြောပြတယ်..ကျုပ်ဖြင့် ရယ်လိုက်တာ..ကံကောင်းလို့ကုတင်ပေါ်က ပြုတ်မကျတယ်...."
" စိုး ရိမ် မိ သည် " အသစ်ရောက်လာသော ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် မိမိ ၏ ရုံးခန်းထဲမှ ဆိုဖာကို
အပြင်သို့ထုတ်ခိုင်းလိုက်သည် ။
မကြာမီ အတွင်းရေးမှူး မ ရောက်လာပြီး အထိတ်တလန့်မေးသည် ။
" အစ်ကိုကြီး...ကျမကို အင်အားလျှော့တဲ့ အထဲ ထည့်လိုက်ပြီလား ဟင် " " ပေါက်တတ်ကရ...မင်းကို ဘယ်သူ ပြောလဲ.."
" ဒါဖြင့်ရင် ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖာကို အပြင်ထုတ်လိုက်ရတာလဲ..ရှင့်"
" အ မှန် ကို ပြော မှ ပေါ့ "
ချူချာ သူဌေးနှစ်ယောက် လန်ဒန်မြို့ ရှိ မြင်းပြိုင်ကွင်းသို့ ရောက်ရှိ နေကြသည် ။
ကြည့်ပြီး လောင်းကစားချင်စိတ် ပေါ်လာသည် ။ သို့ နှင့် နှစ်ယောက်သား
" မြင်းတွေအကြောင်း ငါတော့ မသိဘူး..ဘယ်မြင်းဘက်က လောင်းရမှန်းလဲ
မသိဘူး.. ဒီလို လုပ်ရအောင်
မင်း မိန်းမရတာ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိပြီလဲ..."
" သုံးနှစ် "
" ငါက လေးနှစ် ...၊ လေးနဲ့ သုံးပေါင်း ခုနှစ်...၊ နံပါတ် ၇ ကို ထိုးရအောင်..."
နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံ စုပေါင်းပြီး ၇ ဘက်မှ လောင်းလိုက်သည် ။ နံပါတ် ၇
မြင်းရှေ့ ဆုံးမှ ပန်းဝင် ။
လာသည် ။ အရင်းရော အမြတ်ပါ ပေါင်းပြီး ဆက်လောင်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်
" ဒီတစ်ခေါက် ဒီလိုလုပ်မယ်..မင်းမှာ ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ.." " နှစ်ယောက် "
" အေး..ငါ့မှာ တစ်ယောက် ၊ တစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း သုံး ၊ နံပါတ် သုံးကို ထိုးမယ်..." လောင်းလိုက်ကြသည် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နံပါတ် သုံး ရှေ့ ဆုံးက
ပန်းဝင်လာသည် ။ ပိုက်ဆံတွေ ပိုက်ပြီး
အကြီးအကျယ် ပျော်နေကြသည် ။ ကံကောင်းနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက်
အိပ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေပါ ပေါင်းပြီး
အောလိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။
" ဒီတစ်ခါ ဒီလိုလုပ်မယ်....မင်း ယောင်္ကျားတို့ ရဲ့တာဝန်ကို တစ်ညမှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ထမ်းဆောင်နိုင်သလဲ.." " လေးကြိမ် "
" ငါလဲ လေးကြိမ်ပဲ..နံပါတ် ၈ ဘက်က လောင်းလိုက်ရအောင်.."
ရှိသမျှ ပိုက်ဆံအားလုံးကို ပုံအော လိုက်ကြသည် ။ နံပါတ် ၂ မြင်း ရှေ့ ဆုံးက
ပန်းဝင်လာသည် ။ ကြိတ်မနိုင်
ခဲမရသံဖြင့် တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး အမှန်ကို ပြောလိုက်ရင် အရမ်း " ထော "
" အိမ် က ဟင်း ကို မ မေ ပ့ါ နဲ့" လင်မယားစုံတွဲ ပန်းခြံထဲ လမ်းလျောက်နေကြသည် ။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည်
ဖြတ်လျှောက်သွားသော ကျမတတ် ငမ်း သည် ။
အမျိုးသမီးငယ်များကို တစ်ချိန်လုံး လိုက်ကြည့်သည် ။ သွားရေတမြားမြား သည်းမခံနိုင်တော့သည့် အဆုံး မိန်းမဖြစ်သူက ပြောသည် ။ " ကြည့်ထား...သွားရေယိုထား...ဒါပေမဲ့ ညစာကျတော့ အိမ်မှာပဲ ရှင်
" စက် ဘီး စီး တဲ့ ကို ကို " မိမိ ၏ ကလေးကို အမည်ပေး မှတ်ပုံတင်ရန် ရွာသူမတစ်ယောက်သည် ကလေးကိုပိုက်လျှက် ။
မြို့ နယ် ဖွားသေ မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားသည် ။ မှတ်ပုံတင် စာရေးမ က မေးသည် " ကလေးရဲ့အဖေ နာမည် ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲ.." " ကိုဘမောင် ပါ.."
ကလေးအဖေ၏ နာမည်ကို ရေးသွင်းရင်း စာရေးမ ပြောသည် ။
ငါးယောက်ကို မြင်းကျိုးရွာက အဖေ ကိုဘမောင် ကိုဘမောင်ပဲ
" စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလိုက်တာ...လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်အတွင်းမှာ..ကလေး မှတ်ပုံတင် ပေးတယ်...၊ ရွာသာယာ ရွာက အဖေ ကိုဘမောင် ..၊ ကိုဘမောင် ၊ ပေါင်ကိုင်းရွာက အဖေ ကိုဘမောင်.. ၊ နောက်တစ်ယောက်က ကိုင်းကုန်းရွာက
ဘုတ်ရွာ က အဖေ
၊ ဒီတစ်ခါလည်း ကလေးအဖေ
အခု ကိုဘမောင်ရဲ့သားတစ်ယောက် ရောက်လာပြန်ပြီ.." ကလေး အမေက ပြန်ပြောသည် ။
" ဘာမှ မဆန်းပါဘူး...သူ့ ဆီမှာ စက်ဘီး ရှိတယ် ရှင့်.."..
" လက် ဆောင် " ရုရှားတိုးရစ် တစ်ယောက် ပြင်သစ်မှ မပြန်မီ မိန်းမအတွက် ဘရာစီယာ တစ်ထည်ဝယ်ရန်
ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ သို့ သော် နံပါတ်ကို မသိချေ..။ အရောင်းစာရေးမက
သူ့ ကို ကူညီ
ဘို့ကြိုးစားသည် ။ " ရှင့် ဇနီးရဲ့ရင်သားဟာ..ဖရဲသီးနဲ့တူသလား " " ဟင့်အင်း.."
" ဒါမှ မဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီး အလုံးကြီးလို အရွယ်လား " " ဟင့် အင်း "
" ပန်းသီးလို လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလားရှင့် " " ဟင့် အင်း "
" ဒါဆို ဘာနဲ့တူသလဲရှင့် "
" စပန်နီယယ် ခွေး ရဲ့နားရွက်လိုပဲဗျ " ( စပန်နီယယ် ခွေး...နားရွက်တွဲကျပြီး အမွှေးရှည်သော ခွေး "
" က လဲ့ စား " အဖိုးကြီး နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ ကြရတော့မယ်
" ခင်ဗျားရော ကျနော်ရော..အသက်တွေထောက်လာကြပြီ....မကြာခင် ဘ၀ကူး မသေခင် ခင်ဗျားကို ကျနော် ၀န်ခံစရာတွေ ရှိပါတယ်....မှတ်မိလား....၁၉၄၀
ထောင်ကထွက် ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်..၊ အဲ
ပြီး ခင်ဗျား စက်ရုံမှာ အလုပ်ရတယ်..မကြာဘူး..ခင်ဗျားကို အလုပ်က ဒီတုန်းကလဲ တရားခံက ကျနော်ပဲ...ကျနော့်ကို ခွင်လွှတ်ပါဗျာ..."
" ကျနော်လဲပဲ ခင်ဗျားကို ၀န်ခံစရာ ရှိတယ်...ခင်ဗျားရဲ့သား ပီတာ ကို သိတယ် မဟုတ်လား.."
ရွာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက် မြို့ ပေါ်ကအိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ဖော်သွားလုပ်တယ်။
တနေ့တော့ အိမ်ရှင်လင်မယားအိပ်ခန်းကို ရှင်းပေးရင်းနဲ့ သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးတစ်ကိုတွေ့ရော။ အဲ့ဒါနဲ့သူက အိမ်ရှေ့ခန်းကို ကောက်ယူသွားပြီး အသေအချာထိုင်ကြည့်နေတယ်။ ဒါကို အလုပ်က ပြန်လာတဲ့ အိမ်ရှင်မက တွေ့သွားပြီးတော့...
"နင့်တို့ရွာမှာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ မလုပ်ကြဘူးလား" လို့ဒေါသထွက်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ အဲ့တော့ အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးက...
"လုပ်တော့လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရေခွံကျွတ်အောင်လုပ်တာမျိုးတော့ မတွေ့ ဖူးဘူး" ...တဲ့ ========================== အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ စတိုးဆိုင် ထဲဝင်ပြီး အောက်ပါပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်။ သွားပွတ်တံ ၁ ချောင်း ဆပ်ပြာ ၁ ခဲ နွားနို့ ၁ ဘူး ဆီ ၁ ဘူး
အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်း ၂ ထုပ် ငွေရှင်းကောင်တာက အရောင်းစာရေးမက ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဈေးဝယ်သူအမျိုးသမီး မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး "ရှင်ဟာ အပျိုကြီး ဖြစ်ရမယ်" လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဈေးဝယ်သူအမျိုးသမီးက "ရှင်က ကျွန်မ၀ယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့"လို့မေးတော့ "မဟုတ်ဘူး... ရှင့်လို့သောက်ရုပ်ဆိုးကြီးကို ဘယ်သူကယူမှာလဲ" .... တဲ့။ " ပြေး ကြ စို့" အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ကားထဲတွင် ရက်အင်ဒီးယန်းများ မျက်နှာကို
တွေ့ ရသဖြင့် ချာတိတ် က သူ့ အဖေကို မေးသည် ။
" ဖေဖေ...ဘာဖြစ်လို့သူတို့ မျက်နှာကို ဆေးခြယ်ကြတာလဲ ဟင်.." " စစ်တိုက်ဖို့ပြင်တာလေ "
တစ်နေ့အမေ့ အခန်းထဲမှ ချာတိတ် ပြေးထွက်လာပြီး အဖေဖြစ်သူကို
" ဖေဖေ...ပြေးကြစို့.. မေမေ စစ်တိုက်ဖို့ပြင်နေပြီ..."
" ယောင်္ကျားဆိတုာ " ရေချိုးခန်းထဲမှ ရေချိုးပြီး ထွက်လာသော မိန်းမက ရေချိုးဝတ်ရုံကို လှပ်ပြပြီး ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို မေးသည် ။
" ဘယ့်နှယ့်လဲ...အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးပါဘူး အိုပေမဲ့ အပျိုလေးအတိုင်းပဲ မဟုတ်လားရှင်.."
" အင်း...မင်းသာ ..ငါ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိမှာပဲ.."
" သက် သေ အ ထောက် အ ထား " ကွာရှင်းခွင့် လာတောင်းသော အမျိုးသမီးကို တရားသူကြီးက မေးသည် ။ " ဘာကြောင့် ခင်ဗျား ယောင်္ကျားနဲ့ကွာရှင်းချင်ရတာလဲ..." " ကျမ ယောင်္ကျား ကျမကို မချစ်တော့လို့ ပါ.."
" ဒါ ..အင်မတန် ပြင်းထန်တဲ့ စွဲချက်ပဲ....ဒါနဲ့ခင်ဗျားမှာ ဘာ သက်သေ အထောက်အထားရှိသလဲ.."
" သိပ်ရှိတာပေါ့ ..ကျမ နောက်ဆုံး မွေးတဲ့ ကလေးဟာ..သူ့ ကလေး
" ကြည့် ချင် ဦး "
" သတင်း ကြားပြီးပြီလား...ကိုဘမောင်တစ်ယောက် ဆေးရုံ ရောက်နေတယ်တဲ့ " " ဆေးရုံ..ဟုတ်လား.....မဖြစ်နိုင်တာပဲ..၊ မနေ့ ကတောင် ကောင်မလေး ချောချော လှလှ တစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ တွေ့ ခဲ့သေးတာပဲ.."
" သောက်စေချင် သောက်ပါ့မယ် " ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ထုံးစံအတိုင်း အရက်မူးပြီး ပြန်လာသည် ။ မိန်းမက ယောင်္ကျား၏ နားရွက်ကို လိမ်ဆွဲပြီး မေးသည်။
" ရှင်...နောက် သောက်ဦးမလား..." ယောင်္ကျား ဘာမှ မပြောပဲ တိတ်တိတ်နေသည် ။ နားရွက်ကို ထပ်လိမ်ဆွဲပြီး
" ရှင့် ကို ကျမ မေးနေတယ်... နောက် သောက်ဦးမလား..ပြောစမ်း.."
ယောင်္ကျားက စိတ်မပါ့တပါဟန်ဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ပြန်ဖြေသည် ။ " အဲ့ဒီလိုဆို ...ငှဲ ကွ့ာ...
" မြင် တိငုး မ ထင် နဲ့" " ကိုဘမောင်ပါလား...ခင်ဗျား နေမကောင်းဘူးထင်တယ်..." " ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျား ဒီလို ထင်ရတာလဲဗျ "
" မနေ့ က ဆေးဆိုင်ကနေ ခင်ဗျား ထွက်လာတာကို မြင်လိုက်လို့ ပါ.." " တော်တော် ဟုတ်တဲ့လူပဲ.....ခင်ဗျားမိန်းမ အိပ်ခန်းထဲက ကျုပ် ထွက်လာရင် ခင်ဗျား..ဘယ်လို ထင်မလဲဗျ..ဟင်.
" လူ ညံ့ တွေ မ ၀င် ရ "
လိပ်ပြာမလုံသော သိ ယောင်္ကျား လူသည်
လူ့ ပြည်မှာတုန်းက မကောင်းမှုအချို့ ကို လုပ်ခဲ့မိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူတစ်ယောက် နတ်ပြည်သို့ရောက်လာသည် ။ နတ်ပြည်သို့အ၀င်တံခါးတွင် ကြားမင်း ထိုင်နေသည် ။ လူ့ ဘ၀တုန်းက အိမ်ထောင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့ကြသူ များကို သိကြားမင်းက စိစစ်ပြီး ၀င်ခွင်ပေးသည် ။ ဒါကို မြင်သော စောစောက တံခါးအနားသို့ကပ်သွားသည် ။ သိကြားမင်းက မေးသည် ။
" ခင်ဗျား...အရင်က မိန်းမ ရှိခဲ့လို့ လား..."
" မိန်းမ နှစ်ခါတောင် ရခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျ.." ၄င်းက ၀မ်းသာအားရ ဖြေသည် ။
ထိုစကားကို ကြားသောအခါ တံခါးကို ဂျောင်း ကနဲ မြည်အောင် ပိတ်လိုက်ပြီး
ပြောသည် ။ " ဒီအခန်းထဲကို ကံမကောင်းတဲ့ သူတွေကိုပဲ ၀င်ခွင့်ပေးတယ်..
အသိဥာဏ်နည်းတဲ့ သူတွေကို ၀င်ခွင့် မပေးဘူး...သွားတော့..."
" မေး ကြည့် တာ ပါ " နံနက်စောစောတွင် မေရီ သည် အိမ်ထဲမှ ထွက်ပြီး ဘေးအိမ်အားလုံး ကြားအောင်
" ဘာဆိုင်လို့နင့်ယောင်္ကျား ငါ့ဆီ ရောက်လာရမှာလဲ.." " အင်နာ...ဒေးဗစ် နင့်ဆီမှာလား.."
" နင့် ဒေးဗစ်ကို ငါက ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဟဲ့ " " မာတီနာ...ဒေးဗစ် နင့်ဆီမှာလား.."
" မဆီမဆိုင်တော်...ငါ့ဆီမှာ နင့်ယောင်္ကျား ရှိနေတယ်လို့ဘာလို့ထင်ရတာလဲ ဟဲ့.." " မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေဆီ သွားဦးမယ်ဆိုပြီး မနေ့ က သူထွက်သွားတယ်..
" ဘာလဲ...ငါတို့ အားလုံးကို မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလို့နင် စွပ်စွဲတာပေါ့ လေ.." " အောင်မလေး..ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ....မေးတောင် မမေးရတော့ဘူးလား လို့"
" တစ် ယောက် တစ် မျိုး " စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံသို့စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ရောက်လာသည် ။ အဖွဲ့ ဝင်
ဆေးရုံအုပ်ကို မေးသည် ။
" ဒီ လူနာက ဘာဖြစ်လို့ပန်းစီးကို ကိုင်ထားရတာလဲ.." " သူ့ ချစ်သူ ချိန်းထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်မလာလို့ ..."
" ဟို လူနာကရော ဘာဖြစ်လို့နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဆောင့်နေရတာလဲ.." " စောစောက အမျိုးသမီးကို သူ လက်ထပ်လကိုတယ်လေ..."
" မ စော် ကား နဲ့" ညအချိန် လမ်းထောင့်တစ်နေရာတွင်..အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်ကို လူဆိုးက ဓါးနှင့်ထောက်ပြီး ပြောသည် ။
" ပိုက်ဆံပါသလား " " ဘယ်လောက် လိုချင်လို့ လဲ.."
" အ၀တ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်စမ်း " " ရှင်ကော.."
" ကောက် နုတ် ချက် "
ဆေးကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အား ဆရာဝန်ကြီး ပို့ ချသည့် လက်ချာထဲမှ " တပည့်တို့ ..ဒီနေ့ ပိုချမဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို မပြောခင်
ဆရာ့ ဘ၀ထဲက အဖြစ်အပျက်တစ်ကို သတိတရ ပြောပြချင်တယ်.. ဆရာ ဆေးကျောင်းသား ဘ၀တုန်းက ဆရာနဲ့ဆရာ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဟာ အင်မတန် ချောတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပြိုင်တူ ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ကြတယ် ..
အမျိုးသမီးဟာ ဆရာ့ သူငယ်ချင်းကို ရွေးသွားတယ်.. ဆရာ့မှာ နှာခေါင်းနဲ့ဆရာ့သူငယ်ချင်းကတော့ နှာခေါင်း အဆုံးခံလိုက်ရတယ်.....ကိုင်း.... ဒီနေ့ပို့ ချမဲ့ အကြောင်းအရာကတော့....
ဆစ်ဖလစ်ပုိး နဲ ၄့င်း၏ အကျိုးဆက်များ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်..."
" ဒီ တစ် သက် မ ကျေ ဘူး " နှစ်ပိသာ အလေးချိန်ရှိသော ကြက်ဥကို ကြက်မက ဥချလိုက်သည် ။ ထိုသတင်းသည် ကြက်မကို
ရွာနီးချုပ်စပ်သို့ပျံ့ နှံ့ သွားသည် ။ သတင်းထောက်များ ရောက်လာပြီး အင်တာဗျူးသည် ။ " ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဥကို ဥနိုင်တာလဲ ခင်ဗျာ.." " လျှို့ ဝှက်ချက် ရှင့်.."
" အနာဂတ်မှာ ဘာကို ရည်ရွယ်ထားပါသလဲ.." " ငါးပိသာ ရှိတဲ့ ဥကို ဥမယ်.."
ထို့ နောက် ကြက်ဖကို သတင်းထောက်များ မေးသည် ။
" အခုလို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖန်တီးလိုက်တာလဲဗျာ..." " လျှို့ ဝှက်ချက်ဗျ "
" အနာဂတ် ရည်ရွယ်ချက်လေး သိပါရစေ " " ငှက်ကုလားအုပ်ကို လက်သီးနဲ့ပိတ်ထိုးမယ်..ဒါဟာ ကျုပ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်ပဲ..
" တတ်လတဲတ်နုငိတ်ဲ့ကြက်ဖ "
နိုင်ငံတော် မွေးမြူရေးခြံ၏ အထွက်နှုန်း သိသိသာသာ ထိုးကျသွားသောအခါ ဖြူဆွတ်နေသော ကြက်ဖကြီး တစ်ကောင်ကို ၀ယ်ကာ ကြက် ဘဲ နှင့်
ကြက်ဖကြီးသည် ကြက်မအားလုံးကို ကြင်ယာအဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်သည် ။ ဘဲမများကိုလည်း ချမ်းသာ
မြင့်တက်လာသည် ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်း အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေသည် ။ တစ်နေ့လမ်းလျှောက်လာရင်း လမ်းပေါ်တွင် ကြက်ဖကြီး မလှုပ်မရှား လဲနေပြီး
ကြက်ဖကြီးသည် မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြောသည် ။
" အ လှ မယ် "
ကိုဘမောင်သည် မိမိ မကြာခင်က လက်ထပ်လိုက်သော ဇနီး အသစ်ကျပ်ချွတ် ဧည့်သည်များကို ကြွားနေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် ဧည့်ခန်းထဲသို့၎င်း၏ ဇနီး
၀င်လာသည် ။ မျက်လုံး
နှစ်လုံးစလုံး ပြူးထွက်နေသည် ။ ပါးစပ်က နားရွက် နားအထိ ရောက်အောင်
ပြဲကားနေသည် ။ နားရွက်
နှစ်ဖက်ကလည်း သာမန်ထက် များစွာ ကြီးနေသည် ။ ဒီကြားထဲ နှာခေါင်းက
အမျိုးသမီးကို ကြည့်ပြီး ဧည့်သည်များ အားလုံး ဘာပြောရမှန်း မသိ
ဖြစ်ကုန်ကြသည် ။ အိမ်ရှင် ကို
ဘမောင်က အထင်သေးသည့် အမူအရာဖြင့် ဧည့်သည်များကို ပြောသည် ။
" ကျနော် သဘောပေါက်လိုက်ပြီ...မိတ်ဆွေတို့ အားလုံး ဘယ်သူမှ ပီကာဆို ကို မကြိုက်ကြပဲကိုး..."
" မ ကြိုက် တာ ချင်း တူ " လူနာ အမျိုးသမီးကို ဆရာဝန်က စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် ။ ပြီးသောအခါ အပြင်တွင် စောင့်နေသော
ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို ဘေးသို့ခေါ်ထုတ်ကာ ပြောသည် ။ " ခင်ဗျား အမျိုးသမီးကို ကျုပ် သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူးဗျာ..."
" ကိ်ု ဧည့် သည် " လူခေါ် ခေါင်းလောင်သံ မြည်သဖြင့် ယောင်္ကျားက တံခါးကို ဖွင့်ပေးသည် ။ မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားသောလူက အသံဆိုးကြီးနှင့် ပြောသည် ။
" ကျုပ်ဟာ နာမည်ကြီး လူသတ်သမား....၊ မိန်းမတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး လည်မြို ညှစ်သတ်တဲ့လူ..."
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး အော်ပြောသည် ။
" မိန်းမရေ.....မင်းဆီကို လာတာဟေ့..."
" ကံ ဆိုး သူ " " ကျုပ်ဟာ မိန်းမရ အင်မတန် ကံဆိုးတယ်..၊ ပထမ မိန်းမက ကျုပ်ကို အိမ်က
မောင်းထုတ်တယ်...ဒုတိယ မိန်းမက ကျုပ်ကိုပစ်ပြီး..လင်ငယ်နောက် လိုက်ပြေး
တယ်...အဲ.....အခု တတိယ မိန်းမကျတော့ ဘယ်လြို ကီးလဲ မသိဘူး...အခုထိ ကျုပ်နဲ့အတူတူ နေတုန်းပဲ....."
" အ ထင် မ လွဲ ပါ နဲ့" ဇနီးဖြစ်သူ မိမိအပေါ် ဖောက်ပြန်သည် ဟု အထင်ရောက်နေသော နီကလိုင်သည် မိမိ ၏ သံသယ မှန်မမှန် စမ်းသပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ တစ်နေ့ 
ခရီးထွက်မည်ဟု ကြေငြာသည် ။ သို့ သော် တစ်ကယ် မသွားဘဲ မိန်းမ မသိအေါင် အိမ်အောက်ထပ်ရှိ ဂိုထောင်တွင် ပုန်းနေသည် ။ ညအချိန်သို့ရောက်လာသည် ။ အပေါ် အိပ်ခန်းမှ နေပြီး အသံများကို ကြားရသည် ။
ခြေထောက်ကို ထောင်လိုက်....ဟုတ်ပြီ.. ဒီဘက် နည်းနည်း ရွေ့ဟုတ်ပြီ... ကိုင်း..စဆွဲမယ်..ဆွဲပြီ...ဆွဲပြီ..."
ခဏ နားထောင်ပြီးနောက် နီကိုလိုင် သည် အိပ်ခန်းသို့အပြေးအလွှား ၀င်လာသည်။
ဇနီးဖြစ်သူ တရှူးရှူးနှင့် အိပ်မောကျနေသည် ။ PIANO မရှိတော့ချေ....။
" မ တ ရား ဘူး " ပီတာလေးကို ကျောင်းသင်ခန်းစာများ လုပ်ရန် အမိန့် ပေးပြီး မိဘနှစ်ပါး အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားသည် ။ တံခါးကိုလည်း အထဲမှ နေပြီး ချက်ချလိုက်ကြသည် ။ ပီတာလေး
သော့ပေါက်မှ နေပြီး ချောင်းကြည့်သည် ။ " ရေ ခဲ တံုး "
" ဟင်း...ငါ့ကျတော့ နှပ်ေချး ကလော်တာတောင် ခွင့်မပြုဘူး "
၀ီစကီခွက်ထဲမှ ရေခဲတုံးကို နီကိုလိုင် ဂရုတစိုက် ကြည့်လိုက်သည် ။ " ရေခဲတုံးမှာ အပေါက်လေးနဲ့တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာပဲ " ၄င်း၏ သူငယ်ချင်းက ပြောသည် ။
" ဘာစိတ်ဝင်စားစရာ ရှိလို့ လဲ...ငါ..ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ညားနေတာ ၁၀ နှစ် ရှိနေပြီ "
" ခေတ် သစ် လူ ငယ် " " ဒီမှာကွယ်.....မင်း ကို ကိုယ်နဲ့ကော်ဖီ လိုက်သောက်ဖို့ဖိတ်ပါရစေလား.." " ရပါတယ်ရှင်...ဒါပေမဲ့ အိပ်ရာထဲမှာ
ဆင်းရဲသားကား ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူက ဆင်ဆာဘုတ် အဖွဲ့ကို အသနားခံလိုက်သည်။ “ဆရာသမားတို့ရယ်၊ ဒီဇာတ်ကားက စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ရုံပဲ ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေအတွက် အ၀တ်အစားဖိုးတောင် အကုန်အကျ မခံနိုင်ဘဲသရုပ်ဆောင်စေခဲ .ရပါတယ်”
ဂုဏယ်ူ သော မွန် မွန် အမျိုး သား ကြီး တစ်ဥိး က သူ့သမီး ဟာ မြန်မာ စကားရော၊ အင်္ဂလိပ် စကားရော ၊ မွန်စကားရော မွတ်နေအောင် တတ်တယ် ဆိုတာ ကို လူကြားသူ ကြား ထဲမှာ မွန်သံ ၀ဲ ၀ဲ နဲ့ ပြော ချ လိုက်ပုံက "" ကျွ န်တော်. သမီး က မြန်မာ လိုးလဲ ရတယ်၊ အင်္ဂလိပ် လိုး လဲ ရတယ်၊ မွန်လိုးတော့ ဖွတ် ဖွတ် ကျေ ဘဲ""
ပသုငိ်းမွေး အိမ်ထောင်ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ယောက် က သူ.ရဲ. small လေး ဆီကို အလည်သွားပါတယ်။ သူ.ရဲ. small လေးကလဲ သူ.ကိုတွေ.တိုင်း Small လေး - “ရှင်.ရဲ. ပသိုင်းမွေး တွေ ကို ရိတ်လိုက်ပါလား ရှင်။ ဒါမှ ရှင်ရဲ. အင်မတန် ခန်.ညားတဲ. ရုပ်ကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားလို.ရမှာ”
အမျိုးသား - “ငါ.အိမ်က အဖွားကြီးက အဲ.ဒီ အမွေးကို ကြိုက်တယ်ဟ။ ငါ.သာ အဲ.ဒီ ပသိုင်းမွေး ကို
ရိတ်လိုက် ရင် ငါကို သတ်မှာ။ ဒါဆို ချစ်လေးနဲ. ဝေးပြီ။” Small လေး - “တိုတို ကလဲ ရိတ်လိုက်ပါ ချို အဟွန်.အဟွန်.”
Small လေး ရဲ. အချွဲကောင်းမူကြောင်. ထိုအမျိုးသားလဲ သူ.ရဲ. ပသိုင်းမွေး ကို ရိတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီည မှာ ပဲ သူက ကျောပေးပြီး အိပ်နေသော သူ.မယားကြီး ခုတင်ပေါ်ကို တိတ်တိတ်လေး တက်ပြီး လဲလိုက်စဉ်။ မယားကြီး က ရုတ်တရက် နိုးလာပြီး လှည်.မကြည်.ပဲ သူ. ရဲ. မျက်နှာ ကို ပွတ်သတ်အာရုံခံလိုက်ခါ
“အမလေး ရှင်မပြန်သေးဘူးလား။ ခဏ နေရင် အိမ်က ဟာကြီး ပြန်လာတော.မှာနော်” အဆင်.မြင်.ဓါးခုတခ်ျက်
စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်သည် ဂျပန် ဆာမူရိုင်: ၃ ယောက် တစ်ဝိုင်းထဲ ထိုင်ပြီ: စားသောက်နေကြသည် ။
စားသောက်နေတုန်း ယင်ကောင် တစ်ကောင်က စားပွဲဝိုင်းပေါ်ဖြတ်ပျံ သွားသည်။ ဆာမူရိုင်: တစ်ရောက်က သူ.ဓါး ကို ဖျတ်ခနဲ ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင် ကိုခုတ်ချလိုက်သည်။ ယင်ကောင် ၂ ပိုင်းပြတ်ပီး ကျလာသည် ။ ဆိုင်ထဲကလူတွေအားလုံး အံ့အားသင့် ကုန်သည်။ (ဆာမူရိုင်: ဆိုတာမျိုးက ဓါးခုတ်အင်မတန်မြန် သကိုး ။ ) အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ယင်ကောင် နောက်တစ်ကောင်က ပျံ လာပြန်သည် ။ ဒုတိယ ဆာမူရိုင်: ကလည်း အားကျမခံ ဓါးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင် ကိုခုတ်ချလိုက် သည်။ ယင်ကောင် ၄ ပိုင်းပြတ်ြပီးကျလာသည် ။ လူတွေလည်းပါးစပ်အဟောင်း သားဖြစ်ကုန်သည်။ ခဏကြာတော့ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်…. နောက်ထက်ယင်ကောင် တစ်ကောင်ပျံသန်းလာပြန်သည်။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း
တတိယ ဆာမူရိုင်: ဘာလုပ်ပြဦးမလဲဆိုတာ အင်မတန်စိတ် ဝင်စားနေကြပြီ။ တတိယ ဆာမူရိုင် : က သူ.ဓါးကို ဖျတ်ဆို ဆွဲထုတ် ပြီး ဓါးအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုကသ်ည်။ ( မြန်လွန်းလို့ ခုတ်လိုက်တာတောင်မမြင်လိုက်ရဘူး ။)
လူတွေလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ယင်ကောင် ကိုလိုက်ကြည်တော့ ကိုရွှေယင်ကောင်က ဟန်မပျက် ဆက်ပျံ နေသည်။့ လူတွေကစိတ်ဓာတ်ကျသွားသည် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တတိယဆာမူရိုင်: ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင်.
ပရိတ်သတ် ကြီး ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်ကြသည် ။ တတိယဆာမူရိုင်: က “ ဒီကောင် ပျံ တာတော့ ပျံ နိုင် ပါတယ် ..ဒါပေမယ့် ဒီတသက်တော့ မျိုးမပွားနိုင်တော.ပါ့ဘူး”
မပြေးနဲ့ မလွတဘ်ူး ရှေးရှေးတုန်က ပေါ့ဗျာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ မှော်ဆရာကြီးတစ်ဦး ရှိတယ်တဲ့။ မှော်ဆရာကြီးက
မိန်းမလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အရမ်းသန်တာတဲ့။ သူ့မိန်းမကိုလည်း အရမ်း နှမျောပါသတဲ့။ နေ့တိုင်း သူ့မိန်းမကို တအားလုပ်သဖြင့် မိန်းမလုပ်တဲ့သူကလည်း အရမ်းကို ကာမကိစ္စမှာ စွဲလန်းနေပါရော။ တနေ့တော့
မှော်ဆရာကြီးက သူ့မှော်အတတ်နဲ့ ကြည့်လိုက်သောအခါ သူ့ကသေရတော့မှာကို သိရပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့မိန်းမကို ခေါ်ပြီးပြောပါတယ် '' မိန်းမ ငါသေရင် နင် တခြားလူတွေနဲ့ ခံမှာလား" မိန်းမလုပ်တဲသူက
ပြန်ဖြေပါတယ် " လုပ်မှာပေါ့ရှင် ကျွန်မ မလုပ်ရရင် နေမှ မနေနိုင်ဘဲ" အေး အဲဒါဆို နင်ဘယ်သူနဲ့ မှ မအိပ်နဲ့ နင့်အတွက် ငါထွင်ပေးခဲ့မယ်"။ သူ့မိန်မ အတွက် သူ့မှော်အတတ်နဲ့ သူ့ ပစ္စည်းကို ဖြတ်ပြီး ဘူးထဲ ထည်ပြီး သူ့မိန်းမကို ပေးပြီးမှာခဲ့ပါတယ်။ နင်တအားခံချင်လာရင် ဒီဘူးကို ဖွင့်ပြီး တံတွေးလေးဆွတ်လိုက် နင့်ကို သူက လုပ်ပေးလိမ့်မယ် လို့ မှာခဲပြီးနောက် မှော်ဆရာကြီးက သေသွားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့
မိန်းမလုပ်တဲ့သူက တအားဆာလာရင် ဘူးလေးကိုဖွင့်ပြီး တံတွေးလေး ဆွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူ့ကို ဘူးထဲက မှော်ဆရာကြီး ပစ္စည်းလေးက ထွက်လာပြီး တက်လုပ်ပေးပါတယ်။ သူလည်း အဲ့ဒီ ဘူးလေးနဲ့
အိုကေနေပါတယ်။ တနေ့ကျတော့ သူ့ အိမ်ကို ဓါးမြ လာတိုက်ပါရော။ ဓါးမြခေါင်ဆောင်လုပ်တဲ့သူက ပစ္စည်းတွေးတောင်းတာနဲ့ အကုန်ထုတ် ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘူးလေးကိုတော့ ရင်ခွင်ထဲမှာ
ပိုက်ထားပါတယ်။ ကျန်တာတွေ အကုန်ယူသွားပါ ဒီဘူးလေးတော့ ချမ်းသာပေးခဲ့ ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဓါးမြခေါင်းဆောင် က ဒီဘူးထဲ့မှာ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ရှိလို့ သူက အရမ်းနှမျောနေတာနေမှာ ဆိုပြီး ဇွတ်လုယူလာပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ့တပည့်တွေကို မင်းတို့ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီး သွားနှင့် ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ် ဆိုပြီး အဲ့ဒီဘူးလေးကို ယူထားလိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် အထဲမှာ
ဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါရော။ အဲဒီအခါမှာ မှော်ဆရာကြီးရဲ့ ပစ္စည်းကြီးကို တွေ့လိုက်ပါလေရာ ထွီ ရွံစရာကြီးဆိုပြီး တံထွေးနဲ့ ထွေးလိုက်ရာ တံတွေးနဲ့ ထိလကိုသည်နှင့် တပြိုင်နက် မှော်အစွမ်းကြောင့်
ဘူးထဲကထွက်လာပြီး ဓါးမြခေါင်းဆောင်ကို တက်လုပ်ပါလေတော့သည်။ သူက မိန်းမမဟုတ်တော့ ပါတဲအပေါက်တွေ ကို အကုန်လုပ်ပါလေတော့သသည်။ ပြီးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ သူ့ဘာသာသူ
ဘူးထဲပြန်ဝင်သွားပါတယ်။ ဓါးမြခေါင်းဆောင် လည်း အရမ်းကို ပျော့ခွေပြီး မျော့မျော့လေးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မှာတော့ သူကြီးနဲ့ ရွာသားတွေက နောက်ကလိုက်လာရာ လဲနေတဲ့ ဓါးမြခေါင်းဆောင် ကိုဖမ်းမိရာ သူကြီးက ဘူးလေးကို သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ သူကြီးအဲဒီ့ ပစ္စည်းကို မကိုင်နဲ့နော် လို့
ဓါးမြခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။ သူကြီးက ဒီထဲမှာရတနာ ပါလို့ ဒီကောင်နှမျော နေတာဘဲဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ယောက်ကျားပစ္စည်းကြီး ကို တွေ့ရသောကြောင့် တံတွေးနဲ့ ထွေး ပြီးလွတ်ပလိုက် ပါတယ်။ တံတွေးနဲ့ ထိမိလိုက်တဲ့အစွမ်းကြောင့် ဘူးထဲက ကောင်က ထွက်လာပါလေရော သူကြီးလုပ်သူလည်း
ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ထွက်ပြေးပါတယ်။ သူကပြေးလေ နောက်ကလိုက်လေ။ ပြေးလေး လိက်ုလေနဲ့
ရေကန်နားရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဓါးမြခေါင်းဆောင်က အော်ပြောပါတယ်" သူကြီးရေ မပြေးနဲ့ မလွတ်ဘူးဗျ၊ ကျုပ်ကိုဘဲကြည့်တော့လေ မျော့မျော့ဘဲ ကျန်တယ်၊ ခင်ဗျားလည်း ကန်ပေါင်ပေါ် တတ်ပြီး ဖင်သာကုန်းပေးလိုက်တော့"...................................တန့်တန့် ဒန့် ဒန့် ... ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲကွယ်။
" သူ့ဒု က္ခ နဲ့သူ " အိမ်ဖော်မ နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က အသက်ကြီးကြီး.....နောက်တစ်ယောက်က
အသက် ခပ်ငယ်ငယ် ...။
အသက်ကြီးသူ အိမ်ဖော်က ပြောသည် ။
" ငါ တော့အေ..အားလုံးကို ငြီးငွေ့ လှပြီ...တစ်နေ့ လုံး ဟုတက်ဲ့ မမ ..ဟုတက်ဲ့ မမ ကုန်နေရတယ်.."
အသက်ငယ်သော အိမ်ဖော်မလေးကလည်း ပြောသည် ။ အန်ကယ် နဲ့ 
" ကျမလဲ အရာရာကို စိတ်ကုန်နေပြီ..တစ်နေ့ လုံး ဟင်အ့င်း အန်ကယ် ဟင်အ့င်း မနည်း ငြင်းနေရတယ်..." " ဆု မ တောင်း နဲ့" " လူတွေ အမှားနည်းနိုင်သမျှ နည်းနည်းပဲ လုပ်မိကြပါစေလို့ဆုတောင်းချင်တယ်..." " မလုပ်နဲ့အလိုလိုက မွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းနေရတဲ့အထဲ
" အ ကြောင်း သိ တွေ " လူငယ်တစ်ဦးသည် မိမိလက်ထပ်လိုသည့် ကောင်မလေး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ
ရောက်လာသည် ။ သူဌေးကြီးက ပြောသည် ။
" မောင်ရင့်ရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်ကို အန်ကယ် စုံစမ်းထားလို့တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိနေပြီ
အန်ကယ့် အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့...." ယောက္ခမလောင်း၏ စကားကိုဖြတ်ပြီး လူငယ်က ပြောသည် ။
" ကျနော်လဲ အန်ကယ့် နောက်ကြောင်းတွေကို စုံစမ်းထားလို့တော်တော်လေး သိထားပါတယ်..အဲဒါ.ကျနော့်
အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့...."
" အေး..အေး တစ်ခြား အကြောင်းတွေကိုပဲ ပြောကြရအောင်ကွာ.."
" ကြည့် မ ရ လို့သာ ပေါ့ " အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ "့ရတာလဲ.."
" အိုင်..ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြန်ပြီ... မကြာခင် နောက် ကလေးတစ်ယောက် မွေးဦးမယ်ကွဲ့" ယူ့ ဆီမှာ ကလေး လေးယောက်တောင် ရှိနေပြီပဲ..အခု တစ်ယောက်က ဘယ်သူနဲ " ဘယ်သူနဲ့ရမလဲ..အရင် ကလေးတွေလိုပဲ ကလေးအဖေက အီဗန်နော့ ပေါ့ " " အဲ့ဒါဆို သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်မထပ်သေးတာလဲ..." " သူ့ ကို ကြည့်မရဘူး "
" ချော က လျာ သေ ပြီ " အရာရှိကြီး တစ်ယောက်သည် နယ်သို့ရက်အတန်ကြာ ခရီးထွက်ရန် ဖြစ်လာသည်
" သူငယ်ချင်း..မင်း ငါ့ မိန်းမ အကြောင်းသိသူမို့မှာပါရစေ..တစ်ခြားယောင်္ကျားတွေနဲ
တယ်...သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ ချောကလျာ သေပြီ လို့ရိုက်ပေးပါ.." နယ်ထွက်ပြီး နောက် တစ်ရက်မှာပင် ဇနီးဖြစ်သူသည် တစ်ခြားယောာင်္ကျားတွေနှင့်
တွဲခုတ်တော့သည် ။ အိမ်သို့ ခေါ်ပြီး ဟေးလားဝါးလားနှင့် နေသည် ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် အရာရှိကြီး တာဝန်ဖြင့် သွားရောက်
စစ်ဆေးသည့် စက်ရုံသို့ကြေးနန်း ရိုက်လကိုသည် ။ " ချောကလျာ သေပြီ
" အသုဘ ချမည့်နေကို အကြောင်းကြားပါ.."
ချက်ချင်း ဆိုသလို ကြေးနန်း
" ရက် အတိအကျ မသိ .. အသုဘ ရှုသူတွေ လာဆဲ " ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။
" အား မ ကောင်း ရင် ဂျောင်း " ရုရှားတစ်ယောက် ပဲရစ်မြို့ သို့ ရောက်လာသည် ။ ငယ်ငယ်တည်းက
ရောက်ဖူးချင်ခဲ့သည့်နာမည်ကြီး ပြည့်တန်ဆာတန်း
သို့သွားသည် ။ မီးနီကို မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားသော အိမ်တစ်အိမ်၏ အ၀င်ဝတွင် စာတမ်းနှစ်ခု ချိတ်ထားသည်ကို ၄င်း တွေ့ ရသည် ။ " ပိုက်ဆံ
တတ်နိုင်သူများ " နှင့် " ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်သူများ " ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ " ငါက ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူမှ မဟုတ်ဘဲ.၊ ဈေးသက်သာတဲ့ဆီ သွား
မယ်." ဟုဆုံးဖြတ်ကာ ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်သူများ အပေါက်ဘက်သို့လျှောက်သွားသည် ။ တစ်နေရာတွင် " ရမက်ကြီးသူ " နှင့် " ရမက်မကြီးသူ"
ဟူသော စာတမ်းနှစ်ခုကို ထပ်တွေ့ရသည် ။ " ငါက ရမက်ကြီးသူမှ မဟုတ်ဘဲလေ.." ဟု တွေးကာ ရမက်မကြီးသသည့်အပေါက်ဘက် ဦးတည်
လျှောက်သည် ။ နောက်တစ်နေရာတွင် " အားကြီးသူ " နှင့် " အားမကြီးသူ " ဟူသော စာတမ်း နှစ်ခုကို တွေ့ ရပြန်သည် ။ " ငါ..အားကြီးသူမှ
မဟုတ်ဘဲ " ဟုတွေးကာ အားနည်းသူတွေ အတွက် အပေါက်ဆီ သွားသည် ။
တံခါး ဖွင့်လိုက်သည် ။ လမ်းမပေါ်သို့၎င်း ရောက်သွားသည် ။
ဆက် ရှာ မယ်
" မိန်းမဖြစ်သူ လင်ငယ်နှင့်အချစ်စခန်းဖွင့်နေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်ရှေ
့တံခါးဖွင့်သံ ကြားရသည် ။
အမျိုးသမီးက လင်ငယ်ကို အလန့် တကြား ပြောသည် ။
ယောင်္ကျား ပြန်လာတာ ထင်တယ်..သွား....မြန်မြန်ပုန်းချေ..."
လင်ငယ် အိမ်သာထဲ ၀င်သည် ။ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ထုတ်သောက်သည် ။
အခန်းထဲ ၀င်လာသော လင် ယောင်္ကျားသည် ယောင်္ကျားစီး ဖိနပ်တစ်ရံကို တွေ့ ရာ ပိုင်ရှင်ကို လိုက်
ရှာသည် ။ အိမ်သာတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်သည် ။ လင်ငယ်က ဆေးလိပ်
အသောက်မပျက် ပြန်မေးသည် ။ "
ဘယ်နဲ လဲ့...တွေ့ ပြီလား...."
ဟင့်အင်း..မတွေ့ သေးဘူး.. ရေချိုးခန်းဘက် လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်..."
ကုန် ပ လေ့ စေ
မောင်...ဒီနှစ်ဆောင်းအတွက် ဒူဘလွန်းကာ ( သိုးသာရေနှင့် ချုပ်ထားသော
ဆောင်ဝတ်ရုံ ) အသစ်တစ်ထည် "့ ကွာ.."
ဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ဥစ္စာ...ဘယ်လလိုပ် ၀ယ်ပေးနိုင်မလဲ..ဒီစကား နောက်မပြောနဲ အနွေးထည် မကောင်းရင် ကျမ အဆုပ်အအေးမိပြီး ဖျားမယ်..ဘာဆေးမှ
မကယ်ျနိုင်ဘဲ ကျမ သေမယ်..၊ အဲ့ဒီ
အခါ ကျမရဲ့အသုဘစားရိတ်ဟာ ပိုပြီးတော့ ကုန်ကျလိမ့်နော်..ရှင် စဉ်းစားပေါ့.."
ရတယ်..က်ိစ္စမရှိဘူး...ကုန်ပလေ့စေ..မင်းအတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် ကုန်ကျရတာပဲ
ဆွမဲထည့်ကြနဲေ့ နာ် ဟို့ရှေ့ရှေ့တုန်းကပေါ့ ၊ ထိန်တောရွာက ရွာသူကြီး ဦးတာတီးရဲ့သမီး
မေဥသြဆိုသူဟာ အင်မတန်ရုပ်ချောတယ်ဆိုပဲဗျ၊ ဒါပေမယ့် ရွာကလူပျိုလေးတွေက သူ့ကိုတိတ်တခိုးသာချစ်နေကြရတယ် သူကြီးသမီးဆိုတော့ ဘယ်သူမှမပြောရဲကြဘူးလေ၊ မေဥသြကပဲဖြစ်ဖြစ် သကြီးကပဲဖြစ်ဖြစ် မကျေနပ်ခဲ့ရင် ပြောမိတဲ့အကောင်ကတော့ ထိပ်တုံးပဲမဟုတ်လား၊ အင်း.... မေဥသြကို ခိုးပြီးချစ်နေသူတွေအထဲမှာက
တစ်ရွာတည်းသား သံချောင်းဆိုသူလည်းပါတယ်လေ၊ သံချောင်းက အလုပ်အကိုင်သာမရှိတာ ဥာဏ်လီဥာဏ်နက်ကတော်တော်များသတဲ့၊
သံချောင်းရဲ့ကြိုးစားပုံလေးက ဒီလိုပါဗျ.... သူကရွာသူကြီးရဲ့အိမ်နောက်ဖက် ခြုံထဲကနေပြီး မေဥသြကို နေ့စဉ်ချောင်းကြည့်တယ်
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့ မေဥသြဟာ အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေ အိမ်အောက်ကိုဆင်းပြီး တောသူတွေရဲ့ဓလေ့အတိုင်း မြေပြင်မှာ အပေါ့သွားပါလေရော၊ ဒါကိုလည်းသံချောင်းက ချောင်းကြည့်နေသေးတယ်၊ မေဥသြကအပေါ့သွားပြီး အိမ်ပေါ်ပြန်တက်မယ်အလုပ်မှာ သံချောင်းက ခြုံထဲကပြေးထွက်လာပြီး မေဥသြ အပေါ့သွားခဲ့တဲ့မြေပြင်ပေါ်က
ချိုင့်ခွက်လေးကို လက်ညိုးနဲ့ အကြိမ်ကြ်ိမ်ထိုးနေလေတော့ မေဥသြကရှက်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကနေ အိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်တာပေါ့၊
စိတ်ထဲမှာလည်းကြိတ်ပြီးတော့ဆဲတယ် မသာသံချောင်း တော်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်ပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကို ပိတ်လိုက်တော့မှ သံချောင်းပြန်သွားတယ်၊
မေဥသြဟာသံချောင်းကို မကျေနပ်ပေမယ့် ရှက်လွန်းတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောရဲခဲ့ဘူးလေ၊ သံချောင်းကလည်း သူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့မိဘတွေကိုပြောတယ် ကျနော်တော့ သူကြီးသမီးနဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ
မြန်မြန်သာတောင်းပေးပါတဲ့လေ၊ မိဘတွေက ဘယ်ယုံပါ့မလဲ မေဥသြက သူတို့သားသံချောင်းလိုကောင်နဲ့ ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ဒါနဲ့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်မေးတယ်လေ သံချောင်းကတော့ ဒီအတိုင်းပဲပြောတယ် မပြောင်းလဲဘူး ဒါနဲ့မိဘတွေကပြောတာပေါ့ ကဲငါ့သား မင်းတကယ်ဟုတ်ရင်တော့ ဒို့လူကြီးတွေခေါ်ပြီးလိုက်တောင်းပေးမယ် မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ အားလုံးဟာ
မိဘတွေကဟုတ်ပြီပေါ့ နောက်နေ့ကျတော့ထုံးစံအတိုင်း ရွာသူကြီးရဲ့သမီး မေဥသြကို တောင်းဖို့သွားကြတယ်လေ ကန်တော့ပွဲတို့၊ လက္ဖက်အစ်တို့အစုံပေါ့၊ ရွာမိရွာဖတွေကလည်း(၁၀)ယောက်လောက်ပါတယ်တဲ့လေ၊ သံချောင်းတို့လူစုတွေ ရွာသူကြီးအိမ်ရှေ့ကို မ၀ံ့မရဲနဲ့ရောက်လည်းသွားရော သူကြီးကမေးပြီလေ ဟေ့ဘာလာလုပ်တာလဲ ဆိုတော့
ဖြေတာပေါ၊့ သူကြီးသမီးကိုလာတောင်းတာပါ သံချောင်းနဲ့သူကြီးရဲ့သမီး မေဥသြတို့က လူငယ်တွေသဘာဝ လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေဖြစ်နေပြီ ဆိုတော့ သူကြီးကဒေါသပေါက်ကွဲပြီး မင်းတို့တွေက ငါ့သမီးကိုတောင်ဒီလိုပြောဝံ့တယ် ဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်ပေါ့ကွာ မဟုတ်လို့ကတော့ မင်းတို့အားလုံးထိပ်တုံးပဲပေါ့၊ ရွာမိရွာဖတွေကလည်း
သူကြီးကိုကြောက်နေတယ်၊ သူကြီးကလည်း ရွာမိရွာဖတွေကိုအားနာမှုနဲ့ စိတ်လျှော့ထားတယ်လေ ဒါနဲ့လက္ခံစကားပြောကြလေရော သူကြီးကလည်း
ရွာလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားတာပေါ့ ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးနဲ့လေ၊
စကားပြောကြတာက သူကြီး၊ သူကြီးကတော် နဲ့ မေဥသြတို့ကတစ်ဖက် ၊ ရွာမိရွာဖတွေနဲ့သံချောင်းတို့ကတစ်ဖက်ပေါ့
သူကြီး။ ကဲပြောကြစမ်း ဘာတွေလွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်တာလဲ၊ သံချောင်း။ မေဥသြကိုသာမေးကြည့်ပါခင်ဗျာ၊ သူကြီး။ ပြောစမ်း အမိုက်မ ဟုတ်လား၊ မေဥသြ။ သံချောင်းက သေးပေါက်တဲ့နေရာကိုလုပ်တာပါ အဖေရဲ့၊ သူကြီး။ သြော်... နင်ကသေးပေါက်တဲ့နေရာမဟုတ်ပဲ နင့်ပါးစပ်ကိုလုပ်**** ဟာ...နင်တော်တော်မိုက်နော်၊ မေဥသြ။ မဟုတ်ဖူးအဖေ အိမ်နောက်ဖက်က...... သူကြီး။ သြော်... နင်နော် အိမ်နောက်ဖက်မဟုတ်ပဲ ဧည့်ခန်းမှာလုပ်ရမလားဟဲ့၊
(သူကြီးကစိတ်တိုတယ်မေဥသြစကားကိုဆုံးအောင်မစောင့်တော့ဘူး) မေဥသြ။ မြေကြီးပေါ်မှာလုပ်တာ (သူကလည်းရှင်းအောင်မပြော၊ရှက်တာလည်းပါတယ်) သူကြီး။ ဟင်... ဒီကိစ္စကို မြေကြီးပေါ်မှာမလုပ်ပဲ
ဘုရားစင်မှာလုပ်ချင်တာလားနင်က၊ ကဲတော်ပြီကွာတော်ပြီ ရှေ့ဆက်ပြောနေရင် အရှက်တွေကွဲပြီးရစရာတောင် ရှိတော့မှာမဟုတ်ဖူး ကဲ...ရှင်မရေ နင့်သမီးကို သံချောင်းနဲ့သာ ပေးစားလိုက်တော့ဟာ၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သံချောင်းကတော့ ရွာသူကြီးရဲ့သမီး မေဥသြကို လက်ထပ်ခွင့်ရသွားပါသတဲ့ဗျာ၊ သူငယ်ချင်းတို့ရေ... ပုံပြင်ပါနော်
တကယ်လုပ်မိကြရင်တော့ ကျနော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော် ကိုယ့်ပြသနာကို
ကိုယ်သာရှင်းကြပါနော် ကျနော့ကိုတော့ ဆွဲမထည့်ကြဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ဟိဟိ
င ရုတ် သီး
ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ သူ့ ပစ္စည်းအတွက် တော်တော် ဂုဏယ်ူလေ့ ရှိသည် ။ သူ့ ပစ္စည်းကလည်း ဒူးတော်ကို ဖယ်တော်မူပါဖရား
ဆိုတာလို ကြီးမားလွန်းလှသည် ။ မိဖုရားကြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် မိဖုရာအသစ် တင်မြှောက်ရန် အပျိုစင်စစ်စစ်ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်မည်ဖြစ် ကြောင်း လှည့်လည်ကြေငြာစေသည် ။
မိဖုရား ရွေးချယ်ပွဲသို့ဝင်ရောက်လာသူ အပျိုစင်များကို တစ်ယောက်ချင်း
ကိုယ်တော်တိုင် စစ်ဆေးသည် ။ စစ်ဆေးပုံမှာ ရိုးရိုး
လေး ဖြစ်သည် ။ မိဖုရားလောင်း မိန်းမငယ်ကို အတွင်းခန်းသို့ခေါ်ယူပြီး ၀တ်လဲတော်ပုဆိုးကို လှပ်ပြသည် ။ ထို့ နောက် ဘုရင်ကြီးက သူ့ ပစ္စည်းကို
ပြပြီး " ဒါဘာလဲ " ဟု မေးသည် ။ မိန်းမငယ်က " -ီး ပါဖရာ့ " ဆိုလျှ င် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုတော့ပေ ။
နောက်ဆုံး တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားမှ မိန်းမပျိုလေး ၏ အလှည့်ရောက်လာသည် ။
ရုပ်ရည်ရူပကာမှာ သနားကမားလေးနှင့် ကိုယလ်ုံး
ကိုယ်ထည်လေးမှာ လည်းစွဲမက်ဖွယ် ဖြစ်သည် ။ ထုံးစံအတိုင်း ဘုရင်ကြီးက မေးသည် ။ " နှမငယ်..ဒါ ဘာလဲကွယ့်.." မိန်းခလေးက အထူးအ
ဆန်း မြင်ရသလိုကြည့်ပြီး ဖြေသည် ။ " ငရုတ်သီး ပါ ဖရာ့.." ဘုရင်ကြီး သဘောတော်ကျပြီး ရယ်သွမ်းသွေးသည် ။ " နှမငယ် ..တယ်လည်းရိုး
လှ အလှ ချည်ကိုးကွယ့် ..ဒါ -ီးတော်လို့ခေါ်သကွဲ့မှတ်ထား.."
" မသိဘူးဖရာ့...ဖရာ့ကျမ ကြုံဘူး မြင်ဘူးသမျှထဲမှာတော့ အသေးဆုံးမို့ 
ငရုတ်သီးလို့ထင်မိကြောင်းပါ ဖရာ့ "
ပဲမြစ် ဇာတ်လမ်းက ဒီလို ... တစ်ခါက အရမ်း ဇီဇာကြောင်တဲ့ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူ့ ဇီဇာကြောင်တာကတမျိုး၊
သူများသုံးပြီးသားပစ္စည်း မသုံးချင်၊ သူများစားပြီးသား အစားအစာ မစားချင်၊ ယုတ်စွဆုံး ရေတောင် သူများသောက်ပြီးသားခွက်နဲ့ မသောက်ဘူးတဲ့။ အဲ ... လူပျြို ကီးလဲ ကြာတော့ တစ်ကယိုတည်းနေရတာပျင်း
မိန်းမ လိုချင်လာသပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း မိန်းမဆိုလဲ သူများလုပ်ပြီးသားမလိုချင် အပျိုစစ်စစ် ဆိုစစ်စစ်မှ
လိုချင်သတဲ့။ အဲဒီတော့ သူ့အကြံနဲ့သူ သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးတွေ့ပြီဆိုရင် သူ့ပစ္စည်းကြီး ထုတ်ပြပြီး ဒါဘာလဲ လို့မေးတော့တာပဲ။ ဟိုက ရွှေပန်း၊ ငယ်ပါ၊ ဖွားဖက်တော် စသဖြင့် ပြန်ဖြေရင် ဒီမိန်းမ အရင်ကတည်းက ဒါမျိုး အတွေ့အကြုံရှိဖူးလို့ပဲ လို့မှတ်ပြီး နောက်တစ်ယောက် ရှာတော့တာပဲ။
အဲလိုနဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့ပစ္စည်းကို အဲဒါ ပဲမြစ် လို့ပြောတဲ့မိန်းမနဲ့ တွေ့ပါလေရော။ လူပျိုကြီးလဲ အားရဝမ်းသာနဲ့ ဟ .. ယောက်ျားလေးပစ္စည်း မမြင်ဖူးတဲ့မိန်းမနဲ့တော့ တွေ့ပြီ။ သူ့ခမျာ ဘာမှန်းမသိလို့ သူမြင်ဖူးတဲ့ ပဲမြစ်လို့မှတ်နေရှာတယ် ဆိုပြီး အားရဝမ်းသာ ကောက်ယူလိုက်ပါလေရော။ အဲလိုနဲ့
အိမ်ထောင်သက်သာ ကြာလာတယ်၊ တစ်လကြာလဲ ပဲမြစ်၊ နှစ်လကြာလဲ ပဲမြစ်၊ သုံးလကြာလဲ ပဲမြစ်၊
ဒါဘာလဲ လို့မေးလိုက်တိုင်း ပဲမြစ် လို့ချည်းပဲ ဖြေခံနေရတော့ လူပျိုကြီး စိတ်ညစ်လာပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ မိန်းမရေ ... ဒါပဲမြစ်မဟုတ်ဘူးဟ၊ -ီး လို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတိုင်းမှာပါတယ်ဟ လို့ပြောပြသတဲ့။ မိန်းမ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် လူပျိုကြီးမှာ အသက်တောင် ဘယ်ကထွက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားသတဲ့။ (အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း)
ပဲမြစ်လို့ပြောမှာပေါ့ ရှင့်ဟာက ကျွန်မမြင်ဖူးသမျှထဲမှာ ပဲမြစ်လောက်ပဲရှိတာကိုး ... တဲ့။
အချစ်တက္ကသိုလ်တွင် ဆင်ဆက်ထားသော လိင်မှုရေးဂာဟာသစပေများ ကဏ္ဍကို တထိုင်တည်း အလွယ်တကူဖတ်ရအောင် PDF ဖိုင်အဖြစ်ဖန်တီးပေးလိုက်သည်။
ကျွနပ်ု တ်ိုေ့ ကြာင့် စာကောင်းပေမွနမ်ျား ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကယ်ွစေသင့် ဒေါက်တာချက်ကြီး